Waxaan u dhaqaaji habboonayd On? — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Waxaan ognahay inay jiraan dad badan oo la yaabanahay sababta ay maxkamad this gaar ah ayaa qabsaday dareenka aad u badan. Qaar kale la yaabanahay sababta ay qaar ka mid ah dadka waawayn madow yihiin si deg deg ah ka nixi Trayvon Martin, inkastoo xaqiiqda ah in uu lahaa arrimaha isaga u gaar ah. Ka dib oo dhan, ma jiro oo inaga mid ah waxaa ku jiray oo garan mayno waxa ku dhacay. Iyada oo taasi waa run, Waxaan arkaa anigoo ku dareen maal mashaqadan oo dhan. Aanan u hadli karin, waayo, qof walba, laakiin waxaan kuu sheegi karaa sababta aan u helay inaan naftayda jixinjixa la Trayvon Martin oo qoyska ah.
Marka aan maqlo oo ku saabsan da'da yar yar oo madow guriga socda ka dukaanka, iyo ninkii la wareegay uu ahaa dambiile ah ka hor inta garanaya wax isaga ku saabsan, Waxaan la xidhiidhi karaa. Waxaa laga yaabaa in aadan awoodin in ay. Waxaa laga yaabaa in aad marnaba la raacin agagaarka dukaanka waaxda a by waardiye sabab la'aan ah. waxaan leeyahay. Waxaa laga yaabaa in aad waligaa qaylo haboon dukaanka karaaniga ee aad in uu ka tago, haddii loo maleeyo in blackberry ah on your hip waa qori in aad qorsheyneysid inaad isaga ganaan. waxaan leeyahay.
Waxaa laga yaabaa in aad marnaba dhoola caddeeyey, oo dadka salaamay aad on wadada maray, oo kaliya in ay iyaga ka fogaadaan xiriirka indhaha, xajin lahaayeen, oo haddiiba way socdaan. waxaan leeyahay. Waxaa laga yaabaa in aad marnaba laga saaray derbiga ah, lagu qabtay qori caaradii, iyo jeebadeeyay by booliska (kuwaas oo la filayo in aad ilaaliso) maxaa yeelay, waxaad "u eg tuhmane baannu filanaynay.” waxaan leeyahay (iyo waxaan waxba sida la tuhunsan yahay in eegay). All oo dhacdooyinkaa ka mid tahay ilmo yar oo midkoodna si weyn u hanjabay noloshayda. Inta badan, hadii aan dhan, saaxiibbaday madow ayaa soo maray xaalado la mid ah. Markaasaa kuwa kale oo aan tiro lahayn ayaa adkaystay badan, aad u xun.
Haddii aad marnaba la kulmeen sort this ee wax, Waxaa laga yaabaa in aadan fahmin sababta kiiskan macno si qoto dheer nala. Laakiin markii aan maqlaan story, Waxaan maqli aan story. Markaasaa story aabbahay. Markaasaa story wiilkayga. Waxaan wax fikrad ah waxa ku dhacay ka dib markii Mr. Zimmerman ka dhigay fikrado ku saabsan ninkaas dhallinyarada, laakiin ka hor dhaceen ee, waxaa jiray waxba aan caadi ahayn oo ku saabsan dhacdada. Waxaa dhacaya maalin kasta.
Ku Wajahan waa dhab, waana inta badan jinsiyadeed. Dadka qaar ayaa u maleynayo inay hadiyadda ay ogaadeen qof kaliya by eegaya qof. Just sida direyska buluug madow iyo calaamad ka dhigan tahay fulinta sharciga, maqaarka madow iyo hoodie ah waxay ka dhigan tahay lawbreaker. hadalka No dhacay, laakiin ah warqada shanqarta khayaali ah ku lifaaqan. qof gacan waxaa la wareegay. Waxay u malaynayaan ku saabsan image Burcad arkeen on TV, ama khatarta waalidkood iyaga oo u sheegay oo ku saabsan, ama denbi aad u xun in ay goob - oo waxay qotomin oo dhan Alaabtoodii in qofka ay marnaba xitaa la kulmay. Waxaan marnaba xaq u leedahay in gebagebo la qasbay ku saabsan yahay shaqaalaha ah xataa hadii ay soo baxayso murugoon.
noocaas ah fikrado waa karaahiyo iyo been. Ilaah wuxuu sameeyey aadanaha oo dhan in uu image leh qiimaha iyo qaayaha. Weli oo dhan oo naga mid ah waa Dambi badan oo ay ku guuldareysato inay soo bandhigaan image Ilaah sida inaannu. Mid kasta oo inaga mid ah hal dembiyadeenna u noqon karaan, trust Masiix, iyo in la sameeyo xaq by our abuuraha. Laakiin Siiyay Goolhaye cunsuriyadda iyo doorto oo dadka runta waa in lagu dabaqo. Midab sheegay, "Waxaan ahay qiimo leh oo wanaagsan, oo dadkan oo dhammuna waa kuwa sharka leh.”
caasinimo Tani faanbadan ka gees ah Ilaah iyo mucaaradka in ay Injiilka uu noqon waa in ay xiiseyneyso dadka Ilaah. Waa in aynaan iska dhaafin, oo waa inaanan waxaan ka cabsan in aad wax uga qaban. Injiilka waa in Ciise u yimid inuu dhinto, waayo labada dembilayaasha cunsurinimo iyo non-cunsuri. cadaawayaashiinna hore ay noqon karaan saaxiibo isaga, iyo ka faa'iideystaan ​​nimcada dhabta ah isku. Yaa sarre u qaadi doonta, wax looga qabto arrintan, naadiyaan runta? Haddii aad u malaynayso in tartanka waa arrin ay dhacdo in this, ma waxaad u diidi kartaa tartanka in uu yahay arrin ee nolosha aad u badan oo naga mid ah maalin kasta.
Maxay Ma waxaan Hadda?
Sidaas sidee baannu ka jawaabaan? Waxaa laga yaabaa in aynu ka guurto on in mid ka mid dareen. Waxaa laga yaabaa in aynu joojin ku dooday ku saabsan waxyaabaha aan aadan hubin oo ku saabsan. Annagu garan mayno si faahfaahsan kasta hal habeen in; haddii kale waxaan loo yeedhay lahaa sida markhaatiyaal. Oo haddii aan jeclaan xukunka, waxaa ka mid ah aannu gacmahayaga.
Waxaa laga yaabaa in aynu joojin ku dooday, iyo bilowdo tukanayay. U soo ducee qoysaska. U soo ducee inay Ilaah u dhawraan u yabooha Wiilkiisa diri inuu keeno caddaaladda kaamil ah. Rabbigu wuxuu uma baahna sharciga yiqiin inuu ku doodo xaaladaha ay, iyo Uma baahna caddayn bandhigay. Waxa uu leeyahay uma baahna xeerbeegtidu inay isaga siiyaan aragti. Wuxuu oo dhan arka, og yahay oo dhan, iyo xaakinno caddaalad kaamil ah.
Laakiin in dareen kale, waxaan xaqiiqo ah ugu waa in aan ka dhaqaaqo. Waa in aynaan joojin lahaa ka hadalka cunsuriyad ah in weli hadheeyay ee dunida. Haddii aad u soo maray, caawiyo kuwa aan u soo mareen si ay u fahmaan. Dulqaad leh saaxiibadaa sida ay clumsily doonaya in ay fahmaan waxa aad soo martay. Oo fadlan ha u tijaabiyo iyaga xaq by fulinta sumadaynta xun. Trust Masiix, oo Ilaah u barya Ilaah habee lahayd qof si uu u eego sida uu.
Haddii aad marna on dhamaadka qaata cunsuriyad, nixi kuwa. Baro aragnimadooda. Waxaad ma jeclaan karaa qof haddii aad iska indha ama kama dhigaan walaaca ay. Fadlan marna u qaadan in dadku ay kaliya ka cabanaya iyo ciyaaro ah "card tartanka.” Raadi si ay u fahmaan, oo ay ixtiraamaan xaqiiqada ah in qaar ka mid ah oo naga mid ah ku nool yihiin xaqiiqooyin kala duwan oo ay leeyihiin in ay u adkaysan tijaabooyin kala duwan.
Wax kasta oo aad sameyn, kaliya ma joojin hadalka ku saabsan.
jonathansampson • August 19, 2013 at 10:09 waxaan ahay • Reply
T.L., Waan ka xumahay in aad u soo maray qaar ka mid ah alaabtii xunxunna, laakiin kiiskan gaarka ah ma ahaa milicsiga ah cunsuriyada ee America. George ma ahaa xataa la hubo ee tartanka Trayvon ilaa dambe ee 911 call, marka Trayvon bilaabay xagga jihada socda. Trayvon loo arki jiray shaki leh sababtoo ah waxaan marayay inta u dhaxaysa iyo dibba dhismayaasha dhaadheer, muuqashada in la eegayaan daaqadaha. Xusuusnow, bulshada this ayaa xarig ah fasax-tago iyo la jabsaday. Taasi waa sababta Trayvon eegay laga shakiyo. Haddaan uu la dul maraan iftiinka jidka-laambadihii degaanka, George ma lahaa aqrinin isha.
Waxaan dareemayaa cabsi badan in nin dhalinyaro ah uu ku dhintay; lakiin waxaan dareemayaa ka sii cabsi badanna ku sameeyey ayaa daba socday oo sabab u ah kiiskan lagu taswiiray sida tusaale ahaan ka mid ah cunsuriyadda oo dhan. Shan dhalinyaro madow ee Baltimore qabtay nin Hispanic qori caaradii shalay ku garaaceen isagii “waayo, Trayvon.” LAPD ayaa ka jawaabaya rabshado yar tan iyo markii xukunka oo aan eed yimid. Tani cunsuriyadda been abuur ah waa karaahiyo, iyo waxa uu dhaawicid dad, Iyaga ha ka caawinta.
Maxay sidoo kale i dhibayso waa in alaabtii aysan taasi dhicin oo kaliya in ay dadka madow. Waxaan la daweeyey aad u xun oo ay igu filka madow ee dugsiga dhexe. biliij qalad hoos, xoogsheegtay, iyo jees jeesi. Just dhowr bilood ka hor ayaan soo booqday campus ah college oo dhan-madow-lab oo aan ku tabaruca ugu Black Girls Code. Just isku dayaya in ay ku socdaan in ay gaariga waxaan la kulmay aflagaado iyo hanjabaad ka soo wiilasha college kuwaas oo aan u malaynayaa in aan iska iyagoo campus.
Hooyo kaliya dhowr bilood ka hor halkan Georgia waxaa soo dhawaaday by a 17 sano jir ah iyo 14 sano jir ah (mar kale, labada madow) at 9ka oo iyada toogtay lugta, iyo iyada 13 bisha ilmaha jir wejiga. Taasi waxaa laga yaabaa sababta ay dadku u xukun jecel baxay waqtiyo. waxa laga yaabaa in dharka? waxa laga yaabaa in dhaqanka hip in freaks dadka ka soo? Waxa suurto gal ah. (Sad haddii run, laakiin la fahmi karo).
Wax kasta oo arrinta waa, Waxaan rajaynayaa oo Ilaah u barya xal caawiya naga badbaadiyo nolosha carruurta tegaynaa yar, iyadoo aan loo eegin jinsigooda. Waan ka xumahay mar kale in aad soo maray waqtiyo adag ku eryay qaar ka mid ah, laakiin samaynta ay taasi dhacdo Trayvon / Zimmerman oo ku saabsan tartanka aanay ku caawin fahankeenna, way daruuraha.
YOURSTRULY • August 19, 2013 at 10:10 waxaan ahay • Reply
dhibic u fiican oo si fiican u dhigay. Midab ayaa gudbay iyo waxa uu noqday wax cusub “muuqaalka” iyo dhaca u dhexeeya dadka naftooda u arkaan inay kala duwan. nin ee isku joog oo gabadhii in a kab yeelmeheed ECT… muuqaalka oo dhan ku wareegsan oo ay adag tahay in ka dhunta waa, No dheer waa xadidan oo ay ku midabka ah ee kuwa maqaarka. Ma aan dhicin ka hadlo dambiyada kale ee dulmiga interracial more sharta. Maxay tani ka mid ah? Waxaan kaliya rajeynayaa karaa in midab aan la sii waday sida Casaaseel iyo dadka leedahay kartaa ilaa maxay gelyo xumada ka badan naftooda iyo aqbalo kasta oo kale oo. Muuqaalka waa murugo, laakiin xitaa Trayvon ka qortay “buskudka cad”. Sidaas ogolaanaysaa dhinacna jirin, laakiin aragto oo dhan xaglo. Beyond shaki macquul ah, ma eed.
Marvin Lee McManus • August 19, 2013 at 10:11 waxaan ahay • Reply
Maxaa i dhibayso waa in aynu nahay si deg deg ah in ay aaminsan yihiin been George Zimmerman u sheegay oo ku saabsan sida Trayvon Martin ayaa waxaa baaraya daaqadaha guryaha, kuwaas oo bulshada this. Mar labaad, ma jiro oo inaga mid ah waxaa ku jiray Ilaah wuxuu arkay Ibtilo oo dhan iyo waa in la tiriyaa isaga iyo isaga keli hor. Maxaa igu irks waa xaqiiqada ah in aan u leeyihiin in ay sii hor iyo dib ula dhan this socday waxa ku saabsan qofka this dembi this qofka this cad laakiin waxba madow waxaa lagu sameeyey. Taasi ma aha wax soo saar leh oo dhan. Waxaan ka maqashaanna qeylin ku saabsan dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ah helitaanka lug iyo samaynta ku saabsan tartanka, waxaan oo dhan qayb ka ciyaaraan. Waxaan idinka dambeeyaan in arrinta waa in la warbaahinta news iyo dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda aan sokeeye ama dad kale oo ay ogaadaan tartanka in door weyn ahaan ka badan la qirtay. Waxaad arki, warbaahinta ku badhaadho on abuuraya muran sida ay u fiican ratings ay. Markii ugu danbeysay ee aan hubiyaa, warbaahinta waaweyn ee warbaahinta lama ay leedahay tirada yar. Waa jacaylka lacagtu waa xididka xumaatooyinka oo dhan. Markii aan sida dadka ku badan yihiin walaacsan samaynta faa'iido ah sida soo horjeeda dhib ah in aan ku dul bulshada durkiyo, waxaa jira dhibaato weyn oo leh in. Waxaan ku hanweynahay in la yidhaahdo inaan anigu ahay mar kale dhalan ilmo Ilaah. Taasi ma waxaa in la yidhaahdo in aan ku tuuraan sabab daaqadda oo dibadda ah. Taasi micnaheedu waa in in runta waa mar walba soo dhawaynaynaa eegin jinsiyaddaada. The untruths aan kala sooc lahayn u sheegay ka dhanka ah ninkaas dhallinyarada ah, iyadoo aan loo eegin inuu la soo dhaafay, iyo characterizations cadaalad daro naftiisa iyo tan iyo Rachel Jeantel, oo dhan tagaan si ay u caddeeyaan tartanka in arrinta ma. Waxaa i yeelo si ay qalbigayga in maxkamad this dhamaaday sida ay u sameeyey, waayo, Trayvon Martin u muuqataa in lagu dilay laba jeer. The runta murugo dhabta ah waa, waxaa jira la'aan ah u naxariistay, maxaa yeelay ilmo, iyadoo aan loo eegin fikirkaaga isaga ku saabsan, naftiisa u lumiya Jaahiliina iyo waxa macno ah ma waxa uu tartanka uu ahaa. qadarka Murankii No abid soo dejin doonaa Trayvon iyo dib ma jirto ka cabanaya la doonayo in la keeno ku saabsan xukun oo uu gacankudhiiglaha. Waxa aynu u baahan tahay inaad samayso waa run ahaantii noqon more naxariis xagga kasta oo kale oo aad weydiisan kartaa nafteena, maxaa jira, haddii wixii aan ilmaha ama kale jecel yahay mid ka mid ah. Marka laga kan dembiilaha ahaa ama aan ahaa, aad dareento in ay si la mid ah? Just, sababtoo ah FL uu leeyahay sharciga ah macnaheedu ma aha in sharciga trumps ereyga Ilaah. Wax kasta oo dhacay, waxaad si Waa inaanad qudh gooyn? Caddaalad Ilaah had iyo jeer ku adkaan doonnaa. Hadda, Waxaan u tegayaa inaan dib u fadhiiso oo sugaya in ay arkaan oo ma aan maqli doono ama qalbiga this post fahmaan iskuna day inaad ii dugsiga sababta ay u maleeyaan dareen diidmo ah weli la Afuufi Suurka oos ka mid ah saamiga.
jonathansampson • August 19, 2013 at 10:11 waxaan ahay • Reply
Waxaad qiraysaa in midkayana ee waxaa jiray, laakiin waxay sheegeen in George ahaa ku jiifay ku saabsan Trayvon raadinaya laga shakiyo. Haddii aad halkaas joogin, waxa sabab samayn aad u haysaan waca George beenaale ah?
Xaggee ayaad ka heli fikradda tartanka in qeyb ka qaatay this? George tusaale caruurta madow, qaaday gabar madow si prom, oo wuxuu lahaa saaxiibtinimada iyo ixtiraam of kiiyoo kale ee deriska kuwaas oo u marag furay in uu ahaa nin ka mid ah dabeecadda wanaagsan.
My lo'da runtii waa warbaahinta, kuwaas oo u yimid xaq u baxay oo iridda la jinsi-jirrabayeen oo wacaya Zimmerman a “white-Isbaanish,” si ay u dab u dhexeeya madow iyo caddaanka bilaabaan. Ka dib oo dhan, haddii aysan jirin dacwo, iyagu ma ay iibin kartaa meel ad.
waan hubaa haddii George iyo Trayvon tegi karin iyo dib u dhex maraan fiidkii in, waxay labada lahaa wax ka duwan samayn. Tani ma beddelo xaqiiqda ah in Trayvon (ma wiil, laakiin nin) dhintay halka dherersan Zimmerman, madaxiisa yaacaya ee la taaban karo ku celceliyeen. Tani waxa uu ka dhashay cadaymaha muujinaya Wasaqda cawska on Zimmerman ee dib u, iyo sidoo kale marag il-marag ka yahay inay Zimmerman ahaa on hoose.
Waxaan aad uga xumahay dhimashada ilmaha, laakiin si ka badan u murugooday by edbinta iyo qaab nololeedka in ilmaha la sara kiciyey gudaha iyo hareeraha Waxaan ahay. Sida Jeantel aad si cad u sheegtay, ayay ka timaaddaa meel aan in dadka cad fahmi lahaa. meel A halkaas oo dhalinyarada si joogto ah sigaar dheri, meel ay dadku cad waxaa loo yaqaan “buskudka”, iyo in ka badan. Tani nololeed hip-hop la doonayo inuu sii dilka baxay carruurta.
Waxaan la shukaansi gabar madow markii aan ku noolaa sano Chattanooga dib oo lagu dhibaateeyay by facooda iyada yeelay, waxay ahayd “white-simaha” gaartid waxbarashada. Halkee maskax this ka timid? Waxaa hubaal ah ma aha qalad dadka cad in carruurta yar yar madow yihiin qosleen carruurta kale madow yar oo isku dayaya in ay sii badnayeen nolosha.
Waxaan isku dayayaa inuu sameeyo ka caawiyo inay. Sida Injineer software ah waxaan si iskeed ah iyo gacan faafin jacaylka ah ee technology iyo barnaamijyada ka mid ah gabdhaha dhallinyarada ah ee ku salaysan Atlanta madow, dadaalladii cajiib ah sida Black Girls Code shaqeeya. Hadda kids kuwaas oo dhan si ay u eegaan ilaa waa kaftanka sida Nikki Minaj, iyo wannabe-tuugo heeso raab ah ku saabsan galmada, lacag, iyo kabaha.
Waxaan ku guuldareysteen in caruurta madow tegaynaa yar.
Waa maxay ujeedada aanu ku dhawaaqay in aad ku taariikhaysan gabar madow marka aad ahaayeen in Chattanooga adeegi? Ma aha in aad in uu ku dhawaaqo in ii ii in ay ixtiraamaan RAYIGAAG. Taasi waa wax aad u fudud u soo jireenka ah. Xaqiiqada ah in ay kuu caawiyaan dhalinyarada yar yar madow ma idinka soocay kasta oo muwaadiniinta kale ee cad midkood. Ma dhahayo in ay noqon celceliska ama ixtiraam laakiin waxa idishay looga shakiyay. Gabadha madow aad loo isticmaalaa in taariikhda ma aha qofka kaliya ee madow u xanuunsataan, nooc kasta oo jeesi haddii ay tahay qof ka cad, qof madow, ama qof kasta oo kale. Hadda, Anigu ma dhihi waxaan halkaas joogin. Laakiin aad xoqin been, aad had iyo jeer ka heli tuug. Just, sababtoo ah George Zimmerman ku xusan, waxyaalahan oo dhan ku saabsan saaxiibo madow, iyo la socosho carruurta madow, mar kale, taas macnaheedu maaha wax. Ever maqlay Munaafaqu ereyga? Sidoo kale, haddii la da'ayo iyo waxaan isku dayayaa in aan si aad u hesho guriga, Waxaan aadan haysan waqti ay la ayaar in daaqadaha qof. Laakiin haddii aan kaliya la dilay qof aan ku fikiray waxay ahayd laga shakiyo, Waxaan ku khasbannahay in aan isku dayaa inaan sharaxaad ka shaki kuwa. Waxaa loo yaqaan embellishing runta. Dhammaadka maalinta, uusan u leeyihiin in ay i wajihi. doono; Si kastaba ha ahaatee, wajihi Ilaah, Haa, wuu ka waayay, iyo in kastoo aan ka niyad jabay leh xukunka, adiga ama qof kale la yareeyo karo xaqiiqada ah tartanka aan ka ciyaaraan door ku dhacdo this; maxkamadda, warbaahinta, iyo xataa hadda. Haddii tartanka ma qayb ka mid ah ma ciyaari, midkoodna comments kuwaas oo kala hadli doono oo ku saabsan wax badan. Iyo ma ahan oo keliya ka mid ah dadka madow. Waxaa la yaab leh la ii sheegay in aad la hadasho oo ku saabsan walxood raabka in kids waxaa kor u eegay sida haddii ay carruurta oo keliya madow oo iyaga jeclahay. carruurta White yihiin taageerayaasha weyn ee Nikki Minaj iyo Lil Wayne ayaa ka badan qof kasta oo kale. Marka aad qabtid dhaqan of kids cad in qadaadiic karaa muddo, “wigger”, fadlan ha naftaada ma Doqon galay Mu'minaadka ah waa dadka keliya madow. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira nacasnimo labada dhinac iyo nacayb labada dhinac, laakiin fadlan iigu tudh marka aad isku daydo in rehash dhibcood ah in aad rabto in aad si ay u muujiyaan sababta George Zimmerman lagu waayay.
jonathansampson • August 19, 2013 at 10:12 waxaan ahay • Reply
Sir, Waxaan la hadlaya oo ka aan waayo-aragnimo shakhsi. Taasi waa sababta aan la hadlay oo aan hore ee Tennessee, taasina waa sababta aan lagu tilmaansado aan ku lug dadaallada abuuray inay u adeegto carruurta yaryar madow. Waxaa wax laga xumaado waxaan ku siin karaan maraggaygu buuxa, oo weli la tixgeliyaa kaliya kale oo cad-dhilif by dadka kale.
Waan ogahay hore ma ahan gabadha keliya madow si aad u ixtiraam la'aan. Waxa aan ku fiiqaya waa in carruurta yaryar ee madow ayaa soo socda in deegaanno aan dhiiri wanaagga qof ahaaneed. Tani ma aha kiiska for dhan oo iyaga ka mid, laakiin in aan waayo-aragnimo shakhsi waa uncomfortably caadi ah.
Waxaad wici George Munaafaqu, laakiin mar dambe, oo ku salaysan waxa? Ma og tahay George? aad habeenkii in ay jireen? Ma ahan in George uu sheegay in uu lahaa saaxiibo madow, waxa marag shakhsi ahaaneed ee kiiyoo xaafadda oo isna hadal isaga amaanay. Sidaas waxa sal waxaan wici kartaa inuu qof su'aal marka dhan caddaynta soo jeedinaya in isagu ma aha, iyo weligii, cunsurinimo ah?
Haddii tartanka door, halkaas oo ma cadayn show ah in? Xusuuso kaliya ee tartanka waxaan leenahay kiiskan oo dhan ku jiray erayadii Jeantel, kuwaas oo uu sheegay Trayvon yeedhay George a “cracker dameer creepy,” iyo ka dib a “nigger.” faallo The cunsurinimo ah ka Trayvon yimid, ma George. Jeantel u marag furay in iyada oo goobta, taasi waxa weeye waxa ay ugu yeedhaan dadka cad.
Waxaan ula jeedaa ha loo midabeeyo carruurta u caddaa sida nooca qaar ka mid ah malaa'ig. Waxaan la hadlayaa ee saameynta dhaqanka carruurta madow oo kaliya sababtoo ah waxaan ka hadleynaa Trayvon in tusaale ahaan this. Waxaan badan bukooday maskax tuug ah carruurta yar yar oo cad ka mid ahay, sidoo. Wiilkaygiiyow, waa kan bi-midab, ma kori doono la surwaal uu ku dhawaad ​​jilbo joogay isagoo, shirts oversized, iyo aragti ah in la xidhiidhaa arxandarro iyo fasirtaan. Ma doonayo in ay u arkaan mid ah kids cad, kids madow, kids Isbaanish, ama qof kasta oo kale. Halkii, Waxaan doonayaa in aan arko qarnigan soo socda fiican isu.
Waan ku jeclahay, walaalkiis. Oo waxaan mahad aad hamiday. Waxaan ahay qalbi qaboojiyey by xaqiiqada ah in aan labada u barya iyo daryeel ku saabsan qarnigan soo socda, oo aan doonayaa in aan arko dheeraad ah oo ku guuleystaan ​​ka badan sidii hore. Ilaah ha barakeeyo.
Marvin Lee McManus • August 19, 2013 at 10:12 waxaan ahay • Reply
Jonathan, tani waxaa la meel si degdeg ah u socday. i ma akhriyo post dhan, maxaa yeelay, Anigu waxba ma aan isku dayaya in ay khilaaf aad la. Bal i daa in la yidhaahdo, Anigu kuuma aan yeedhin George Zimmerman Munaafaqu. Waxaan si fudud u dhigay tixraacayo erayga. Ma waxaad tahay mar kale ku dhashay ilmo Ilaah? Haddii ay sidaas tahay, sababta aan dib u soo bantering? Waxa aan isku dayaya in ay caddeeyaan. Waxba igama gelin waxa ay tartanka Trayvon Martin ayaa, ayuu naftiisa u lumiya markuu ma aad haysan. Waxaad ku xusan in aad post kale oo uu ahaa nin dhallinyaro ah. No, isagu kuma uu jirin. Sida xun sida aan rabno in aan isaga u noqon sidaa darteed George Zimmerman waa sii xaq in uu naftiisa u qaadan, uu weli ahaa ilmo. 17 sano jir uyeelaysaan kuwo ilmo. Waxa uu ahaa ma koray. Waa si murugo leh kala fogaansho u dhacay iyo madow iyo caddaanka oo fadhiya dib sida tan waa ciyaar iyo hadba kooxda kor uqaadi kartaa dhibcaha ugu badan ku guuleystay. Taasi waa xaq Caraabaah murugo. Haddii Trayvon Martin ayaa caddaan iyo George Zimmerman ayaa madow, weli waxaan dareemayaa lahaa si la mid ah ayaan hadda dareemaan. Laakiin runta naxdinta leh waxay tahay, ayaa George Zimmerman jirtay madow iyo caddaan ahayd Trayvon Martin, taasi oo ka dhigan natiijo badan oo kala duwan oo uu lagu maalinta qabtay lahaa 1, oo taagan dhulka ama aan iyo xukunka ugu hubaal ay noqon lahaayeen kuwa badan oo kala duwan. Ogaaw in aad xor inuu i Suuban on kasta warbaahinta bulshada aad rabto haddii aad rabto in aad hesho u dareento isku qofka aan ahay; Si kastaba ha ahaatee, markan, Waxaan samaysay dib u soo socday maxaa yeelay, waxaa sidaas ma aha meel kasta socday. Waxaan mahad jawaabahaaga in kastoo.
Nathanial Poling • August 19, 2013 at 10:13 waxaan ahay • Reply
Marvin, aad u baahan tahay in la akhriyo posts aad… aad ka weerarka tan iyo bilowgii halka weli isku dayaysa in ciyaari ah “dhex-dhexaad ah” kaarka. Waxaad u yeedhay Zimmerman beenaale ah iyo gacankudhiigle, ka dibna ay weeraraan walaalkaa cad oo waxyaalahaas ka hadalka sokeeye. Waayo, mid, Zimmerman waa Hispanic ah.. Weligay ma aan maqlay hal qof wac Madaxweyne Obama oo cad iyo hal dhibic oo keliya ay muujinaysaa aad eexda. My opinion shakhsi waa in warbaahinta this afuufeen dagaal tartanka marka arrinta run ahaantii waxay ahayd magaalo hoose ka dhanka ah agagaarkeedii. Waxaa jira dabeecado gaar ah sida socodka oo u dhexeeya guryaha aan caadi hoosaadyada ama bulshooyinka markaas dajisay. Kasta oo qof soo jeeda xaafadda ka heli lahaayeen inay tani tahay dabeecad cajiib ah. Maxaa dhacay ka dib la weligiis dooday doono mid ka mid ma waxaa ka mid ahaa nin marka laga reebo iyo xeerbeegtida eegney dhamaan wixii cadeymo ah oo ay xukuntay in uu sheekada kor ku filan si aan isaga ku caddayn.
Marvin Lee McManus • August 19, 2013 at 10:13 waxaan ahay •
Nathanial, Anigu ma weeraray qof. Waxaan si fudud u la wadaago aragtidayda. In kastoo ay xoog badan yihiin, waxay anigaa iska leh. Waxa ay noqon doontaa wax dheeraad ah oo ku habboon si aad u odhan
“Waxaan dareemayaa in aad la mid ah weerarka qof”. Waan ogahay sida aan guud ahaan u yimid iyo anigu ma weeraraan Jonathan at dhan. fikradaha Our kala duwan iyo innaba naga mid ah ayaa la beddelo dhibcood of view our, laakiin waxaan wali wada. Isagoo ka hadlayay of eexda, idinkaa sidoo kale waa mid aad u muuqata. Waa maxay macnaha George Zimmerman ayaa isagoo Isbaanish ayaa la sameeyo iyada oo caddaynaya inuu kanu ma ahaa oo ku saabsan tartanka? Kanu sow ma aha dhacdo ku salaysan jinsiyad, haddii aysan u dhacaan inta u dhexaysa oo ah xubin ka tartanka madow iyo caddaan? Muxuu Madaxweyne Obama ayaa dhaxal ahaan u leeyihiin in ay sameeyaan la thread this? Waxaan had iyo jeer waxa uu qiray qurxiyo qowmiyadeed waxa ay tahay. Waxaa wax laga xumaado, waxaa jira kuwa ka fiirsan doono inuu isaga madow oo kaliya sababtoo ah ee midabka ah ee uu maqaarka. Haa, Waxaan is-idhi George Zimmerman ahaa beenaale ah oo gacankudhiigle, labada statements run. Just, sababtoo ah xeerbeegtida isaga lagu waayay kama dhigo mid been ah. Dhammaadka maalinta, dhab ahaan waa maxay heer ah in aad isku dayayaan in ay dubbe guriga? Waan ka xumahay haddii aad dareento sidii laygu weerarka qof. Miyaan looma oggola inay hadlaan my opinion sida qof kasta oo kale on thread this leeyahay iyada oo aan la eedeeyay in ay wax waan ogahay, Anigu ma ihi?
pepjrp • August 19, 2013 at 10:15 waxaan ahay • Reply
Ilaah ku adkaan doonnaa, laakiin aad simaha cunsuri. Waxaad iska indha xaqiiqooyinka kiiska, sababtoo ah Martin ahaa madow. Taasi waa sababta kaliya ee. Martin weeraray Zimmerman ka dib iyo baaba 'dhowr daqiiqo. dil No dhacay, Waxaad sheeko xumeeyay sida ay yihiin 10 ee 1000 ee ay tan u arkaan ilaa koob midab tartanka.
Marvin Lee McManus • August 19, 2013 at 10:15 waxaan ahay •
Maxaan ka heli in ay halkii ka fooliyey saaxiibkay waa xaqiiqada ah in aad samaynayso malo ah aniga igu saabsan oo aan xitaa i garanaya. On halkan blog kale (Ka dib markii Trayvon, Waxaa jiri doona Justice for Florida ee kale istaag Your Victim Ground?) on Disqus, qof igu yiraahdo “nigger” kaliya sababtoo ah aragtideyda ka duwanaayeen kuwii kooda. Miyaanan jawaabaan? No. Waa maxay sababta aan? Maxaa yeelay, waxaan ogahay qofka aan ahay iyo waxa aan u matalaan. Waa farxad leh la ii sheegay in ay kuu gudbiyaan Ilaah jirta sidii ay u tusinayaan in aad tahay Masiixi ah. First of dhan, Waxaan ahay si fudud difaacaneysa Trayvon Martin tan iyo markii uu dilay habeenkaas khaas ah oo ku sii socda in la dilay. Waxaan dareemayaa lahaa jidka saxda ah isku haddii uu sidoo kale ka kid cad yar ahaayeen iyo George Zimmerman ahaayeen madow. Waa call aadanaha qiimaynta. Waxaad arki, George Zimmerman waa gacankudhiigle,. Waxa uu qiimo tirtay nolosha aadanaha kale, sababtoo ah isku dhaceen in uu ku soo bilowday. Ayadoon uu la waayay “nin” sharciga, sharciga Ilaah wuxuu yidhi “Waa inaanad qudh gooyn”. Muxuu samayn? Waxa uu dilay ka dib markii xaaladda oo dhan ayaa laga hortagi karaa. Waxa aad wici cunsuriyadda waa wax ka badan Fikirka ku saleysan qiimaha waxaan nolosha Trayvon ee. Anigu ma waxaan ahay waalan ee George Zimmerman, ma at dhan, wuxuu la kulmi doonaa Judge. Anigu ma waxaan ahay murugoodo ee Law u istaag Your Ground, Haa aniga. Haddii ma aysan ilaalin dumar madow, Marissa Alexander, kuwaas oo rasaas digniin at ninkeeda, oo markii danbe keentay in a 20 sano xabsi iyada, ma waxay ahayd in labada codsatay in George Zimmerman. Waayo, waxaad u qaadan wax ku saabsan xaqiiqooyinka aan iska indha-tiray oo kaliya difaacaneysa Trayvon Martin waayo, isagu waa madow i tuso aad eexda iyo cunsuriyadda soo jireenka ah ee la xiriira malo jinsiga ku saleysan. Waa dheeraad ah muuqata in aad iska weyneeya oo ka mid ah “10'S of 1000 ee this arki ilaa koob midab tartanka”. Waad ku mahadsan tahay qaadashada i kastoo qosli.
pepjrp • August 19, 2013 at 10:16 waxaan ahay •
Waxaan dhamaanteen sida dadka Masiixiyiinta ah waxaa loo ogol yahay in ay nolosha ka qaado haddii annagaa leh khatar… iyo waxa ay u muuqataa in Zimmerman waxa uu ahaa. Waxa kale oo ay u muuqataa in aad Zimmerman ma siin doono faa'iido u ah in. Haddii aan tartanka ku salaysan, markaas raaligelin aan, laakiin waxaad tahay mid ka mid ah tiro aad u yar in aanay. Laakiinse idinku waxaad tihiin Christian a iyo ku dhowaad dhammaan dadka kale ee aan ka hadlay la online ma, sidaa darteed waxaan idin siin doonaa ixtiraam in. Laakiin waxa cad in aad rumeysan yahay qaar ka mid ah untruths oo ku saabsan kiiska aan arko ama dhagaysto naftaada. Taasi waa meesha aan xaalad xumeyd ku yimaado. Waxaan u lahaa ma aaminsan qaab ama mid kale ilaa aan waqti si aad u hesho xaqiiqooyin badan intii aan kari qaatay. Waxaa la yaableh waxa aan helay. Hadda, Waxaan arkaa in badan ayaa la isticmaalayo kiiska Marissa Alexander in xirin xukunka Zimmerman ah. Haddaba anigu garan maayo sida ugu badan ee ku saabsan sida aan this mid ka mid ah sameeyo, laakiin waxaan ognahay in Alexander ayaa la bixiyey 3 heshiiska qirashada sano in ay iska diiday. Weli, Waxaan weligiin akhriyin xaqiiqda in posts qof. Waxa kale oo jira maragga in ay ka tagnay karo oo xitaa yimid dib markii ay dhammaatay, laakiin ma og tahay in si dhab ah, laakiin waa qayb ka mid ah dacwadda xeer ilaalinta ee. Laakiin waxaa jira sabab wayn in ay aaminsan yihiin in Trayvon Martin ayaa sidoo kale ka tageen, ayay dib u noqdeen. Waxaa jiray daqiiqo meesha Zimmerman ayaa sheegay in on telefoonka, si ay 911 Qofta in isagu garan maayo meesha Martin waa. Laakiin, waad garan weyday, waayo, waad isku dayin ma in la ogaado, wixii aad ku samaysay? comment of My “10'S of 1000 ee this arki ilaa koob midab tartanka” waxay u taagan tahay sida waa ka badan run. Waxaa jira badan oo caddaanka rumeeyey Zimmerman uu saas eed ku cayn kasta oo sababo, laakiin waxaa jira ma lahan kiiyoo oo dareemaya Zimmerman waxa laga yaabaa in aan waxba galabsan Taasi waa dhan caddeynta cunsurinimo ah aad u baahan tahay.
Marvin Lee McManus • August 19, 2013 at 10:16 waxaan ahay •
Fadlan ii sameeyo ixsaan iyo joojiyo. Sida isagoo Masiixi ah, waa inaad ogaataa khayr badan in ay isku dayaan oo i Waanininaa ku saabsan untruths Mu'minaadka ah. Taas oo muujinaysa in aad rumaysan tahay wax kasta oo u soo baxay George Zimmerman afkiisa runta ahaa ka. Waxaan taaban doonaa, waayo, mar kale, kaliya Ilaah waa uu Judge. dheeraad ah ayaa aad isku daydo inay ka dhawaajiyaan dhexdhexaad ah oo caqli gal ah oo ku saabsan kiiska this, xun u helo. Oo haddana, tago haddii loo maleeyo in aad og tahay inta kiiska this waan dhegaysanayay nafteyda. Waxaan ahay aad u si fiican u akhri, waxbarashada, shaqsi waa kan kara inuu u malaynayaa in nafteyda, ka dareen gooni. Baryayaaye, ii sheeg in Kitaabka Quduuska ah meesha uu ku leeyahay haddii aad noloshiisa halis, waxaad qaadan kartaa mid ka mid kale. Waa inaanad qudh gooyn hab sax ah in. Oo fadlan iigu tudh la dilalka axdiga hore ahaayeen baahay maxaa yeelay nimcada Ilaah weli uma uu iman goobta. The case Marissa Alexander, Wax macno ah ma, heshiiska qirashada ama ma, haddii ay dareemeen nolosheeda ahaayeen khatar, iyadu xaq kasta in ay iyada oo dhulka taagan. Waxaad taageeri sharciga ah oo uu ku xidhan galay rar cunsurinimo u dejisey iyo waxa ay isku dayayaan in ay difaacaan, mar kale, aan eegno wanaagsan. Sidoo kale, haddii aad dareento bible waxay muujinaysaa haddii noloshiisa halis aad qaadi karto mid kale, sidee ayaa aad u ah oo ku saabsan ilmo in caafimaad ahaan loo baahan yahay. Just cajiib ah in la ogaado. Mar labaad, dhamaadka maalinta, fikradaha aad waxaaga oo aan la beddelo, mana anigaa iska leh. farqiga kaliya waa, anigaa iska dhaliyaan a eegaysana saafi dadnimo, idinkaa iska fudud waa out of cadho iyo jahawareer in aad dareento in kiiskan ahaa oo ku saabsan tartanka. Arag faraqa u?
Nathanial Poling • August 19, 2013 at 10:16 waxaan ahay •
sidaas askari ee dagaalka waa dambi ah dil?
waxa keliya ee aad muujisay in aad ka Jaahil ah ama la'aanta oo kaliya guud ahaan aqoonta… Taagan Your Ground ahaa marna xitaa loo isticmaalaa in kiiska Zimmerman ee difaaca, wuxuuna ka mid ahaa oo aan waxba galabsan kuwaasoo ah sharcigii in aan. Intaas waxaa sii dheer sharciga ayaa codsatay 2 si ay u 1 in Nicmada Americans African isu difaacaneysa ka dhanka ah Afrika Americans kale oo aan ahayn in caddaanka isticmaalaya sharciga.
Antoine Mason • August 19, 2013 at 10:17 waxaan ahay •
Taasi waa war qoraal ah oo soo jiidasho leh cunsuri.
Nathanial Poling • August 19, 2013 at 10:17 waxaan ahay •
waxa cunsuri? waxaa jiray waxba war in meel fog laga cunsuri
Marvin Lee McManus • August 19, 2013 at 10:18 waxaan ahay •
Macna ma laha inta badan aad rabto in aad iska rabto sharciga SYG ah, wadatashi iyo keentay afka si dhow u ekaa verbiage SYG ah. SO in aragti kaliya sababtoo ah SYG waxaa ahayn kuwo Wax ucaabuday, micnaheedu ma aha inay ahayd mid aan ku saleysan go'aanka. Intaas waxaa sii dheer, fadlan iigu tudh statistics aad haddii aad dib kartaa ilaa la caddayn. Marka xiga, fiirsan afkaaga marka aad rabto in aad ka fikirno in qof jaahil maxaa yeelay, waxaad tahay jaahil Haddaad Aayadkiisa Rumaynasaan in xukunka SYG ka qeyb ku lahayn natiijada kama dambaysta ah. Iyo tan iyo stats aad ka kooban, fadlan tixraac mid ka mid ah kuwan soo socda…
Ku raaxayso maalin.
Nathanial Poling • August 19, 2013 at 10:22 waxaan ahay •
Ma waxay ahayd inaad run ahaantii kaliya boostada laba blogs random?
Haddaba ogolaanaysaa guurto on in ay qaar ka mid ah tirakoobka dhabta ah:
Laakiin qiyaas ahaan hal saddexaad ee Florida "Istaag Your Ground" sheegashada in
xaaladood oo dhimasho oo la sameeyey by eedaysanayaasha madow, waxayna u isticmaaleen ah
difaaca si guul leh 55 boqolkiiba wakhtiga, heerka la mid ah sida ay
dadweynaha ee waaweyn iyo heerka ka sarreeya eedaysanayaasha cad,
sida laga soo xigtay falanqaynta Daily dagdagi ah database a camira Bay Tampa Times. Intaa waxaa dheer, inta badan dhibanayaasha ee Florida "Istaag Your Ground" Xaaladaha ay ku cad.
African Americans loo isticmaalo "Istaag Your Ground" difaaca at dhow heerka labo jeer ay joogaan in dadka Florida ee, kaas oo ku qoran 16.6 boqolkiiba 2012.
Intaas waxaa sii dheer, Kaliya waxaan ka akhrisan of kiis ee New York ee 2009: http://rochester.ynn.com/content/top_stories/490926/jury-finds-roderick-scott-not-guilty/
Nooca gacansaydhay muran card tartanka oo dhan in Madaxweyne Obama iyo kuwo kale oo la ciyaaray ay dhacdo in qof weyn oo madow ma sii joogi doontid, haddii ay ku dileen wiil dhalinyaro ah oo cad.
Marvin Lee McManus • August 19, 2013 at 10:22 waxaan ahay •
Ma doonayo inaan in ay qaataan wax kasta oo aad ku saabsan in mudo ah aan ka ahayn in aad si cad u ma jecla in ay qalad iyo sidoo kale aad u jecel inay difaacaan sharciga muran. Haddii aad rabto in aad u galin ama aan iyo ka heli stats in taageero aad sheeko, sida qof awoodo, sharciyada SYG, haddii gawraco kiiskan ama ma, ayaa ka dhisay-in faraq jinsiyadda. Waxaan leeyahay gabi ahaanba qorshaha ugu jirin sii hadal idinla. maxaad? Waxaad waydiisan kartaa. Waxaa dhammaynaya Waxba. Your opinion ma in la beddelo iyo ma anigaa iska leh. Taas oo macnaheedu yahay ma aan ama aadan ixtiraamaan karaa? Ma aha at dhan. Waxaa loola jeedaa daalay garaaceen faras dhintay kula Anigu waxaan ahay. hadal Civil waxaa dhab ah ka dhiman umadan iyo tani waa caddayn dheeraad ah in aan waddo dheer si ay u tagaan noo ahaan quruun Ilaah ka yar hal. Waan ku baryayaaye jacaylkiisa qalbigaaga galay iyo sidoo kale anigaa iska leh iyo qof kasta oo kale oo ku dul blog this turunturoon laga yaabaa in. Hayso weyn fiidkii a.
Waxaan arkaa in aad u dulmaray aan jawaab. I kuu ducayn doonaa, sidoo in Ilaah ka saaraysaa aad “tartanka” blinders oo saamayn dood aad. Waan ogahay cunsuriyadda had iyo jeer ka jira doonaa ka dhan jinsiyadaha kale, laakiin waxaa jira qaar ka mid ah dadka halkaas in ay u guureen ka baxsan tartanka iyo dhacdo kasta oo aanu had iyo jeer ma leedahay in la sameeyo oo la midabka ah ee maqaarka. Waxaan noqon lahaa taageero haddii caddaymo muujiyeen in Zimmerman ahaa dambi ah dambi laakiin waxaan sii wadi doonaa in qof ayaa si xoogan loola saamayn ku dhawaad ​​ah ku doodi 100% warbaahinta la caddaan doonaan yeelyeel in rinjiga story this galay wax sawiri lahaa daawadayaasha iyo iyaga u samaysaa lacag dheeraad ah iyo sidoo kale ay ujeedooyinkooda u riixaan anti-qoriga. Waxay doctored video, cajalado maqal ah iyo sheekooyin kale oo badan oo reer Potugal bulshooyinka African American, waxaana qabaa waa travesty a. Waxaan rajeynayaa in Zimmerman dacweeyo surwaal ay off for aflagaado iyo cay.
Marvin Lee McManus • August 19, 2013 at 10:23 waxaan ahay •
Inta aad ku tukanayeen in Ilaah ka saaraysaa blinders tartanka indhahayga ka halka loo maleeyo in waa sababta aan qaban fikradaha aan qaban, fadlan ogaadaan in salaadda malaha ma dhigi doonaa ee la soo dhaafay aad saqafka. Waxaan u dulmaray jawaab, waayo, anigu ma dareemaan baahida loo qabo in jawaabi marka aad wax fikrad ah waxa aad ka hadlaysaan meesha aan ka walaacsan ahay. Waxaad ma qasan kartaa salaadda a jacaylka iyo neceb oo dhan waqti isku mid ah. Your malo in kaliya sababtoo ah Trayvon Martin ayaa ahaa madow iyo waa sababta Waxaan dareemayaa sida aan samayn waa si cad u qaldan. Ma doonayo inaan in ay difaacaan opinion in kasta oo dheeraad ah si aad ama qof kale sababta oo ah dhamaadka maalinta, aad doonaysid in aad weli sidaa dareento in aad samayso oo noqon cibaadalaawayaal ah ku saabsan. Waa aflagaado Mu'min ah, waayo, xataa aad isku daydo in ay soo gaarto jidka in aad tahay marka aad ogtahay naftaada in xigmaddu waa maamulaha a Ilaah siiyey in uu la codsatay fiidkii in on qayb George Zimmerman ee, waxaannu doonaynaa in aan la yeelanaya dood this. Waxaad arki saaxiibkay, Shaydaanku waa u imanayaa inuu kala qaybin, oo isna sida runta ah ku yahay oo uu shaqo arrintan. Waxaan qaban aragtidayda, maxaa yeelay, nin dhallinyaro ah oo nolosha la qaatay–POINT-bannaan, WAKHTIGA! Xaqiiqada ah in aad tahay qof si cidhiidhi ah maskax ku saabsan in loo maleeyo in sababtoo ah waxaan ahay madow iyo Trayvon Martin waa madow, Waxaan dareemayaa sidan, waa si cad u macquul ahayn. Waayo, waxaad si ay uga hadlaan blinders tartanka la saaro indhahaygana way ka halka aad si cad u xiran adiga kuu gaar ah waa lagu qoslo ii. Halkii tukanayay qof kale, laga yaabaa in aad rabto in aad weydiiso ilaahay inuu ku soo bilowdo oo aad qalbigiinna oo ugu horeeya. Waxaa laga yaabaa inaad la yaabay wuxuu dejin si aad u.
Nathanial Poling • August 19, 2013 at 10:23 waxaan ahay •
waxaad bilowday iyadoo ku tukanayeen, sidaa darteed ha i Waanininaa oo ku saabsan waxa ay u tukadaan oo ku saabsan. Waxaan qabaa in aad u baahan tahay si loo hubiyo wadnahaaga u gaar ah, waxa ay aheyd wax iska cad tani waxay ahayd oo ku saabsan tartanka sababtoo ah waxaan shaki this ka dhigay lahayd ee la soo dhaafay news maxaliga ah iyo dadka ugu maskaxda haddii kiiskan ayaa madow on madow ama madow on cad. Haddii aadan rabin in ay la kulmaan xaqiiqooyinka, waa in aad doorato, laakiin waxaa jira kiisas badan oo taageera aan view oo ay ku jiraan ninka madow ee New York, kuwaas oo ku toogteen wiil dhalinyaro ah oo cadaan ah oo xiran hoody oo waxaa si buuxda helin eed ku eedeeyay dhan. Ma jirin warbaahinta qaranka kor u muujinaya, ma baiters cad tartanka baaqaya dibad. Sheekadan waxay noqon lahaa gabi ahaanba ka duwan lahaa Martin ma weeraray Zimmerman oo aan ku taageeri lahaa dad badan oo reer aragtidaada laakiin labaad Martin ku go'aansaday inuu doonayo inuu sameeyo waxyeelo Zimmerman oo madaxiisa ku garaaceen dhanka ah maraan iyo feeraan wejiga, ilaa uu isu diyaariyey inuu la toogtay. Period.. dhamaadka sheekada… tuuraan tartanka iyo in uu yahay xaqiiqda Caraabaah oo fudud.
Wow. La yaab ma laha waxaa weli jira xiriirka tartanka xun in dalka this. Waa in ka badan iska cad aan loo eegayn waxa aan sheegay ama sida aan aniga qudhaydu ka muujiyay, aad content si guud aan dareen-celin iyo dareenka waa. Isagoo sheegay in, raaxaystaan ​​waqti salaadda iyo nolosha weyn. Waxaan rajeynayaa inaan idin arko oo dhanka kale ah.
Nicole • August 19, 2013 at 10:24 waxaan ahay • Reply
Anigu waxaan oggolahay inaan la gaaro dheelitirka in la qeexo oo dhan cadaalad. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray audio bilowgii halkaas oo uu isticmaalay ku dheehan tahay jinsiyadda iyo waxa uu leeyahay taariikh ugu baaqay wiilasha madow ee xaafadda. Race laga yaabaa in aanay arrin kaliya laakiin waa.
jonathansampson • August 19, 2013 at 10:24 waxaan ahay • Reply
Nicole, George isaga la yiraahdo “goon,” iyo a “f * Punk cking.” caddaynta kaliya ee wax ereyo cunsuriyad yimid markii Jeantel qaaday taagan iyo ka marag kacay inaan intii ay ahayd on telefoonka kula Trayvon, Trayvon yeedhay George a “crack dameer Creepy,” iyo ka dib a “nigga”.
George tusaale (ugu yaraan laba) carruurta madow, qaaday gabar madow si prom, iyo xataa lahaa taageerada kiiyoo in uu xaafadda uu door ah ilaalada xaafadaha. Waxaa uu ahaa gabi ahaanba wax caddeyn in Trayvon waxaa hadalo cunsurinimo ah ka qortay, ama in George waa cunsuri.
pepjrp • August 19, 2013 at 10:25 waxaan ahay • Reply
shaqo Great sida aad ogtahay, alaabtii. Too xun waxaa jira oo kaliya 1 million oo dad ah si madow jiraan in ay baraan runta xaalkan sida aad ku sameeyey Bean oo Nicole. La yaab leh sida aad u badan oo doonaya in ay aaminsan yihiin nacayb jinsi ah oo aan u faafi karaa si degdeg ah oo ku filan.
digirta • August 19, 2013 at 10:25 waxaan ahay • Reply
Heedhe.. Waxaan u malaynayaa in ay ahayd “coon” ma goon. Taasi waa erey jinsiyadda.
Waa maxay macnaha arrintaan hadda si kasta? Ma waxaan oo dhan dagaal kaliya oo kaliya hal dhibic our of view haddana mar kale?? Waxaan weli si ay u arkaan qof on this wax sarrifka forum macno leh.
Weligay garan doontaa this.. waxaan la rabay in lagu kaniisadda.
jonathansampson • August 19, 2013 at 10:25 waxaan ahay • Reply
Dooda wuxuu ku dhex coon iyo goon - farqiga u ah c iyo g a. George saaxiibkiis ah si qallafsan toban sano ah (iyo madow, haddii in arrimaha) qaba eray laga isticmaali jiray “goon,” sheegaysa ma uu maqlay qof ka yar tahay 40 ama 50 ee isticmaalka “coon” sida ku dheehan tahay jinsiyadda. Anigu shakhsi ahaan ma maqal coon loo isticmaalaa sida raqiis ah; Waxaan kaliya maqlay loo isticmaalo sida tixraac in raccoons.
Marka aad baari this mid ka mid ah clip audio maqlana iftiinka ee wax kasta oo kale, waxa macno more ayuu ku yidhi “goon”. Ka dib oo dhan, Joe Oliver (George saaxiibkiis madow) ayaa sheegay in muddo toban sano ah ayuu wax soo jeedin lahaa marnaba arkay George waa cunsuri. George qaaday gabar madow si prom, iyo tusaale carruurta yaryar madow. Ma jirto calaamad muujinaysa in uu u arko cid kale sida in ay ka yar uu ka badan on account of midabka maqaarka ay.
dood Tani waa muhiim waayo, kiniisadda la sameeyey oo dhan noocyada kala duwan ee dadka, madow iyo caddaan. Noocan oo kale ah sheeko naxdin leh sidan oo kale waxay keeni kartaa kala qaybsanaan weyn ee jirka la arki karo, iyo sida aan waajibka oo dhan ay xiiseynayaan in runta u shaqaynayn, ku salaysan sabab iyo caddayn, si looga fogaado arrimo aan loo baahnayn ee jirka.
No, wuxuu yidhi waa fu **** g qabow. waxaa Google. Dhegayso audio ah. FBI ayaa sheegtay in ay ahayd waxa lagu sheegay. Ma jirin ereyo cunsurinimo ah mooyee, Martin.
Antoine Mason • August 19, 2013 at 10:25 waxaan ahay • Reply
Waxaad leedahay audio ay Trayvon sheegay in wax cunsuriyad? Waan jeclaan lahaa inaan wax ka maqashaa.
pepjrp • August 19, 2013 at 10:26 waxaan ahay • Reply
Sidaas waxaa kuu yeedhayaa Rachel Jeantel beenaale ah? Mise waxaad ka maqnaan iyada maragga?
digirta • August 19, 2013 at 10:26 waxaan ahay • Reply
Waxaa laga yaabaa in isagu ma uu odhan dheer ee cunsurinimada ah ka dibna. Anigu garan maayo waxa ay ahayd in uu maanka, laakiin Anigu shaqsi ahaan ma u maleynayaa Zimmerman ahaa cunsuri. si kastaba ha ahaatee uu ku sameeyey “profile cunsurinimo” Trayvon. Taasina waa naxdin leh laftiisa in sababo badan…
Sayidka, waxaan u baahan nahay in ay ka munaaqashoodaan…1. Sidee aan la heerarka denbi xad sare ee bulshada madow macaamilo? dad Ha daryeel samayn wax arrintan ku saabsan sida aad u badan odhan ay a “madow” dhibaato? 2. Sida aynu joojin kartaa pigeonholing dadka ku qufulan gaar ah oo ku salaysan midab? Ma warbaahinta? Maxaa ku saabsan tirakoobka kuwan, maxaad runtii macnaheedu? 3. Sida aynu u noqon kartaa dheeraad ah oo midaysan? Eeg dadka kale mid kasta dhibcood of view? Waxaa laga yaabaa in ay leeyihiin forums dheeraad ah oo ay dadku wada hadlaan khibradahooda?
Waxaan doonayaa in aan kala hadlo in, laakiin dagaal midba midka kale ma si ay u caawiyaan. Waa maxay ujeeddada loo of cay kareen,? The kor u keeno 1960 ee. The fiiqaya madow on heerka dembiyada u madow yihiin sida xaq qaar ka mid ah.. Maxaad dadkan samaynaya? Just in ay dhaawici midba midka kale?
Sida Nasaarada, sida aan noqon kartaa tusaale ka mid ah sida in ay isu yimaadaan xaaladaha adag sida tan? Sida aynu isticmaali kartaa tusaale ahaan Ciise in aan qaado, dogobka ishaada soo baxay isha walaalkaa our- laakiin in la baaro nafteena iyo weydii haddii aan samaynayno ahaayeen kulli wixii aannu karaa in dunidan meel fiican ka dhigi?
pepjrp • August 19, 2013 at 10:27 waxaan ahay • Reply
Wrong Nicole… been badan iyo qalad by hustlers tartanka iyo warbaahinta deeqsi. Waxay qaadan doontaa waqti dheer si-dhaaf ah oo dhan been ah in kiiyoo badan oo ka sii badan yihiin faraxsan in ay aaminsan yihiin. Nicole, aadan aqoon xaqiiqooyinka. Fadlan iyaga barataan.
Nathanial Poling • August 19, 2013 at 10:27 waxaan ahay • Reply
Nicole, ayaad dhagaysan maxkamadda? The ereyo cunsuriyad ah oo keliya ayaa ka soo baxay afkii Martin sida ay saaxiib uu la hadlay isagii ku saabsan telefoonka.
lewrites • August 19, 2013 at 10:27 waxaan ahay • Reply
First off, Waxaan ula jeedaa ixtiraam lahayn…Waxaan ahay caddaan / hooyo American. Laakiin kaliya waxaan maqlay “goon” ereygu u jeedaa dadka madow. Iyo tan iyo wixii Jonathan Thompson waxaa leh…Waxaan maqley iyo dadka ogeysiiyo kan hagid kids madow, sababtoo ah waxay doonayaan in ay “civilize” ama kaliya sababtoo ah waxay doonayaan inay sameeyaan camal wanaagsan oo ah maalintii ay caawiyaan tartanka kale.
Ma dhahayo Martin sax ahaa in la yidhaahdo waxa uu sheegay in. Yaanay noqon. Waxaan qabaa in labada dhinac Daalimiinta kiiskan iyo Anigu ma aaminsani aan abid garan doontaan runta;. Ka dib oo dhan, badan oo qof ayaa ay awood u hesho iska dil by samaynta dhammaan way rumaysan warkooda…waxaa jiray kiis ee gobolka gurigeyga, taas oo nin ku dilay gabar dhowr iyo toban jirka iyo ka heshay dad u jiifsato, waayo, isaga oo u siin barinnimo ah. Ugu dambayntii dadka ma soo baxaan oo ay runta u sheegto, laakiin waxaan kaliya leh oo keliya, waayo, wuxuu ahaa lagu waayay iyo dadka ayaa sheegay in dhammaan alaabtii this isaga ku saabsan macnaheedu ma aha Markay dhinteenna, lama iyagoo aan daacad ahayn. Waxaan sidoo kale ma leh in uu isagoo aan daacad ahayn, labada.
kiiska kale ee gobolka guriga aan ku lug ciyaaryahan kubada cagta ah oo lagu garaacay in dhimashada laba guys ka dugsi kale ee shirka. Inkastoo xisaab markhaati isha, mid ka mid ah laba nin oo heshay off Scott free, mid kalena wuxuu ahaa awoodaan si ay u helaan heshiis qirashada for dil ah. Dadka goob joog labadan nin oo dhallinyaro ah sucker feeraan ninkaan halka uu dhabarka iyaga u soo jeediyey, oo ay ku daray inuu ku garaaceen isagii til wuxuu ahaa dhulka ku, miyir, ka dibna ay kala jabeen markii ay maqleen gawaarida boliiska. Markaasaa midkood wuxuu ku maamushaa in ay socdaan.
Waxaa jira godad weyn ku qabaan nidaamka caddaalada, kaliya sababtoo ah qof lagu waayay macnaheedu ma aha waxay xaq qabin tahay. Dhinaca kale, badan oo dadka gelid denbi iyo xataa toogasho ah in la dambe la ogaaday in aan waxba galabsan. dadka kaliya labo ogahay xaqiiqda wixii dhacay habeenkaas
jonathansampson • August 19, 2013 at 10:28 waxaan ahay • Reply
Ee aan abid aan maqlay “goon” loo isticmaalo sida ku dheehan tahay isir, waayo, dadka madow. Just dib buu u noqday si uu u hubiyo Urban Dictionary iyo in ay u muuqato ma in aan ku xuso tartanka in mid ka mid ah sharaxyo ay top.
A “Goon” caadi ahaan waa qof carrab la ', ama weyn. Madaxda Mafia diro ay “goons” soo baxay si ay amarka. Just in ay dhamaystiran waan hubiyaa dhowdahay oo, iyo waxa aad u ma qor ururada wax jinsiyadda. waxaa u yeelaa badmaax, shakhsiyaadka muruqa, iyo ka dib taariikhda ee delinquents.
Sida waxa comments ku saabsan la socosho yaryar madow, sababtoo ah aad rabto in aad “iyaga civilize,” waxaan u qaadan karaa dadka ujeedooyinkooda ku salaysan arrimiha noo gaar ah oo ka mid ah - waa ma cadaalad ah. Haddii George tusaale caruurta madow, oo waxaan haystaa eed kuma aan loo maleeyo in qaar ka mid ah shirqool deeqda uu qayb, Waxaan u leeyihiin in ay u qaadan waa si dhab ah uu odhan dan iyaga oo ku saabsan.
line hoose ay dhacdo in Zimmerman waa in caddaynta muujinaysaa George ahaa on hoose. laabatooyinka Travyon ayaa muujinaya, in uu feeray qof. George ee Madaxiisiina waxaa lagu si xun nabar iyo garaacay. Waxa uu ahaa iskaashi xitaa ka hor isagoo qareen, xataa qaadashada booliska soo baxay si reenact waxa dhacay. Baarayaal qaatay sheekada ka badan iyo in ka badan, dhowr jeer oo kala duwan, raadinayso calaamadaha khiyaano iyo waxba ma ay helin. By kasta oo lagu cabbiro waxa ay u muuqataa in George jiray cabsi waxyeello weyn jirka, ama xitaa dhimasho. Waxaan leenahay uma laha inay soo jeediyey haddii kale.
Waxaan oggolahay in dadka waxyaalo cabsi badan sameeyo iyo aad u hesho iska leh, halka dadka kale ee la dulmiyo ciqaabay dambiyada iyagu ma ay samayn. Uma maleynayo hore waxay khusaysaa George; ma ku saleysanyahay cadeymaha la. Laakiin waxaan qabaa dambe ma sida uu hadda ka haysato si ay u qariyaan in isaga iyo qoyskiisa ay ilaaliyaan halka dunida isaga midabeeyo sida cunsuri - keenaya caddaanka iyo kiiyoo oo dhan si ay isaga jeclaan lahaa dhimashada.
Waxaa jira godad nidaamka; ma ku doodi doonaa in. Laakiin waxaan heysanaa eed kuma aan macquul ahayn la wadaajinaysaan natiijada kasta oo ay sabab u godad kuwa – aan nooca qaar ka mid ah caddayn, ama sabab u adag. Wax kasta oo ay dhacdo in this, dhammaan xogta aan aragno iyada oo loo marayo bilood falaqeynta, jeedinaya George ayaa daacad ah oo ku saabsan habeenkaas. maragga Eye-markhaati taageertaa uu story. maragga Dheg-markhaati taageertaa uu story. xaqiiqooyinka ma sameeyaan, misalign oo uu story. Waa inaan, Si Xushmad Loogu Muujiyo Sababta, leenahay wax kasta oo wararka la isla dhexmarayo dheeraad ah iyo xukun, waayo, Ilaah.
Haddii aad rabto inaad aragto kiis cad qalayo aan waxba galabsan, eegi jirin dheeraad ah ka badan John Spooner. Nin ee 70 ayaa toogtay ilmaha yar madow laba jeer maalin cad sanadkii la soo dhaafay. Ogaanshaha “mudnaan cad” ma ilaalin doona isaga, ilaa uu dhaawacaa baryayay waali. In uu noqon doono meel wanaagsan oo in la raadiyo cunsuriyadda – maxkamad Zimmerman ma aha. In light-hasyo ma ha ma aad iska dil aad u hesho.
lewrites • August 19, 2013 at 10:28 waxaan ahay • Reply
Waxaad xaq u tahay, waxaan u qaadan karaa wax, Waxaan hubaal heshiin. Waa maxay waxaan isku dayayaa inaan sameeyo waa u doodaha Ibliisku play ee. Waan ogahay in ay hasyo iftiin ma iska dil aad u hesho (in ay dhacdo nin ku dilay gabar, Wiilkaan wuxuu u caddaa, in ay dhacdo ciyaaryahan kubada cagta ah, dhammaan dhinacyada ahaayeen madow).
Laakiin ma ahan oo gebi ahaanba ka baxsan diilinta in ay ka fekeraan…si fiican u…meel ka baxsan diilinta. Urban Dictionary Ma run ahaantii u tag, waayo, macluumaad badan oo, maxaa yeelay, wax badan oo ka mid ah waxa aan ku wareegsan meesha aan ku noolahay maqli waa sidaas ka duwan waxa kor saaray site in. Waxaa laga yaabaa in aan gobolka ku meelaynayaa kalmado kala duwan macne oo kala duwan. Sida suulka kor bulshada qaarkeed u dhiganta farta dhexe.
Waxaan la sameeyo xadgudub galmo yar yar oo qof kuwaasoo mid ka mid ma abid looga shakisan lahaa waxaas oo kale samayn lahaa. A record track wanaagsan, Labada Waalidna u wanaag, darradaas qof wanaagsan. Qof kasta oo la wareegay badan…xaq u? Haddii qof aad u fiican, sida ay wax u eg in uu samayn kareen ii?
Waxaa ugu Filan in la yidhaahdo, Xaaladdan oo kale keeni dhibcood wanaagsan dood, iyadoo aan loo eegin ama aan cunsuriyada ahaa dhiirogelin ah. Haa, warbaahinta isagay wax on, oo taas waxaa loo daqaqamiyaan in Sidaasay yeeleen. Waxaan ahaa waaweyn ee warbaahinta in kulliyad, waxaan bartay inay eex, laakiin dadka qaar iibiyo baxay si uu shirkad si uu u sameeyo sheeko fiican, waa khalad.
Tani waa sababta aan u barya, waayo labada qoys oo, Waxaan ka tago ilaa Ilaah xaakin u ahaado kama dambaysta ah, sababtoo ah in dhamaadka, Isagu waa kan keliya ayaa meesha inay sidaa sameeyaan. Waan ka xumahay haddii aan sababay ixtiraam kasta, midna ma aan loogu tala galay.
pepjrp • August 19, 2013 at 10:28 waxaan ahay • Reply
Goon jiro ku dheehan tahay isir by fikradda kasta. All in madaxaaga.
Antoine Mason • August 19, 2013 at 10:28 waxaan ahay • Reply
Wow inaad tahay cunsuri.
pepjrp • August 19, 2013 at 10:30 waxaan ahay • Reply
warbaahinta ma daryeeli ku saabsan sheekadaada, maxaa yeelay, ma aad tahay qof Black. Whites iyo Hispanics ku sugan-yihiin timaha cross madaxda cunsurinimo sida Jackson iyo Sharptin.
Waxaad si sax ah oo sax ah sida qoraaga this si qalad ah keenay tartanka markii uu sheegay in Zimmerman ka qortay Martin iyo aad caqli siiyey xaqiiqooyinka la saaray. nacaybka jinsiyadeed kobcin karaan marka dad irresponsibly soo sheegaan. Waxa uu sidoo kale laga saaray ama aan ogayn in loo Martin kuma ay socon on lugeeyo marka guriga, ayuu gooyay dhex yards kaliya cagaha wax yar ka dhex yeedho guryahooda iyo albaabada qudhiisu dushooda ku soo dejinaya shaki. Zimmerman sheegay in live u 911 operator siduu isagu u socday iyo weershe Martin. Sida uu sheegay live in Martin tegey oo uu ku badiyay. Maxaad Martin soo laabto sida daqiiqo by tegey oo maxaa waxyaalahan oo xaqiiqda oo dhan muhiim ah laga saaray by shabakadaha iyo tacsida ah? xaqiiqda A waxa uu sheegay marar badan, laakiin mar walba laga saaray by tacsida madow iyo dabcan, hustlers tartanka sida Jackson iyo Sharptin ah.
BQPhotography • August 19, 2013 at 10:30 waxaan ahay • Reply
Tani waa run! Waxaan rajeynayaa iyo tukado, waxaan xuubsiiban karo this
gdoggydog05 • August 19, 2013 at 10:31 waxaan ahay • Reply
dhibaatadu tahay, sidoo kale, in mid ka mid ma galin in ay sidoo kale waa cunsuri loogu talagalay dadka si DOORO kiiskan sida mid ka mid ah oo muhiim ah in qof kasta soco in si, iyo leedahay fikrad ah oo ku saabsan, iyadoo ay ku saleysan jinsiyad. i mahad aad thoughtfulness kor ku xusan, maadaama ay tani waa mid ka mid ah posts jaahil ka yar in aan akhriyay, laakiinse anigu waxaan ahay caddaan ah 26 sano jir ah oo lab ah ka suborbs iyo weliba waxaan ku calool xumaaday kiiskan. Waxaa la ma ahan oo keliya muuqaalka ah in daliil cunsuriyadda weli waa nool yahay. Xaqiiqada ah in kiiskan loo yaqaan oo dhan waa midab ee ay foomka saafi ah. Waxaan ka hadleynaa kiiskan sababtoo ah wiil madow waa dhintay. Waxaan ku arko trajedy madow (waxaa laga yaabaa in marar badan dhaca, iyo in ay naxdin leh, laakiin dhibic aan halkan) in ay ka muhiimsan tahay oo dhan kumanaan kale oo musiibooyin maalin kasta. Waxaa jira dhamaan noocyada kala duwan ee trajedies dadka madow ay ku dhinteen dadka waawayn cad iyo kuwa xataa cunsurinimo dhiiriyo, in aan lagu soo wargelin iyo glazed ka badan, iyo this sidoo kale, ayaa noqonaya mid wax caadi ah. At cadaalad Wisconsin ah, Waxaan aaminsanahay in ay ahayd, dhawr sano ka hor goobasho flash a ka kooban dhalinyarada African American boobay weeraradii cadaalad iyo isku duba ka dhanka ah caddaanka-kaliya, mararka qaarkood waxay la feeray xilli dadka waayeelka ah ee wejiga, guryaha degaanka iyo ganacsiga tirooyin socday oo xadday iyo cabsi xoog, iyo ma saxaafadda. aad ka fekeri karaa haddii koox ka mid ah dhallinyarada cad beegsaday kiiyoo? warbaahinta ayaa kala dooranaya, iyo haddii aad doorato, haddii aad kaliya diiradda on the “kaliya qofka madow fahmi karo” dhinac oo kiiskan, in musiibo madow waa mid ka mid kuwa ugu muhiimsan, haddeer, halka Hispanics, Shiinaha, caddaanka, oo lagu dilay fashion la mid ah. Xaaladdan oo kale waxaa laga yaabaa in calaamad sort qaar ka mid ah madow “halganka,” Waxaan fahamsanahay in. Laakiin tani ma aha jidkii si ay u xalliyaan. Waan ogahay waayo, wejigiisa ah in this kaliya xaka dhigay bohol aad noo dhexeeya. Waxaad ii sheegay sida nin cad in aanan fahmin sida ay tahay in loo qortay, laakiin dhab ahaantii waxaan la qortay oo dhan kuwa siyaabo isku mid ah, sida nin dhallinyaro ah. anigu waxaan oggolahay, waxaa moreso leh maqaarka midab madow ah, laakiin “dhallinyarada ah” wax uu sameeyo waxa ay la mid aad u. Waxaad dhihi i mana garan doonaa, laakiin waxaa laga yaabaa in aad marnaba fahmi doonaa waxa waxa ay taasi igu dareemayaa marka dhan oo walaalo ah Christian aan madow diiradda on Martin, iyo xataa aan qirsanayn xaqiiqda ah in uu yahay mid qalad ah in meesha ugu horeysa si ay u doortaan trajedy sida ka muhiimsan kuwa boqolaal trajedys la mid ah in maalin walba ka dhacaan. Waxaan rumeysanahay dembi bay u tahay. Taasi waa ra'yi. In sort qaar ka mid ah arinkii dambi badan yahay waxa ka dambeeya tusaale ahaan mid ka mid ah doorashada hal jinsiyad kale. Oo waxaan aaminsanahay ” aad oo aan weligiis lagu kabo aan” kaliya xaka bohol in inta u dhaxaysa jinsi kasta iyo waa hadal aan caddaalad ahayn. Ma taqaan waxa uu yahay sida ii ma inay kuliyad galaan, maxaa yeelay, ma haysto 8 grand yeynan ku xeeran, halka daawashada Afrika Americans leh fasalada isku helitaanka aan bar iyo deeq? u badan tahay in aadan samayn. My dhibic waa, in mar kasta oo aad tidhaahdaan “aadan aqoon waxa ay u eg tahay in ay noqon aan midabka,” aan aad wax soo saar leh samaynaya, maxaa yeelay, weligay ma noqon kartaa midabka. Waxaan aaminsanahay in kiiyoo yihiin oo kaliya sida indha la 'in arrimaha la keenaya kala qaybsanaan qoto dheer u dhexeeya jinsiyadaha. African Americans ay daawanayaan this Travon Martin wax iyo fikirka hal shay, halka Real Madrid ka fikirayso wax gebi ahaanba ka duwan. “Ma xaq, waana caaddil waayo kiiskan in la doortay u muhim ah, oo caan ah, iyo ka weyn kuwii kale oo dhan, iyadoo ay ku saleysan jinsiyad?” Waxaan weli si ay u arkaan mid ka mid ah African American Christian this in la xuso. Iyo in ay iska indha xaqiiqda ah in ay tahay in ay jaahil ka. Waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah run in kiiyoo waxaa ka qortay, laakiin doorashada in ay ku riday kiis oo ku saabsan qaab ku salaysan jinsiyad waa khalad, iyo ixtiraam ay u jinsiyadaha kale ee la dilay sida travon ahaa.
Deborah Bilbo-walada • August 19, 2013 at 10:47 waxaan ahay • Reply
Gdoggy, wax kasta oo aad sheegtay macno. Anigu waxaan ahay madow iyo hooyo laba wiil oo aan kiciyey si ay u arkaan dadka dhaqankooda iyo naxariis ma midabka maqaarkiisa. wiilashaydu ay ku taariikhaysan gabdhaha cad, gabdhaha Hawaiian, iwm. oo aan had iyo jeer u sheegay in aan wax dhibaato ahna ma la sababtoo ah waxaan oo dhan abuuray by Ilaah oo waa xaq iyo xalaal ah mid ka mid. Man abuuray kala qaybsanaan taas dheer ka hor ee Tower of Babel. Tani waxay la yiri, on inay maxkamadda. Haa, kiiska Trayvon ayaa sii daayey oo ay ahayd doorashada ka mid ah isku-dar ah dadka aan baxayn iyo kuwa dareenka ay barbaro galeen in kiiska. Maxaa ka mid ah dadka madow aadan fahmin waa in dadka madow waa cunsuri aad. Waxaan leenahay in ay sameeyaan dadaal miyir leh si aan eeda oo dhan dusha tartanka. Ma aha oo ku saabsan tartanka oo keliya, waxa ay ku saabsan George Zimmerman booliska aan addeecin markay isagii u sheegeen “MA in la raaco.” Haddaba qaar ka mid ah gunaanad xun ayaa barbaro xadgudubkiisa ka sharciga aad taas oo dhamaadka isaga ilaaliyo sharciga istaag Your Ground. Waxaan dareemayaa naxariis weyn oo qoyska Trayvon ee, gaar ahaan hooyadiis ma yeelay, wuxuu ahaa wiil madow, laakiin maxaa yeelay, wuxuu ahaa ILMAHA HOOYO a EE! Crime waa qalad arrinta ma kuwaas oo u kasbaday laakiin waxaa uu dhab ahaantii uu gelayaa dembi ah by aan ku dul maraan? Zimmerman ahaa mid aad u deg deg ah u dhaqmaan, waa in uu sugayay in yar dheer si ay u arkaan waxa falalka Trayvon ahaayeen, haddii uu u socday si uu u eego in uu furmo ama isku dayaan in ay jebiyaan ee albaabka ka hor isaga soo socda. LINE HOOSTA WAA George Zimmerman amarkii A TOOSKA AH UGA SHARCI FULINTA! Ma xisaabta.
gdoggydog05 • August 19, 2013 at 10:47 waxaan ahay • Reply
mahad u ah fahamka comments aan. inay maqlaan ka Maraykanka Afrika adiga oo kale, ma i siin rajo. i raacsan George Zimmerman waxaa nacasnimo ku simaha. waa in uu sugayay gaysteen, iyadoo aan loo eegayn sida cadhooday waxa uu ahaa in xaafada la dhigaa is jebiyo….haa tahay, waxaad tahay xaq. ma jiro wax ka yar ku, waayo, caasiyay amarkii oo keligeed, i siinin qabaa inuu xabsiga tago nolosha ama lagu eedeeyay dil. Waa in aynu eegno dhacdo qofka. daruuri ma aha waxa dhaca. i sii daa aan idin siin tusaale. ok laba tusaale in i qabaa caddaaladda ay maskaxda ku hayaan. in mid ka mid ah kiiska, nin gacmeed…. uu ogyahay in ay qalad ah laakiin daqiiqad daciifnimo, halka hoos u wadida wadada uu ka McDonalds baxay daaqadda gana uu milkshake….. ka dib on, qof arkaa milshake ah, maleeyo ay rabitt bakayle a (waan ogahay tusaalooyin kuwanu waa doqonimo, ii dulqaadataan) iyo swerves, Doomaha gaariga iyo dhinto. waa maxay dadku oo ah dambi ah? dil? …. ma uu dambi ah qashin waa. dembi oo dhan waxay keenaysaa in dilka. dembigu waa sababta Masiix lahaa si ay u dhintaan. Laakiin halkan dhulka, aan loo xukumo sida uu dambiga, si ay u sii si. okay, halkan seenyo kale la mid ah halkaas oo tallaabo ka yar sababa dareen-weyn. Qofka caajis kii aan shaqayn adag oo ku filan on diiradda lagu jiro hawlaha muhiimka ah sida raadinaya iyada ka dib 2 ina sano jir ah…. ayaa iyada dhallaanka ee gaariga la hoos orodka gaariga iyo albaabka garaashka… illoobaa iyada telefoonka gacanta ee guriga….. call a yimaado iyada oo loo marayo, iyadu bixiso saacad on call iyo soo baxa oo ilmaheediina waxaa dhintay. Waa tuma dambi ah maxay? caajisnimada Just iyo maskax maqan? Well, ilmaha qudhiisu uusan difaaci karin. Waxa uu yahay ilmo. Waxay ogaa in ay mas'uul ka ahayd oo iyada fal dayacina sababay dhimashadiisa. Tani waa dil. Ilmuhu lahayn ka qayb it.Only iyadu waa eed. Waayahay, Zimmerman waa in ay dambi ah xanibaadii caddaalad iyo waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah waxyaabo kale …. laakiin, haddii ay run travon in isaga jeestay, oo waxaa isaga la garaaco, oo markaas waa inuu isaga la toogtay. George Zimmerman waa dambi ah oo caasiyay booliiska. Laakiin waxaa jira xisbiga doonista xorta ah ee kale ku lug. Haddii Travon lahaa, odhan, 3 doorasho….. baxsad (waa hubaal inuu si degdeg ah ku dhowaad ahaa….. tagaan gudaha….. ama laga yaabee cadhoon iyo waajahaan George sida in sababta uu isaga ku dhibo. Ma aqaano wixii uu ku sameeyey. Taasi waa meesha ugu. Haddii uu isku dayay inuu u cararo, oo waxaa lagu ugaadhsado hoos by Zimmerman, ay dil. Laakiin haddii travon, kibirka, rabay in aan dagaal badan (i waxan garan karaa….ee la soo dhaafay, waxa ay ii noqon lahaa )…. markaas barta in, waxa uu sidoo kale ka dhigay go'aanka si xor ah doonista in ciyaaray galay natiijada kama dambaysta ah. Dhibaatada waxa ay tahay aan waxba garan oo mid ka mid ah kuwa occured. Haddii aan bilaabi amraya dadka ku salaysan ku reebtay saamayn beenta our, iyo, dembiyadayadii oo dhan….i kula tahay in aad heli lahaa in aan waa in dhammaan la iska xiraa. George zzimmerman waa dambi ah shaygu booliska….oo waxaa laga yaabaa in dambi ah oo dheeraad ah, laakiin aan halkaas, i kaliya ma aqaano waxa.
digirta • August 19, 2013 at 10:47 waxaan ahay • Reply
Zimmerman aan is eedeeyay waa waxa aan u malaynayaa in caro ah run ahaantii waxay ahayd abbaaraha. Anigu waan madoobahay, laakiin aan taageero aan ku salaysan jinsiyad at dhan. Haddii jinsiyadaha ayaa lagu soo jeestay waxaan dareemayaa lahaa 100% Jidka saxda ah isla. Nin qori oo ay kasoo horjeeddo kid ah.
Waxaan sidoo kale qabaa in marka aad Abuuraha reer biimayno ama xaalad khatar ah.. aad tahay mas'uulka in shahaado qaar ka mid ah… Kaliya waxaan jeclaan lahaa FL sharciga qaar ka mid ah in isaga ciqaabi laga yaabaa, maxaa yeelay, Z u soo baxay raadinaya dhibaato habeenkaas.
Waxaan run ahaantii rumaysanahay haddii koobiyeyn a soo dhawaaday Trayvon, Trayon kastoo kacsan, weli noqon lahaa nool yahay maanta. Waxaan u maleynayaa in waxa sababta aan sidaas u xanaaqsan ahay. Waxaan kaliya u arkaan xaaladda sida kid ah oo naftiisa u lumiya lagu hayo si la mid ah, haddii aan ka, mas'uuliyadda sidii nin.
pepjrp • August 19, 2013 at 10:47 waxaan ahay • Reply
Waxaad ma oga xaqiiqada ka mid ah bean. Hel runta iyo laga yaabee inaad ka soo rayn doonaan.
SB, Off dhan youtubes ugu soo ofniesfve ee aan abid arko. Iyadu waa sida cunsurinimo sida Sharpton iyo Jackson. Waxaan aan waligood laga sidaas embarassed aan dalka tan iyo markii sob in madow ku guuleystay on tartanka qalloocan!Markii ay xirto funaanad gacamo kuwa off AF1 waan tegi f'king nuts.
Ma uusan ku Cassiyaanna! Hel xaqiiqooyinka. ha u dhammu u ogaadaan in aad.
Nathanial Poling • August 19, 2013 at 10:48 waxaan ahay • Reply
Waxay Dheheen ma aha in aad si aad isaga raaca… in uusan u muuqan in ay amarka toos ah. Intaas waxaa sii dheer, operator ku 9-1-1 uusan haysan kama dambaysta ah. Waxay ahayd wayn in wiil lahaa si ay u dhintaan, laakiin waxaan shaki aad wiilasha sidoo kale soo bixiyey lahaa abid weeraray Mr. Zimmerman oo garaaceen madaxiisa ka gees maraan oo sanka ka jabay. Waxa uu ka codsaday lahaa cidda ay ahaayeen, waxay si xishmad leh ugu jawaabay karo oo sababta ay ordaya u dhexeeya guryaha ee bulshada ka mid ah markaas dajisay iyo nolosha on tagaa.
pepjrp • August 19, 2013 at 10:48 waxaan ahay • Reply
Your marwada a nice Deborah, laakiin aad tahay qalad ah sida ay noqon kartaa marka aad ayaa sheegay in ay ku saabsan tahay George Zimmerman booliska aan addeecin markay isagii u sheegeen “MA in la raaco.” Ma uusan ku Cassiyaanna qof. Dhegayso audio on Youtube! Waxa uu sheegay in OK iyo bilaabay dib uu gaari ku dul socda. Wuxuu ahaa ka mid ah neefta markii uu ku soo socda Martin, laakiin ka dib markii uu sheegay in OK, neefsashada culus joojiyay sida wuu u jawaabay oo labo ka mid ah su'aalo badan oo ku saabsan cinwaanka for gaysteen ka dibna wuxuu u lulataa sida tiro ka mid ah daqiiqo baxeen by oo wuxuu si cad u sheegayaa in uusan la ogaado meesha Martin tegey. Martin ahayd oo kaliya 50 yards ka gurigiisa, laakiin waxa uu dib u yimid goobta. Your comment of LINE HOOSTA WAA George Zimmerman amarkii A TOOSKA AH UGA SHARCI FULINTA gebi ahaanba waa nonfactual oo aadan u muuqdaan sida nooca qofka oo doonaya in uu faafin been. Waxaad la been u sheegay sida ay leeyihiin 1,000 iyo 1,000 ee dadka kale! Listen and cilmi iyo waxaad ka heli doontaa in lay runta aan idiin sheego! iyo farsamo, ah 911 operator sheegay in Zimmerman “Waxaan uma baahnid inaad u baahan tahay in ay sameeyaan in”. Zimmerman yiri OK iyo aad maqli karo in uu joojiyay ordaya. Iska xaqiiqooyinka ma aha kuwo Rumayn ka been cunsuri.
Andrew Keeter • August 19, 2013 at 10:49 waxaan ahay • Reply
Trip waxaan u leeyihiin in ay
maxaa yeelay, wuxuu aad u wanaagsan uu sharaxayaa uu abuurey.
Tani waxay iska hor imaad u dhexeeya Zimmermann iyo Martin ahaa wax
dhaca si maalinle ah wadankan iyo sida ugu badan ee musiibo sida ay tahay in
arko nin dhalinyaro ah ku dilay, waxaa ka badan oo musiibo ah si aad u aragto warbaahinta this leexdo xagga
tijaabo ah midab kala eryay oo aan lahayn natiijada wanaagsan haddii Zimmermann ma waxaa laga helay
eed. Habeenkaas Trayvon lagu toogtay
ma jirin muuqaalka isirka by Zimmermann in la xaqiijiyay karaa. The warbaahinta la socdaan Jesse Jackon, Al
Sharpton, Madaxweyne Obama, New Black Panther Xisbiga iyo waqti kale oo waa weyn
caanka ah African American istaagay inuu siiyo aragtidooda ku saabsan waxa ay la tahay
markii mid ka mid ah mooyee, Trayvon Martin iyo George Zimmermann ma run ahaantii waa yiqiin waxa dadka
dhacay. Tallaabooyinkan waxay abuuray duufaan
hadalka rabshadaha isirka in aan la joojin laga yaabaa in. Waxaan qabaa waa in aan ku tukado, waayo labada dhinac ee this
maxkamadda oo aad weydiisan kartaa in Ilaah in aan xoojinno si ay u tacsiyeeyaan kuwa dhaawicid, cadhaysiiyeen, iyo
jahwareer ku saabsan xaaladan oo dhan.
Shaydaanku wuxuu leeyahay control of warbaahinta dalka iyo wuxuu sameeyo waxa uu rabo
waxaa la. Waxa kaliya ee aad ku maqli ku saabsan sheekooyinka
in ay heli doonaan dareenka ugu sidaas ka dibna, kuwaas oo saldhigyada warbaahinta u janjeedhaan iibin karaan
markii hawada ganacsiyada si ay u muujiyaan commercials.
Waxaan ula jeedaa intee ka badan ayaad u malaynaysaa in ay soo eedeeyay lagu jiro xilliyada of this
maxkamad on Fox News, CNN, MSNBC iyo kooxaha kale si ay ganacsatada ka heli karto
commercials ay dadweynaha iibinta waxyaabaha ay. Ma ahan oo ku saabsan ka warbixinta wararka ku saabsan
dhimashada jid Ninkii dhallinyarada ahaa Wakhtigiisii ​​ka hor buu oo qofka ka toogtay…..waxaa
ku saabsan lacagta oo waa xididka xumaatooyinka oo dhan.
Kuwani xarumaha warbaahinta ayaa muujinaya raad this ee saddexdii ee la soo dhaafay
todobaad ururinta lacag dheeraad ah iyo in ka badan oo kaliya waxay jecel. Waxaan sharad in ay rajaynayaan maxkamadda tegi lahaa on dheer
si ay u samayn karin miyusiimka in faa'iidada.
Waa jiran sida aan u siin aad u badan ee nolosheena in TV oo adeeca waxa sida
waa macalinka marka aan waa in diiradda Ciise. xitaa aad qabto gabay hadalka ku saabsan qaadashada
indhahaaga oo idinka mid ah iyo iyaga gelinaya isaga on.
Waxaan u baahanahay in indhuhu noo iska TV iyo diiradda on our bulshada gaar ah iyo kaniisadaha. Haddii aanu ku nool nahay California, Virginia, New York,
Montana, Texas, iwm… waxaan waxba kama bedeli karo waxa ka dhacay Florida halkaasoo Trayvon
ayaa la toogtay, laakiin waxaan ka beddeli karaa sida bulshada u dhaqmo. Waxaan caruurta ku saabsan Ilaah baro, Ciise, iyo
Ruuxa Quduuska ah. Waxaan doortaan bulshada
madaxda, saraakiisha dowladda, madaxda bilayska, Maayarrada, iwm taagan for our Christian
qiyamka oo aan la celin doonaa marka ay hanjabay by kuwa weli ku
astura aragoodana. Waxaan ma haysan karto
oo diiradda saaraya waxa dhacaya saacadaha marka bulshadeena gaar ah la dhibtoonaya
ka arimo la mid ah. Waxaan ahay caddaan ah 28
lab oo soo hayay dalkan dagaal ee dagaalka Ciraaq. I geeyay dalka halkaas oo ay leeyihiin
waxba iyo siiyay maanta in ay arkeen oo dhan wax badan oo weli aan qaadan
dadka siin lahaa gacan ama lug in ay leeyihiin.
Waxaa i sameeyey oo i ogaadaan waxaa jira dhibaatooyin aad u weyn Adduun ka badan
baxdo yar aan sii wadaan in ay sameeyaan. Shaydaanku
doonayo in uu reer Potugal dadka ilaa iyo aad u hesho oo dhan uga caroodeen badan rabshadaha isirka. Qof kale waxa uu sheegay in ay post, laakiin waxaan arki doonaa
waxa aad u odhan. midabka kaliya ee aan u baahan tahay inaad
welwelsan yahay waa midabka cas-ka dhigan dhiigga Ciise. Waxaan si dhab ah aad dareento xanuun isagoo jinsiyadda
muuqaalka sababtoo ah markii aan yaraa waxaan lahaa aniga ii gaar ah oo weli maanta aan arko
waxaa. Gdoggydog05 ka dhigay hal dhibic ka weyn oo ku saabsan
carruurta cad kuwaas oo jaamacad ma aan tegi karo, maxaa yeelay, iyagu ma ay leeyihiin kun ee
dollars agagaarka been inay afuufaan, laakiin reer jinsiyadaha kale ay awoodaan si ay u helaan lacag
dowladda si iyaga ka caawin.
wax la mid ah u dhaco shaqooyin at cunto si dhakhso ah ama ganacsiyada sida in. Waxaan ahaa cunsurinimo ka qortay markii aan da'da yaraa
isku dayaya in ay shaqo at McDonalds iyo laba kids ku jiray jinsi ka duwan i markaas aad u hesho
helay shaqo iyo waxaan aan ku sameeyey. Ma ahan caddaalad ah,
laakiin nolosha ma tahay mid xaq ah oo mararka qaarkood oo la kaliya aad muujinaya in shaydaanku wuxuu u yahay
helitaanka aad ugu. Haddii cafiyi kara Ilaah oo dhan
aad dembi sababta midabka maqaarka noqon lahayd arrin isaga la? Kala sooca waa adduunyo, Shaydaanku waa
kan madaxda dunida ah ilaa Ciise yimaado dib u noqon. Ilaa markaas waa in aanu ku nool nahay adduun, laakiin waxaan
Qasab ma aha in ay ku noolaadaan dunida this. Waxaan
noolahay wax ka badan dunida this nafteena gelinaya kor tartanka. oo dhan waxaan ku soo maray halganka. Qaar ka mid ah soo maray halgan ku jiray oo
sababa midabka maqaarka. Qaar ka mid ah
dhex maray halgan maxaa yeelay jidka jidhkooda u muuqataa. Qaar ka mid ah waxay soo mareen halgan gudaha ah in
ayaa sababay laga bilaabo dhalashada. Qaar ka mid ah ku sameeyeen
alaabtii waxay dareemayaan in ay marnaba heli kartaa in ka badan iyo wixii ku dhacay dadka oo dhan
markay u yimaadeen inay ogaadaan Masiix? Waxay dhan
ayaa caawiyo halganka ay. doono
ma aynu u dhicin oo wuxuu nagu hagi doona dhibkii. Tani Trayvon vs wax Zimmermann u baahan yahay in
joojiyo maxaa yeelay xukunka la gaaray.
nidaamka caddaaladda ayaa sameeyey ay shaqo iyo waxaan u baahan nahay in ay eegaan ka
xaqiiqooyinka. Haddii ay dhacdo in this ahaa laba nin u dhexaysa
dadka midabka la mid ah waxaan ummadda lahaa marna maqlay oo ka mid ah
isku xukunka ayaa la gaarey lahaa oo aan cid og. Waxaan u baahan nahay in ay joojiyaan daynin warbaahinta iyo
caanka ah xakameeyo, fikirkaanaga. Haddii aan
Rumaysad noo nin saaray ka dibna waxaan gabi doono.
Jooji diiradda iyaga on iyo indhihiinna aad u geliyeen on.
shope • August 19, 2013 at 10:50 waxaan ahay • Reply
Whites ayaa weeraray kiiyoo waayo sabab uun. Xusuusnow KKK ah?
Matty • August 19, 2013 at 10:51 waxaan ahay • Reply
Inkasta oo aan si buuxda u raacsan tahay wax kasta oo halkan ku yidhi, Waxaan qabaa inay muhim tahay in la raaco xaqiiqda oo aan dareenkeena ay dhacdo in this. booliska iyo FBI ayaa go'aamisay in midab ma door kiiskan. Mana ay helin cadayn in Zimmerman ka qortay Martin ku salaysan uu tartanka. Waxay heleen cadaymo muujinaya in Zimmerman ka qortay Martin ku saleysan dhaqdhaqaaqyada laga shakiyo. Zimmerman jawaabay oo kaliya markii ay booliska waxa tartanka Martin ahaa weydiiyay. ugama uu kor u wac oo waxaad ku tidhaahdaa uu socda nin dhallinyaro ah oo madow. Ma dhahayo ma ahayn midab muuqaalka. Laakiin cadayn ma noo oggolaan in ay sameeyaan go'aan in. Oo ka Faydno waxa aad dooranayso in ay aaminsan yihiin waxa ay aheyd jinsiyadda marka ay jirto wax caddeyn ah oo xaqiiqda ka dhigaya kiiska isir marka uma baahna in ay. Race ma ay iman maxkamadda. Haddii xeer-rumeysan yahay Zimmerman ahaa ku simaha ka mid ah sababaha cunsuri, ma waxaad u malayseen in ay ku soo fuulo? Xeer-ilaalinta ayaa loo baahan yahay si aad u hesho xeerbeegtidu ee ay kooxdiisa…rinjiyaynta Zimmerman sida cunsuri ay noqon lahaayeen sida ugu wanaagsan ee ay sameeyaan in.
Arrinta aad la hadlay oo ku saabsan waa cajiib ah oo dhab ah oo cajiib ah oo fool xun. Waxaan kaliya ku dooday in haddii ay taasi ku, waxaa rinjiyaynta sida arrin cunsurinimo marka caddayn uusan inayna ku taageeri waa khatar iyo caafimaad qabin.
Samuel Coleman • August 19, 2013 at 10:51 waxaan ahay • Reply
Daawo Video this….
Safarka aan jeclahay oo aad Ixtiraam, aad music iyo fariin, laakiin aan gebi ahaanba raacsan Jonathan Sampson hoos….
Waxaan ku raacsan tahay in ay jirto xaqiiqo ah maanta midab laakiin kiiskan helitaanka dareenka warbaahinta waa farabadan of cabatay.
Dhamaan kiisaska in Glen Beck hadlay oo ku saabsan helay 000000000 dareenka Media…. maxaad ??/ bec waxaan leenahay a Liberal aan Christian Country oo la socda Aabbaha Devil ah…. Oo waxaynu haysannaa Madaxweynaha oo u ciyaara card tartanka abid daqiiqadii .. sababta ? Si aad u hesho waxa uu doonayo …. ma for Justice ma for xaqa….
Sida nin ugu cad walaalkay lagu qabtay dhibic qoriga bec uu ahaa cad.. sida nin caddaan My aabbihiis iyo college saaxiib ayaa soo baxay goob joog iyo helay wareegay koox ka mid ah Madowga bec wiilasha cad aan la moodayay in ay ku sugan aagga in magaalada.. walaalahayga saaxiib helay bastoolad ku qoysay oo markaasay sii daayeen.. My aabe kula hadlay erayadii Ruuxa Quduuska ah, weydiinaya raggii ” aad gaajaysan tahay” iyo Ilaah garanaya, weli ma ay cunin in dhowr maalmood ka badbaadiyey Aabbahay…….
No aan nin madow ma ihi laakiin waxaan dareemayaa xun, waayo, Trayvon iyo marka ay jirto cunsuriyad REAL…
Our Country waa la socday ku shubeyso.. Romans 1. Ilaah wuxuu ina siiyey ilaa maanka baadi…. Waxa aan ku arkay waa wax la barbardhigo waxa ay u yimaadaan.. Calaamadee qaybaha haddii America sii jidkii uu u kacdo waxa ay noqon doontaa sharci-darrada ah in ay noqon Christian a iyo waxaan la dilay doonaa jidadka..
Dave • August 19, 2013 at 10:51 waxaan ahay • Reply
Mahad maqaalka, Trip.
Mid ka mid ah wax Waxaan qabaa in ay si wanaagsan noo, waayo, sida dadka Masiixiyiinta ah in maskaxda lagu hayo waa in aan necbahay cunsuriyadda muddo Dulmi /, iyadoo aan loo eegayn waxa foomka ama fashion ay timaado in ama midabka waxa uu si toos ah xagga. Arinta murugada ku saabsan waxyaabaha sida kiiskan ku saabsan Trayvon waa farqiga badanaa noqotaa ballaaran & waxa ay u muuqataa tallaabo dheeraad ah ayaa laga qaadayaa gadaal halkii ay horey u, maxaa yeelay, default badan oo ay ku qaadato dhinac dabiiciga ah (midabka, tusaale ahaan) halkii ay doorashada dhinac ku salaysan caddaalad / Dulmi. Boqortooyada Ilaah waa in la beddelo jidka lenses ee aan xirto arki dunida. Waa inaan ku saabsan simaha caddaalad badan simaha sida ay dadkeenna u gaar ah. Waa inaan ku saabsan jecel naxariis badan lagu shiday by cadho, hadayana jirin.
Tani ma aha dambeyntii arrin jinsiyadeed. Tani waa arrin aadanaha dembiga iska muujinaysaa qaabab badan oo kala duwan, mararka qaarkood by qaadashada dhinac ku salaysan jinsiyad. Dadka ka soo jeeda jinsiyadaha kala duwan oo dhan lagu hafray & felisin muuqaal. Waa in aan weli qotomin midab gaar ah (kala duwan ka badan noo gaar ah) sida cadowga. Dadka qalbiyada dembiga badan lagu hafray. Ma jinsiyadaha ee & naftooda ugu dambeyntii in sameeyaan in. Haddii aan iloobin in & noolaan hoos line ee wixii la filayaa muwaadiniinta boqortooyada, aynu doonaa khadadka ku salaysan jinsiyad & kaliya aakhirka ku daray in qaylada.
Raaca aynu la dagaallanno caddaalad halkaas oo loo baahan yahay in la diriray, ma si fudud kuwa aan la xidhiidhi karaa, laakiinse xagga kuwa u baahan yihiin iyadoo aan loo eegin. Shaydaanku & Dembigu waa cadaawayaal ku. Oo iyagu looga adkaaday Ciise iskutallaabta & xabaashii madhan. Waxaa laga yaabaa in aan marka hore loo qeexay cas midabka badan oo kale oo kasta, midabka ah ee dhiigga Masiix oo nagu soo maydhay nadiif ah.
Nicole • August 19, 2013 at 10:55 waxaan ahay • Reply
Waxaan hubaal heshiin tartanka in ugu dambeyntii waa arrin dembi ah, waxaa aan la beeninayn. Laakiin qeexidda arrimaha dembi gaar ah naga caawisaa iyaga ku ool ah wax looga qabto. ganacsiga Sex waa at xididka, arrinta damaca laakiin qabashada in uu yahay mid aad u kala duwan ka badan ka qabashada a qabatinka dembi shakhsiyeed. Kitaabka Quduuska ah wuxuu leeyahay tusaalooyin badan oo ka mid ah caddaymaha sida fiican u. Iyo dhaq oo dhan waa in laga shaqeeyo ku fiiqaya dadka Masiix, xalka keliya ee dhabta ah.
digirta • August 19, 2013 at 10:55 waxaan ahay • Reply
Anigu waxaan ahay Christian marka hore, labaad madow- ama saddexaad ama si daacad waxaan ahay kaliya Christian a. Waxaan taageerayaa Trayvon iyo qoyskiisa ma yeelay, wuxuu ahaa madow, laakiin maxaa yeelay, wuxuu ahaa wiil yar. Xukunka dhimashada feer waa mid aad u adag xukun waayo, qalbigaygu ama qalbigayguna in ay la tacaalaan. Trayvon lahaa si ka badan si ay u bartaan nolosha… Miyaanan Waxaan Soo Gabagabeyn ilna il iyo, iligna ilig caddaalad la Ciise a? Ma laga yaabaa in aan Trayvon lagu toogtay gacanta ama lugta? Waa maxay sababta uu qalbigiisa? Anigu waxaan ahay kaliya kuwo calool xun, waayo, khasaaraha ka mid ah nolosha, oo ma laha lahaa waxa uu ahaa midabka- Ilmaha waa dhintay. Waxaan sidoo kale qabaa sida dadka waaweyn, Zimmerman waxa uu leeyahay mas'uuliyad dheeraad ah (indhahayga in) si ay u sii dajiyaan xaaladda. Hadda, ma uu samayn in? Ula xidhiidha hab saaxiibtinimo inuu gaadhka? Kaliya Ilaah wuxuu og yahay. Oo Ilaah kaliya abaalmarin doonaa caddaalad run.
“All waan ogahay waa in aan guriga this ma ihi [adduunka] ma aha meesha aan iska leh.”
Nathanial Poling • August 19, 2013 at 10:56 waxaan ahay • Reply
Ma waxaad haddii loo maleeyo in Zimmerman loogu talagalay waayo, qalbigiisii? Waan hubaa in Zimmerman ka jeclaan lahaa in aan dilo yarkaan in uu isku dayayo inuu ka soo garaacday maskaxda uu.
digirta • August 19, 2013 at 10:56 waxaan ahay • Reply
rasaas ayaa si toos ah u tageen wadnaha, sidaa daraadeed waxa aan dhicin in loo qaato in uu noqon lahaa uu ahaa Zimmerman ee ujeedadu.
Wax kasta oo uu doorbidayo ahaa waxba kama bedeli karo waxa uu si dhab ah sameeyey. Anigu waxaan ahay hubaa haddii aan ahaa dhaawac, oo waxaan haystay qori (taas oo lagama yaabo), caloosha aan ganayo lahaa, cudud, lugta- meel kale gooni qalbigiisa ka.
sida muuqata aad weligayo dagaalka a… haddii aad waqti in wax badan in ay ujeedadoodu aad toogtay laga yaabaa in hawada oo aynu nin ku cararaan
Tylor • August 19, 2013 at 11:00 waxaan ahay • Reply
aynu sii xaajoodo arrinta cunsuriyadda, haa. laakiin joojiyaan been Mushrikiin midab leh kiiskan. ka dib markii sannad ka mid ah ururinta cadaymaha qofna weligiis ahaa awoodaan in ay ka heli wax falgal kasta oo cadeyn cunsuriyada ee la soo dhaafay Zimmerman ama on habeenkaas. aynu joojin ceyrsaneysa Kyung iyo diiradda on cunsuriyada dhabta ah – sida nooca warbaahinta tusay kiiskan oo dhan si ay u kicin cadaawad jinsiyadeed iyo noo jeexi gooni kaliya in la kordhiyo ratings ay.
Tony Cline • August 19, 2013 at 11:00 waxaan ahay • Reply
Ma cunsurinimo ah in loo qaato in nin madow waa ka badan oo khatar badan jinsiyadaha kale marka African-Americans ka samaysan 12.6% dadweynaha laakiin samayn 49.7% diliddoodii, iyo sidoo kale boqolkiiba aad u dhigmin ee kufsi, Weerarrada, dhaca, iyo dembiyada kale ee kasta ee FBI raad marka laga reebo DUI? Waa cunsuri in, ama ay tahay oo kaliya caqli go'aan-qaadasho ku saleysan xaqiiqooyinka la xiriira? Anigu waxba ma aan isagoo sheegay in cunsuriyadda kajirin; sameeyaa, iyo dhinacyada oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira wax dheeraad ah si ay wada hadal ku badan leh in qof kasta oo khatar ka dareemo agagaarka dad tira waxay u badan tahay in ay dambiilayaal dulmiga waa cunsuri.
Washington DC wacdiyayaal • August 19, 2013 at 11:00 waxaan ahay • Reply
“gacaliyayaalow, marna aarsanina, laakiin waxaa ka tago si ay cadhada Ilaah ugu, waayo, waxaa qoran, "Aarsasho anigaa iska leh, Oo waan abaalmarin doonaa, Rabbigu wuxuu leeyahay. "Si lid ku ah, "Haddii cadowgaagu gaajaysan yahay, quudisaan; hadduu harraadsan, isaga wax sii cabbi; waayo, haddaad saas samayso waxaad madaxiisa ku tuuli doonaa gubanaya uu dhuxul. "Ha laydinka adkaan by xun, laakiinse sharka wanaag kaga adkow.” ~ Romans 12:19-21
C. • August 19, 2013 at 11:01 waxaan ahay • Reply
Ma run ahaantii khilaafsan tahay wax aad ku tidhi, gaar ahaan sida foosha xun waa marka dadka la siiyo faa'idada shakiga ee kuwa maalin daqiiqado maalin. Laakiin isagoo saaxiibo la gaysteen qaar ka mid ah waan ogahay in, waayo, qaar ka mid ah, siinta lacagta in shaki ku heli lahayd iyagaa dilay. Adduunyo waa sidaas oo jabay iyo wiswis mararka qaarkood, la xadgudubka iyo junk oo dhan kor fidiyeen meeshii. Kaliya Ciise na kabixi kartaa waxaa ka mid ah.
Waan necbahay in aad si ay ula walax in ka qaban. Oo waan necbahay in siyaabo qaar ka mid ah muuqaalka waa a super fool xun, lagama maarmaan u xun (ma in ay dhacdo Zimmerman ah). Its adag aad, warbaahinta iyo dhaqanka in duuban tahay nooca image in ku dhawaad ​​wacdiyo furan, dagaal, sharci iskibriya. Iyo in ay jiraan dad lacag samaynta off dhaqanka this rabshadaha iyo Godlessness. Iyo in dad aad u badan kuwaas oo aadan fahmin waxa ay la mid tahay in uu noqdo nin kale daryeel yaabaa yar oo ku saabsan garanaya waxa ay ka dhigan in ay nin kale.
Waxaan jeclahay in jacaylka Ilaah waa sidaas nooga xoog badan dunida. Kaliya waxaan jeclaan lahaa in jacaylka Ilaah lagu marar badan soo bandhigay lahaa in dunidu ina dhex, oo ha nagula inkastoo.
Wada hadalka waa hubaal sii wadi. :)
alaabtii Great Mr. Lee. Ilaah ammaan!
apallo95 • August 19, 2013 at 11:01 waxaan ahay • Reply
halka cunsuriyadda waa heshiis weyn dad badan u muuqdaan inay iska ilaawaan Zimmerman in uu is Latino. kaliya gelinaya in halkaas sida xaqiiqo ah in waa in lagu hayaa maskaxda ku, marka arrintani waxa ay
Lizzi • August 19, 2013 at 11:01 waxaan ahay • Reply
Waxaan aaminsanahay in hab aad wax ku ool ah ee dagaalka ka dhanka ah midab waa in ay leeyihiin kuwa Eebe ka dhawrsada, nin madow daacad ah kuwaas oo ku nool noloshooda in wiiqi lagu hafray inoo in la tilmaamo oo waxaad ku tidhaahdaa No, dembigu waa dhibaatada, ma tartanka. Waxaan leeyahay fikrad aad u sarreeya oo ku dhow oo dhan oo ka mid ah ragga madow iyo dumarka Waxaan mudan in loo yeedho asxaabta iyo hanuunin bixiya. Waxaan ahay u badan tahay in la janjeedhaan in ay raalli ka badan wax kasta oo kale… Reach Records waa qodob weyn in this, Waayo, gabadh timo cad sii kordhaya ee nimco iyo la weyn dhisna ay music. Waa maxay waxaad samaynayso waa mid wax tar leh.
Lynn • August 19, 2013 at 11:02 waxaan ahay • Reply
Aamiin iyo Aamiin!! Waa in aan jeclaado, jacaylka Masiix oo Ilaah u barya labada qoysaska in ay ku lug. Midab waa dhab oo waa qaracan inaan arko. Waad ku mahadsan tahay tan la wadaago!
Michael • August 19, 2013 at 11:02 waxaan ahay • Reply
Waxaan this hore fiidkii qoray ka hor inta aan akhriyey aad post, taas oo aan gebi ahaanba ka heli iyadoo jidka ag fadhida, oo waxaan u maleeyay in aan u wadaagi lahaa
Sidaas daraaddeed haddii aad qarineyseen hoos dhagax Zimmerman maalin kale ayaa laga helay wax dembi ah. Qaar ka mid ah hambalyeeyo doonaa, dadka kale u qaylin doonaa qalad. Xukunka ayaa dalka kala qaybiyey iyo mararka qaar xitaa kaniisadda. Waxaan akhriyeyey a comment maanta ka qof ee warbaahinta, iyo comments ay dhab ahaantii ka dhigeen kasoobaxa dhiig. Shakhsiyan waxaan siiyey wax badan oo ka mid ah fikirrada, oo waxaan haystaa aragtidayda, laakiin this post ma aha oo ku saabsan waxa aan ama uma maleynayo oo ku saabsan aquital Zimmerman ee. Ciise wuxuu ku yidhi in TUUG yimaado inuu wax xado, dilo oo wada baabbi'in….(John 10:10) Division waa dilaaga dahsoon. Waxa uu korayo ka miraha qadhaadhka ah waxaa lagu beeray ee qalbigayaga markii aannu indhahayaga iska Ciise iyo soo bixi doonaan haddii annagu uma baahnin. Luke 6:45 ayaa sheegay in “Ninka wanaagsan wuxuu maalka wanaagsan oo qalbiga ku jira ka soo saaraa wax wanaagsan; oo kan sharka lehna wuxuu sharka ka soo saaraa wax shar ah; waayo, afkiisu wuxuu ku hadlaa ka wixii qalbigiisa qabanaysa. ”
desciples Marka Ciise wasaaraddiisu bilaabay Ciise arkay sida dhaqdhaqaaqe politcal. Waxay rajaynayeen in Ciise u dhaqaaqdo gudaha iyo xaq khalad kasta oo Rome samayn jiray Yuhuudda. Waxay u badan tahay in ay ahaayeen caadi ah Ciise arrinkaas qaar ka mid ah madaxdii Roman haddii ay la micno rectifying sano oo shaqo. Weli maalin maalmaha ka mid ka wacdiyey Ciise jacaylka iyo addoonkii Dhuunta. Halkaa marka ay marayso qaar ka mid ah xertii probablly baxay tirada Ciise Eebase ma aha Bruce Lee qof. Waxaan la yaabanahay waxa ay u maleeyeen ah in si gaar ah? The dadka Yuhuudda ah ayaa la macaamilooday shaqo muddo aad u dheer. Dhab ahaantii waxaan aaminsanahay buugga la soo dhaafay ee Axdiga Hore si markii Ciise uu ahaa wax u eg 400 sano. miraha kuwa xanaaq iyo qadhaadh ka degan ayaa Kaltum Sh iyo waxay diyaar u tahay inay hesho xataa ahaayeen. Masiixa ayaa ugu dambeyntii yimaado oo ay ahayd waqti ay ku soo urura ciidamada, gacanta ka baxay fargeeto ah iyo duufaanka qalcaddii. Oo weliba intay la huriyo qoryihii Ciise baxay wacdiyaya inaad deriskaaga u jeclaataa iyo ku sameeyo dadka kale sida aad rabto in aad ku samaysaan idiin. Lahaa in ay iyaga u kaxayn waalan. Si aad ku dari cay dhaawac sida Ciise iskutallaabta ka sudhay, Waxa uu ka codsaday in Aabbuhu iyaga cafi doono, maxaa yeelay, way run ahaantii ma oga waxay falayeen. Sidaas waxa sameeya waxan oo dhan celceliska?
Ciise waxa uu ahaa dhaqdhaqaaqe jacaylka iyo sidii walaalihiis wiilal iyo gabdhoba aan u Ajiibay, ma waxa aan ku amray inay sidaas oo kale sameeyaan. Maxaa yeelay, dhamaadka Love maanta waa waxa kaliya ee abid ka badala doono wax. Waxaan digniin kartaa qalcaddii a, oo ka dibad waxaan rabnaa oo dhan, laakiin waxaa jiri doona markasta ajende qarsoon hadii aan aanay ka warqabin waxa ka mid ah marka hore. bogsata Love dhaawacmay ayaa waxay qalbiyadiinna iyo mideeya xiriirka jabay. Jacaylka, dhisaa, dhiirigelisaa, iyo Nicmooyin. Love ma xukumi, ama diido, waxaa misna. Waxaan nahay si degdeg ah u iloobin in halka intaynu weli dembiilayaal ahayn Masiixa ALL dhintay daadisay dhiig uu la sameeyey la heli karo si: taajir, masaakiinta, madow ah, caddaan ah, (iyo hooska kasta oo u dhexeeya)si toos ah, gay ah, agoonta, rajo la'aan ah, dadka bilaa guryaha ah, kuwa la dulmay u, ay diideen, diinta, Islaamiga ah, argagixisada, ilmaha molester tuuggu, Madaxweynaha bangiga, qareenka, dab damiye ah, siyaasi, dhakhtarkaaga, iyo qof kale oo kasta oo ayaa kasta barbaro neef dhulka this, Ciise wuxuu u dhintay iyaga u. Haddii ay jirto dibad in la sameeyo ka dibna ha ahaadeen irdaha jahannamo at by aroosadda Masiixa, oo sheegaya in Waxaan jeclaan doonaa, Annagu waxaannu u adeegi doonaa, waxaan ka cafiyi doonaa sida Ciise ku sameeyey noo.
Eric • August 19, 2013 at 11:02 waxaan ahay • Reply
Maxay African American, Aniga qudhaydu waxaan wicin Irish American, Kaliya waxaan ahay American, halkan ayaan u dhashay oo aan ku Ireland. Eeg in meesha kalasaar bilaabo qaybintii kooxo, markaas nahay kuwa idinka khayr roon, bilaabmin. Taasi eyda kalasaar cunsuriyadda, labada daalimiin ah, Trayvon, ahayd ku tilmaamay Georges’ madaxa dhulka, oo lagu daray haddii uu wax khalad samaynaya sababta ma uu kaliya u hoggaansamaan lahaa? George waa maqlay Qofta oo ha gaysteen ka qaban. Laakiin gubay calanka Maraykanka, ma African American, Mexico American, Irish American, Ingiriisi American, ama calanka American Scottish, kaliya American, waa khalad. Taasi waa sida sarre on Quluubta American kasta oo aan dhimanna ilaalinta wax kasta oo ay u taagan tahay. hanjabaad dil ah in qoyska Georges oo badan oo magaca dilalka Trayvon in ay dhaceen waa hab qaldan. Rabbigu wuxuu leeyahay toobad dhabanka kale si aad u, ama aan illoobi halkan waa mas'uul. Trayvon jirin weli, iyo George ahaa mid dhiig qaba no, waxay ahaayeen labada dhibanayaasha ay xaaladdu. Qofna ma ku waa iscasilaadiisa garaaceen oo ninna waa laga badiyay nolosha. Tani waxa ay ahayd oo dhan play siyaasadeed waayo, xoog iyo khaa'in weyn ayaa helay wixii uu doonayey. Hel rujin ee warbaahinta uusan erayga.
digirta • August 19, 2013 at 11:06 waxaan ahay • Reply
Waxaan jeclaan lahaa in la tixgeliyo oo kaliya American ah. Ma American Afrika. Laakiin bulshada hoogtay ma ii ogolaan doonaa in. Waxaan ahay sida American sida mid ka mid kale oo kasta. Laakiin warbaahinta ayaa sababay inta badan qaybin ah.. iyo dadka iibsaday u galay.
Waxaan xusuustaa mid ka mid ah shaqooyinka ugu horeysay ee aan lahaa. marwada A cad fadhiistay soo socda aniga iyo ii sheegay.. “Sidaas sameeyo aad ogaatid in aad marka hore -American Afrika, waxaannu ka soo kiraysteen?” Waxay dhoola caddeeyey, oo sidaas kuwa kibirka eegay. Dhanka kale, Waxaan dareemay xishoon, sida qaar ka mid ah daanyeer lanooga in gaaray zoo ah diyaar u ah inay iyaga sida ugu wanaagsan ee ay u muujiyaan “ugu horeysay” shaqaale madow samayn lahaa. Maxaad ayay u leeyihiin in ay farta ka baxay oo ii samee si dareemaan… cajiib ah? Kaliya waxaan rabay in aan caruur caadi ah iyada oo shaqo labaad ee jaamacadda, laakiin halkii aan noqday daadsanaanta khayaano..
Maxaad waxaan leeyahay African American? Well, ayaan u leedahay inaad doorato?
gabetaviano • August 19, 2013 at 11:06 waxaan ahay • Reply
erayada Awesome, Trip. Waan ka xumahay in aad qaadatay in ay dhex maraan xaaladaha aad leedahay. Waxaan aad u bogi waayo, ka hadlaya oo ku saabsan this, iyo xusuusin kuwa naga mid ah oo aan haysan. Press on!!!
David • August 19, 2013 at 11:07 waxaan ahay • Reply
Tani waxba u qaban la midab lahaa. Oh, waan hilmaamay, aad tahay madow si aad u malaynayso in aad qabto maamulka moral ku dacwaynayo qof cunsuriyad. Inta kale oo naga mid ah waa dhan cunsuriyiin. Sorry, qashinka oo uu soo bi'isaa dheer oo ku filan. Time si ay u faaruqiso qashinka iyo haa tahay, waa wakhti u dhaqaaqo.
geebee • August 19, 2013 at 11:08 waxaan ahay • Reply
Waan ka xumahay in aad la kulantay midab muuqaalka noloshaada. waxaan, aad, ayaa ku arkeen oo iska indho xaq leh
“subax wanaagsan” si karaaniyaal dukaanka ama dadka waawayn waxaan mari dariiqyada. Oo weliba waxaan loo hanjabay oo sheegay in aan ma ka tirsan xaafadda iyo lahaa fasax wanaagsan, maxaa yeelay, waxaan ahay cad. Gabadhayda ayaa loo diiday iyada xaq u leeyihiin in laba jeer codeeyaan, laakiin waxaan u malayn maayo in ay tahay “go'doomisa”. Laakiin markaas aanan haysan kuwa nacaybka faafiya sida Al Sharpton iyo theNAACP ila hadlay, waayo,; kaliya aniga igu saabsan. Sidii quruun, iyo sida Body of Masiix, Waxaan qabaa inaan u baahan tahay in aad ka fikirto YAR saabsan jinsiga iyo kala duwanaanta iyo, Waxaan u baahanahay inaan dib u helaan in ay ku “dheri barafku American weyn” Sidii quruun, iyo in ay xasuusiso nafteena in aan dhamaanteen u siman at cagta ee iskutallaabta sida Church ee. tartanka dheeraad ah iyo cunsuriyadda waa la wada hadlay, Cadhada ka badan ayaan ka, taas oo iyana, sida hab badbaadada a, aniga oo laga shakiyo ee jinsiyadaha kale oo yar tahay in ay kordhiso Injiil iyaga. Oo haddii aadan rabin in loola dhaqmo sida tuug la suurto gal, ama nin caqli leh, ama redneck, ha falo oo u dhaqmaan sida mid.
Leslie Pollard Stivers • August 19, 2013 at 11:08 waxaan ahay • Reply
Waan jeclaaday this post. Waxaan doorbida maqalka aragnimadaada iyo qalbi jabo aan in la xasuusto xaqiiqada ah in muuqaalka maalin kasta dhaca. Anigu ma caawin kartaa, Si kastaba ha ahaatee, si aad u weydiiso waxa adiga iyo dad kale ayaa aaminsan waxa kiiskan ayaa sheegay in cunsuriyad dambe. Waxa ay iila muuqataa in bulshada madow hadda si buuxda iska indha-tiray xaqiiqda kiiska (waxaad daawan kartaa wax oo dhan on YouTube) iyo shirada Bwin ee ku saabsan wax takoorid (ninna waxba kama oga hubaal haddii Zimmerman saas yeeleen iyo caddaynta qof ee maxkamadda ay soo jeedisay in GZ ma ahaa sida cunsurinimo sida dadka isaga ka dhigay baxay in uu noqdo). Maxaa dhacaya haddii Trayvon ahaa sare (marijuana in uu nidaamka, helay in qaliin ah)? Maxaa dhacaya haddii uu qof soo jeedisay uu ku jirey ayaa laga yaabaa in tuug la? Maxaa dhacaya haddii uu sameeyey oo dhab ahaantii eryan George iyo tuur dharbaaxo ugu horeysay? Waxyaalahan iyo in ka badan wax badan ka wada hadleen at dhererka in maxkamadda iyo caddaymaha soo jeedisay in kastoo Zimmerman baa keeni kara doorashooyin ka xigmad (ma helay ka bixi jiray gaari, tusaale ahaan), oo wuxuu wada yeelay wax sharci darro ah oo aan samayn. Annagu garan mayno jawaabaha oo dhan su'aalahan, laakiin oo kaliya sababtoo ah nin dhallinyaro ah waa madow macnaheedu ma aha in hadii uu u dhaqmo iyo sida tuug la isaga innaba lama qortay doono mid ka mid. Qofna ma u muuqataa in ay qirtaan in this kid rabshado (aabihii ee Sanford maxaa yeelay, wuxuu la joojiyay dagaalka, xadid, isticmaalka daroogada, iwm) go'aano qalad ah aad u. Waxaan doonayaa in aan arko post a ka nin madow ama naagtaa ooyaa dhamaadka ah in dhac gudahood in ay bulshada. Waxaan doonayaa in aan na laga tiro badan yahay in ay ku saabsan ganacsiga of our dhallinyada rag iyo dumar si ay u eegaan barayay sida Masiix. In kastoo labo wiil oo dhalinyaro ah waa yara fududee-hasyo badan, anigu waxaan ahay iyo waxaa laga yaabaa in aysan haysan waayo aragnimo la mid ah oo aan sameeyey, Oo waxaan iyaga u sheegi doonaa in ay sii dhoola at dadka xajin joonyadahoodii oo aan marnaba ka tegin, wanaagna wuu fali. Ma diidi cunsuriyada ka jirta, laakiin waxay ila eg tahay in ay tahay raacitaan ka xun ka kiiyoo hadda. nacayb cad karaysa Shar iyo Jaahil ah. Dadku waxa ay samaynayaan wax aad u neceb waxay. Nabadu uma jirto, Dambi dhaaf ma, ugu dambeyntii ma Ilaah rumaysta in Fasaxaaga ku Samreen wixii dunida ama in ay isaga ku kalsoon tahay si ay u furto. Shaqsiyaadka ku boodaan on fursad ay ku soo wici qof cunsuri. Masiixiyiinta ah ayaa helay in ay kor u run in wax walba. Waxaan ma ciyaari karo kulanka tartanka, waxaan saabsan beddelo dhaqanka waa–ma samaynta wanaagsan a “madow” dhaqanka ama “white” dhaqanka, laakiin haysta iyo mahadbana dhaqan awowyaasha-Christian oo dhiirigelineysa waxyaabaha sida jacaylka, nabadda, iyo dambi dhaaf. Masiixiyiintu waa inay arkaan kiiskan iftiinka runta ah, oo aan ka qayb oohin dagaal iyo saaxirad ugaarsi in uu ka socdo hadda. Duceeya labada qoysaska. Masiix, noo naxariiso oo dhan on. More fikirro on tartanka & dhaqanka halkan: http://wp.me/p2C5Cy-VY Waxaan idinku soo dhawaynaynaa martida iyo jawaab-celinta.
Scott Lee Sherwood • August 19, 2013 at 11:08 waxaan ahay • Reply
Sida walaalkiis la shaqayn jiray in Masiixa a, Waxaan marka hore ku odhan doonaa, si aan u ogaado this waa arrin ku adag in kaniisadda oo dhan u muuqataa in halakeeyay waqtiga oo dhan ee aan lahayn xalka dhabta ah, xataa haddii “xal” (Ciise) waa xaq ee soo socda noo. Waxaan doonayaa in aan tuso jacaylka Ilaah ee aan jawaab si aad blog, iyadoo aan loo eegayn waxa dambi aan.
In reading aad blog, aad u muuqday inay muujinayaan GZ in lagu xukumay dil degree 2aad si fudud maxaa yeelay, isagu “cunsurinimo ah ka qortay” TM. Tani ma aha sida shuqullada nidaamka garsoorka. Ma weydiin karaa xeerbeegtida si ay kuu siiso a “moral” guuleysto oo waxaan qiyaasi doonaa caddaalad si fudud maxaa yeelay, ma nin kale jeclaan ma midabka ah ee maqaarka. Xaqiiqooyinka waa in GZ ma aha cad inkastoo waxa warbaahinta / NAACP / Celebrity Hollywood / iyo Rev Al jeclaan lahaa inaad rumaysaan. Isagu waa qowmiyadda isku ah Hispanic jeeda / Latino iyo koray ee qoyska ka mid ah dhaqamada kala duwan. Waxa uu “ka qortay” TM sababtoo ah la jabsaday lahaa dhawaan ka dhacay beesha markaas dajisay. Iyada oo hoodie a on iyo jiinis, ka dib markii qof ka dib, aan kuu sheegi karaa waxa jinsiyadda / qowmiyadda, iyagu waa. Waxaan tababare kubada cagta iyo xirtaan wata waqtiga oo dhan dayrta, oo aan eey u gaar ah ayaa diirteen at i soo socda gurigayga soo gala marka aan lahaa aan hoodie on maxaa yeelay, iyadu ma ay i aqoonsadaan. Waxaad ku socon karaan bangiyada inta badan ama ururada deynta xiran hoodie a. Waxay joojin doonaa oo idin waydiisan inaad ka saartid. Isla tagaa, waayo, koofiyadaha iyo muraayadaha inta badan hay'adaha maaliyadeed. iyagu waa “cunsurinimo muuqaalka”? Dabcan maya, laakiin waa “muuqaalka”, iyo tani ma aha khalad. Waxaan ALL sidaas u yeelaan inay midba midka kale waqtiga oo dhan. Oo haa, Waxaan la raacay by ammaanka dukaanka ka hor, iyo waxaan la joojiyey by booliska iyo warsan ka hor, iyo dukaanka kasta sahlanaato dugsiyada dhow ugu sarreeya, waxay sii dayn maayo ardayda ku yimaadaan leh boorsooyinka dhabarka, oo waxay xaddido tirada ardayda ee dukaanka. Waxaan ku nool California iyo magaalada aan ku noolahay waa dhaqamada. In badan oo dukaamada sida aan Safeway hoose iyo Walmart, kooxaha ammaanka ama khasaare ka hortagga leeyihiin laga tirada badan oo madow, Asia, qowmiyado Hispanic. Haddii ay ka shakiyaan qof ee suurto gal ah dembi, ama suurawdo a “muuqaal”, waa midab haddii ay iyaga u raacdaan agagaarka dukaanka ama isha ku hay iyaga on, ama iyaga loo joojiyo si su'aalo haddii labada ay yihiin madow ..? Waxaan soo arkay waxa dhici, sidaas darteed waa su'aal sharci ah.
Waxa ay iila muuqataa in inta badan dadka waawayn in xanaaqsan yihiin la xukunka iyo waxaa ay yihiin kuwa ugu codka oo ku saabsan waxa ay yihiin dubbeyn in bartey xuquuqda madaniga TM ayaa xadgudbay. In maalin ee maanta iyo da ', dambi baahsan iyo tixgalin u ah nolosha aadanaha, halkaas oo erayo kale oo sharaf iyo DAACADNIMADATACLIINTA lumay badda ah “waxa ku jira ii” iyo maskax ah oo xaq u baahsan, inta badan dadka waawayn, kuwaas oo aan ku siin yaabaa qeexidda saxda ah ee “xuquuqda madaniga ah”. Waxay saf ugu dambeeya jackwagons sida Rev Al Sharpton, iyo NAACP, loogana Jaahil ah bulshada ka dadka sidii Raaxeel Jeantel oo aanan uga dhigin ilmaha Boodhkan ee kiiska cunsuriyad ay. Really? Kuwani waa dadka waawayn ka gaaray si ay ula dagaalamaan “xuquuqda madaniga ah” dagaalkii midab bulshada madow? Kuwani waa kuwa aad rabto in aad la taagan? Fadlan. Waxaan qabaa Dr. Martin Luther King u ooya lahaa haddii uu arkay waxa a folks meeshu kuwan oo kale ayaa ka jeestay, cunsuriyadda iyo xuquuqda madaniga dagaalka, galay. Xaqiiqdu waxay tahay in midab ma aha cadowga ugu weyn ee dambe, waayo madow America. Ma aha xitaa u dhow. Black on dembi Black, birthed by burburka joogtada ah ee unit qoyska, iyo catalyzed by nidaamka ah in ayaa sheegay in Qaramada aad leedahay wax, oo waxay qaadan doonaan daryeelka aad of, waa meel wanaagsan oo si aad u bilowdo, haddii aad dhabtii doonaysid in la garaaco waxay Rafaa ugu weyn Wajiyada bulshada madow. Dhanka kale, waxaa jira qaar ka mid ah in ay diiradda saaraan xalalka iyo waxaa ka qabashada qaar ka mid ah, kuwaas oo degaa. The dadka waawayn ee xarunta cilmibaadhista qaranka ee Siyaasadda Dadweynaha iyo Project 21 Initiative waa folks mid aan la isku toosin doonaa iyo taageero maalinta oo dhan.
Ugu dambayntii, jacaylka Masiix ayaa ku guuleysan doona. Waxaa had iyo jeer ma. Oo waxaa dhici doonaa qalbi keliya waqti.
Ha i sii dhammaystiraysaa by isagoo sheegay in aan ognahay in cunsuriyada ka jirta iyo dhacdo maalin kasta. Waxaana nahay kuwo ka weyn in. jinsiyad kasta ama qowmiyadda in waxa ay soo martay qaniinyada oo qudhmay ee cunsuriyada ayaa la abuuray by Ilaah in ay ka gudbaan oo noqon ka weyn nacayb in. The nin weyn iyo haweenka oo ay taarikhda Maraykanka madow ugu horayn ay calaamaddu ku ab by midab aan daynin kulligood baabbi'iyee. Waxay u kacay kor ku xusan duruufaha iyo si kasta adkaaday. Waxa ay kaga tagi lahaa iyo sida loo isticmaalo cunsuriyadda Cudurdaar, laakiinse ayan samaynin. Taasi adkaysasho oo isku mid ah iyo xoog ka Ilaaha Qaadirka ah halkaas diyaar u yahay wax kasta oo naga mid ah in ay ka jaftaa arrinta ma waxa wax na wajiga of.
Thanks for reading, iyo Ilaah ha idiin barakeeyo ..!!
alan_d • August 19, 2013 at 11:09 waxaan ahay • Reply
Trip, Waxaan mahad aqoon ah, dhexdhexaad, aragtida Christian of this post. Just in ay halkaas ka soo hesho, Waxaan ahay jir ardayga Goon cad 26yr ka AL nool OK. Si kastaba ha ahaatee, ka dib ka qalin Auburn 4 sano ka hor, Waxaan u tegey ku nool D.R ah. Congo, waayo, 2 sano. waxaan qirayaa, koritaanka, ka hor inta aan ahaa Christian ah, Waxaan ku ahaa sidii badan oo cunsuri ah sida 85% dhaqanka magaalada hareeraheeda ah igu wareegsan ahaa. Si kastaba ha ahaatee, the-qalbi cusub, Masiixu wuxuu i siiyey ayaa beddelay in.
Ujeedadu waxay tahay, halka ku nool Congo, macno ahaan qof kasta oo igu wareegsan waqti kasta siin jiray madow. Waan jeclaaday, dadkii baan ku wareegsan noolaa, shaqeeyay agagaarka, iyo qof kasta oo aan kula kulmay. Si kastaba ha ahaatee, dhaqanka in, weli waxaa jiray dad aan ka qortay. ragga dhallinyarada ah ee suuqa ku dul socda oo aan wax in la iibiyo, ama dan kasta oo wax, tusaale ahaan. meelo aan wax danbi ah laba jeer, In kastoo aan ahaa deg deg ah oo ku filan in ay la wareegaan guys iyo dib u helaan aan leben Nokia. Sidoo kale, booliska ayaa * guud * musuqmaasuq. Oo waxaan iyaga u qortay mar kasta oo waxaan arkay qof oo ku labisan dareeska. Waxaan la joojiyay, la xiray, ama lagu aflagaadeeyo jeer ka badan waan tirin karaa, by booliska / askartii, sida joogay kuwo badan oo ka mid ah dadka deegaanka oo aan ogaa. Ma in u sameeyo cunsurinimo ii muuqaal noocyada kuwa dadka sababta oo ah waxay u dhaceen inuu ahaado madow? In si la mid ah, sida waa cunsuri markii aan aniga iyo xaaskeyga dhaqaaqo dhanka kale oo jidhkayga marka socda ee la soo dhaafay nin cad in Waxaan qabaa muuqataa laga shakiyo? Its fikradda isla, oo waxaan soo gudbiyaan in aysan cunsuriyad. My dhibic waa in muuqaalka waa dareen dabiici ah aadanaha iyo * in la * kartaa cunsurinimo, laakiin ma aha in had iyo jeer.
Adolf • August 19, 2013 at 11:09 waxaan ahay • Reply
Haddii qof kasta oo uusan rabin inuu noqdo dembiyada a, laga yaabaa in aanay waxba ku xidhaan labis ah. Maanta, ku dhowaad 70 sano ka dib markii dagaalka adduunka 2. Maxaad u malayn lahayd qof dareeska a Nazi? Waxaa kaliya dharka saxda ah?
gdoggydog05 • August 19, 2013 at 11:10 waxaan ahay • Reply
sidoo kale. i dareento waa cunsuri. si abaalmarinta ama anshax ku salaysan jinsiyad. oo waa cunsuri in haddii wariye cad, aniga oo kale….waxaad eryi haddii aad wax qalad ah oo ku saabsan tartanka. laakiin haddii wariye madow baad u odhan kartaa in kids cad badan waa dhiman, si America si ay u fahmaan cunsuriyadda (link hoose). fiiri, kanna waa dhibic. anigu waxaan uun ahay u ekaa waxyaalahan ku saabsan, maxaa yeelay, waxaan rabaa kiristaan ​​si ay u fahmaan in ay jiraan had iyo jeer waxay noqon doontaa arrimaha tartanka labada dhinac. i Uma maleynayo inaannu tagno wadada la mid ah sida dunida iyo qabsado on iyaga. tusaale ahaan kasta oo midab ka dhanka ah kiiyoo, waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah ka gees ah jinsiyadaha kale. inkastoo i samayn fahmi addoonsiga in ay ahayd wax la kahdo iyo ancesters aan, dhab ah, mana garan doonaa cad walaalahay madow iyo gabdhoba awowayaashood ay aadeen through.we waa in aan qabto in tartanka kasta in ay isku dayaan in ay “simo” wax. caddayn in dhibic waa in Ilaah run ah mid aan marnaba taas samayn lahaa!!! Ma rabtaa gacantiisa soo Qaadirka deeq Ilaah ku salaysan jinsiyad??? MARNA MARNA MARNA. Waxaa laga yaabaa in ku saleysan dakhliga. Laakiin Ilaah marnaba muu ku tuso raalli ku salaysan jinsiyad. Israa'iil ayaa la doortay, ma sababta oo ah wax ku, laakiin ujeedo wanaagsan Ilaah oo keliya. My “saaxiibada jir” this Cadhoonaysaan, oo waxaa kaliya kordhisaa fikirradooda cunsuri. “Xaashiyaha” iyo “heerarka double” iyaga cadhaysiin. Oo wax xuja ah in sort-leeyahay “i kaliya iyocadhadii fahmi halganka” waa si qoto dheer u waxyeello badan ii. waxay inoo sheegaysaa inay i kaliya ilaa hadda tegi kartaa walaalahay madow… i marnaba run ahaantii noqon doonaa Walaalkood in kastoo, sababta ma fahmin waxa ay jecel yihiin in ay iyaga u noqon. Wuxu leeyahay in waayo aragnimada ninkii madow noo qaybin, in ka badan Masiix na mideeysa. Taasi waa waxa aan arki this article aan ula kac leh. Waxaan si dhab ah ha la ogaado waxa uu yahay sida in la ka qortay. kid ah waxaan ku jiray hal mar. Waxaan dhamaanteen maraan waqtiyo adag. Waxaa laga yaabaa in aadan ogayn waxa ay jecel yihiin in ay leeyihiin hooyo qaba kansarka, aniga oo kale. Ama ma laga yaabaa in aad ogtahay sida ay ahayd in loo soo diro guriga kids xun marka i ahayd 12 sano jir ah, dayacay by my cad, nicmeeyay, qoyska hareeraheeda ah oo ka tagay in la yaabanahay sababta ay u ma i jeceshahay. Aynu ma bilaabi hayo score halkan. Tani gebi ahaanba waa aragti qalloocan yahay munaasib ahayn in ay diiradda saaraan kuwa waayo-aragnimada gaarka ah. Ha na soo wada yimaadaan oo ay ku farxa in aannu la Siiyey oo Fadli ah marka aan u qalmay dhimashada.
Alex Ericsson • August 19, 2013 at 11:11 waxaan ahay • Reply
Waxaan Aad shaki Trip la doonaya inay takooraan walaalaha ku saleysan jinsiyad. Waxa uu nin madow ee kaniisadda badan cad taas oo uu inta badan oo aan hakin muujiyay gratefulness leeyahay. Laakiin waxaa jira xubno ka ah inay noqoto mid madow ee America in kuwo gaar ah oo si fiican incongruent la-aragnimada dhaqameed kale!
Sidaas FADLAN, Waxaan kaa baryayaa inaad dhammaan, fahmo farqiga u dhexeeya u damqasho dhab ah oo naxariis macno leh. Sida aan la walaalayaalow aan Masiixa ku socdaan, waxaan yeelan doonaa fursado yar oo ay talada ka damqasho meel ka dhasha waayo-aragnimo la wadaago laakiin waxaan inta badan doona waxaa loogu yeedhi bukaanka, shaqo jecel of naxariis macno leh. Taasi waa halka aan dhagaysan dhibaatada dadka soo maray, marna yareeyo ansaxnimada isaga ama iyada dhibaatada iyadoo la siinayo counter-tusaalooyin si buunka ay waayo-aragnimo, iyo inta badan loo maleeyo in talada, inkasta oo ay u adeegaan shakhsiga, ma noqon doonto talogelin deg deg ah si ay u qalbi qabowjin xanuunka, jahawareer, ama cadho.
Marka laga kasta oo dhinacyo cilladaysan kiiska ama tartanka this, aad u badan oo ka mid ah
na kiniisadda (gaar ahaan. via warbaahinta bulshada) hadalyaqaan ah wax ku saabsan waxyaalaha dunida, laakiin aakhirka
dhawaaqaysa dheeraad ah sida saaxiibo xasaas Ayuub. Hadda waa waqtiga marka qof ayaa ku wareersan oo aad u kacsan. Dadka reer ALL midabada waxaa ka xumaaday natiijada kiiska this. Inta badan oo iyaga ka mid u baahan dulqaadashada iyo gargaarka dhab ah. Ma aha muxaadaro ku saabsan nidaamka sharci ah ama “warbaahinta musuqmaasuq”, ma sed-iyo-biiray tusaalooyin, mana punditry siyaasadeed wayneeya. iyaga Tilmaan in Ciise aad sida la raxmadda.
Diinah Robinson • August 19, 2013 at 11:11 waxaan ahay • Reply
Markii aan ahaa gabar dhalinyaro ah, ku saabsan hoose da'da ah, Waxaan ahaa cunsurinimo ka qortay ee waxa ay ahayd ka dibna Eckerd Drug Store (hadda CVS). Anigu ma aan aqoonin da in waxa ka dhacaya ii, laakiin waan ogaa sida ilmo ma ahayn xaq u. Waxaan la hooyaday waxay ahayd oo aan kasbaday $20. Waxaan u maleeyay Taajir baan ahaa. Waxaan doonayay in ay soo iibsato qaar nacnac iyo waxyaabaha kale ee dukaanka. Laakiin mid ka mid ah karaaniyaal iibka i arkay socda gamcihiisa oo keliya oo iyana waxay u maleeyeen in aan u sii socotay inay xadaan ama samayn wax qalad ah waxaan u maleynayaa. Waxay igu dhan raaceen agagaarka dukaanka. Waxaa dareemay dhibsado in ay marwada this ha i soo raaco. Waxaan ugu danbeyn helay hooyaday on mid ka mid ah hayirin iyo iyada u sheegay anigu ma aan dareemayaa adeeganayay dambe. Waxaan iyada u sheegay markii aan ka tagay dukaanka waxa dhacay oo ay ku tidhi gabadhii ay u badan tahay u maleeyay in aan u sii socotay inay xadaan. Waxa iga dhigay murugo in ay u maleeyeen in yar oo gabar eegay sida tuug oo kale. Weeraryahanka Fast in ay noqoto naagta u korsan ah iyo wax la mid ah ka dhacaya igu sameeyo sidii qof qaan gaar ah oo dukaanka a nice. Waxaan ahaa arinku in aad ka fikirto nooca in wax waa in aan dhici maalmahan. laakiin nasiib daro, midab ma dhiman. Midkoodna waa dulqaad ah ee kala duwan dadka kale haddii dadka waa Americans ama waddanka u soo guurey, gay ama si toos ah, baruurta ama caato, aqoon ama hoos waxbarashada, hodan yihiin ama faqiir. Halkii dabaal kala duwan aynu kaliya waa “dulqaataa” kasta oo kale oo. walba waannu u dulqaadannaa nacaybka qaar ka mid ah oo shakhsi ahaan waxaan ogahay inaan u baahanahay in ay ka shaqeeyaan deriskayga jecel sida aniga qudhaydu waxaan jeclahay. laga yaabaa in aadan awoodin in ay bedesho qof ay
nacaybka, laakiin waxaad bedeli kartaa aragti ah oo ku saabsan sida aad ula macaamiloon kuwa kii
“pre-garsoore” aad iyo sida aad u jawaabaan in ay. Waxaan leeyahay wiil waa kuwa madow
iyo Dominican. Waxaan doonayaa in aan isaga si ay u koraan ilaa isagoo ixtiraamka dhaqamada oo dhan uu in
doorto in uu iska garto sida African American, ama Hispanic ama labadaba. Waxa uu la bari doono
in ay ku hadlaan Ingiriisi iyo Isbaanish. Waxa uu la bari doono taariikhda labada dhaqan.
Iyo ugu muhiimsan uu la bari doonaa in Ilaah jecel iyo dadka jecel. Waxaan rumeysanahay inay bilaabataa guriga iyo waxa aanu ku nool nahay waa waxa aan wax barto oo nasiib daro waxa ka muuqataa ka baxsan ee dunida.
Troy Frasier • August 19, 2013 at 11:12 waxaan ahay • Reply
waxaan leeyahay, Anigu waxaan ahay cad, oo waxaan ku soo maray wax la mid ah labada, sidii ilmo oo sidii qof weyn…. Anigu garan maayo in mararka kuwa ahaayeen tartanka la xiriira. Dhab ahaan, land, marar badan karaaniyaal i daba socday ku dhawaad ​​sida orgi kasta oo yar, wiil dhalinyaro ah, iwm. Hadda waxaan hubaa in kamaradaha ha i soo raaco marka anigu waxaan ku socon galay Wal-Mart, sida saaxiibkay oo ka shaqeeya LP ayaa sheegay in anigu waxaan ku socon sida tuug oo kale waxa ay u muuqataa…. Anyway, . Waxaa dhacaya! :)
Nathanial Poling • August 19, 2013 at 11:12 waxaan ahay • Reply
Waxaan dhinac la Charles Barkley iyo Bill Cosby on this mid ka mid ah… warbaahinta afuufeen sheeko murugo galay daadsanaanta rabshado qaranka. Waxaan rajeynayaa in Zimmerman hore ugu sii socoto oo la dacwadaha xanta on NBC iyo ABC ee.
Antoine Mason • August 19, 2013 at 11:12 waxaan ahay • Reply
Aadan ay ogaadaan in Charles Barkley iyo Bill Cosby aadan oggolayn arrimaha ku xeeran xaq kiiska?
ekaa fikrado aad u la mid ah, in xukunka uu ahaa mid sax ah
George Lewis • August 19, 2013 at 11:14 waxaan ahay • Reply
in dhammaan dooda waxaan u baahan nahay in ay leeyihiin sharciga laftiisa buriyay. Fadlan taageero dadaal @ moveon.org . petition A waxaa halkaas laga heli karaa Xilka Trayvon The. WAXAAN U BAAHANAHAY IYO WEYDII TAHAY TAAGEERADA Fadlan saxiix , diri wareejin , Document-iyo weydiiso dhammaan saaxiibadaa , qoyska iyo xiriir si la mid ah sameeyo. Haddii aan isbeddel ku sharcigan xun xaaladda this mar kale ku dhici kartaa.
Nathanial Poling • August 19, 2013 at 11:14 waxaan ahay • Reply
is difaaca? Taagan dhulka la xitaa ma isticmaali difaaca
Tia • August 19, 2013 at 11:15 waxaan ahay • Reply
“noocaas ah fikrado waa karaahiyo iyo been. Ilaah wuxuu sameeyey aadanaha oo dhan in uu image leh qiimaha iyo qaayaha. Weli oo dhan oo naga mid ah waa Dambi badan oo ay ku guuldareysato inay soo bandhigaan image Ilaah sida inaannu. Mid kasta oo inaga mid ah hal dembiyadeenna u noqon karaan, trust Masiix, iyo in la sameeyo xaq by our abuuraha. Laakiin Siiyay Goolhaye cunsuriyadda iyo doorto oo dadka runta waa in lagu dabaqo. Midab sheegay, "Waxaan ahay qiimo leh oo wanaagsan, oo dadkan oo dhammuna waa kuwa sharka leh.” – Word Up Brother Lee!
Marka boqortooyada qaadataa blinders ah off in doorka dulmi systemic ee American Masiixiyada, gaar ahaan qaab White SARRAYNTA, shuuciyad iyo patriarchy, waxaan ka silsilado addoonsiga jebin doonaa. Kuwanu waa kuwa madaxda ah iyo ruuxyada sharka ah meelaha sarsare Word uu ka hadlaayo.
Mudane. 116 • August 19, 2013 at 11:15 waxaan ahay • Reply
Qof dumar ah oo madow toogtay darbo Florida digay, maxaa yeelay, iyada waxaa cabsi ninkeeda xadgudub in weerari lahaa. Waad og tahay wixii ku dhacay, iyada ayaa lagu xukumay xabsi ah 20 sano.
George Zimmerman laayey kid yar oo madow ee Florida, oo waxaa laga helay oo aan waxba galabsan?!? Really?? cunsuriyadda, ugu xaqiiqo ah, waxay ahayd arrin ay dhacdo in this. Ka fikir waxa ku saabsan.
Nathanial Poling • August 19, 2013 at 11:16 waxaan ahay • Reply
sidoo kale wuxuu ahaa cunsuriyada halkan qodob?
lewrites • August 19, 2013 at 11:16 waxaan ahay • Reply
Anigu waxaan ahay caddaan / hooyo American, oo in kastoo hooyo aniga igu jiro waa boqolkiiba aad u yar, midab maqaarka waa gudcur weyn oo aan eegto oo aad u badan sida hooyo ah. Waxaan la takooray by caddaanka, by kiiyoo, iyo kaliya oo ku saabsan tartanka kasta oo aad ka xusuusan karto.
song DC hadal ee midabka leh Dadka soo koobaysaa fikirradayda arrin xunna:
Waxaan nahay dadka midabka leh iyo aan ku nool meel lagu xakameeyo
Waxaan nahay dad midab oo waxay na soo wac tartanka aadanaha
Waxaan heysanaa taariikh si ka buuxa qaladaad
Oo innaguna waxaynu nahay dadkii midab kuwaas oo ku xiran tahay nimco a Quduuska ah.
Warbaahinta waa mid aad u badan eeda. Laakiin predispositions noo gaar ah, tallaabooyinka noo gaar ah sii hurin waxa warbaahinta cunaa noo. Haddii aan eegno lahaa midabka ee la soo dhaafay, haddii aynu nafteena ku arki lahaa xukummada aan gudbin dadka kale ee ku salaysan looks ama ficillada, Goortii makhribkii garanayaa iyaga ma aynaan…waxaa laga yaabaa in aan shaqayn karaan si ay u dumin caqabadahaas oo aan siin warbaahinta mar dambe calafka.
Joanette D. Clemons • August 19, 2013 at 11:17 waxaan ahay • Reply
Xaaladdan oo kale ma aha oo kaliya ku saabsan sharciga SYG waxaa sidoo kale wuxuu ku saabsan yahay dood is-difaacid ah. Wiilkii ayaa in nuxurka helay danbi. Xaaladdan oo kale oo ku saabsan sida sharciga u arka masuuliyada qofka, GZ, kuwaas oo isku soo hab waxyeellooyinka. Halkee ma masuuliyadda shakhsi ahaaneed, dareen caadi ah oo ay gacanta is qayb ka ciyaaraan ka xaaladda this? Raaxeelna markay Jenteal (ma hubo ee higaadda) waxaa la waraystay, ayay tidhi “Waalidkaa idin barayaa in marka qof laga shakiyo, waxaa idiin soo socda, waa in aad. waalidka No barayaa in ilmahoodu u taagan ay. Haddii ay yeeleen, waxay leeyihiin lahaa ilmo ma dhalin.” TM ilmo yar ahaan jiray. Waxa uu tilmaamay in booliska ay GZ sida qofka in dhalinyarada ay soo daahay. Tani ma aha waxaan Malo ahayn, tani waa xaqiiqada. Trayvon waxaa sii kordhaya ilmaha illaa qaangaarnimada. Marka GZ yeedhay bilayska, isna wuxuu sameeyey wax sax ah, markii uu go'aansaday inuu soo horjeeda doonista xujo, ayuu lumisay gacan ku haynta iyo xaaladda soo baxay qaldan oo dhan. ex Ruuxaani.: Imisa jeer waxaan ku tukaday oo Ilaah ka codsaday in ay naga caawiyaan ka qabato xaaladda, waxaana ku tiirsan si fahankeenna u gaar ah halkii ay ka dhagaysto codka dhabta ah ee awoodda u leh inay noo arkaan iyada oo. Trayvon halkan ma joogo b / c GZ tiirsanaa ku garashadiisii ​​u gaar ah. Markaasuu wuxuu soo kaxaystay arimaha gacmihiisa galay ka dib markii la siiyey tilmaamaha cad oo qeexan oo ku saabsan waxa MA inay sameeyaan. Anigoo doonaya inaan ogaado waxa door GZ ee sida sarkaalka ilaalada xaafadaha iskaa wax u qabso ah oo ka koobnaa. Oo waxaan helay buuggii this at http://www.usaonwatch.org/assets/publications/0_NW_Manual_1210.pdf Fadlan akhri bogga 27 ee Cutubka 6. Ninkan soohdin xadkiisa oo ku soo orday KA xaq OF masuuliyadda shakhsi ahaaneed dhibaato. Wuxuu caasiyeen tilmaamaha si toos ah iyo hor ilmo cabsi, kuwaas oo ahaa nin dhallinyaro ah oo ciyaaryahan ah. Waxa uu ka qaniintay in ka badan uu calaliyo laga yaabaa markii uu degay meel ka baxsan doonista iyo tilmaamaha of amar. Ka soo qaad TM ayaa dilaaga khibrad leh kuwaas oo qaatay qoriga GZ iyo isaga u dilay? Dhacdadan naxdinta leh albaabka u tiro ka mid ah mawduucyo furay in laga doodo. ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, muuqaalka, xilkasnimada shaqsiyeed, The istaag Law Ground Your, waa maxay qeexidda dhabta ah ee is-difaacid, iyo in ka badan dib-u-qiimaynta oo dhan sida tartanka waa in loo arki maskaxda qof kasta. Wax kasta oo arkay gudcurka ah quluubta iyo maskaxda gaar ah our ugu danbeyn ku soo noqon doonaa iftiinka. Silsiladda naxdin iyo qosol qaladaad waxaa loogu tala galay inuu keeno ku saabsan heerka weyn oo waxgarasho, hadalka iyo iska warqab. Xaaladdan oo kale u soo diray hirarka lama filaan ah dunida oo dhan. Ma aha an sheekada taariikhda Maraykanka, ma aha sheeko taariikhda Black, waa sheeko aadanaha iyo xuquuqda madaniga ah. Qofna ma u qalmo inuu ku dhintay ku salaysan fikradaha qaladka ah iyo maqnaanshaha gacan is.
BQPhotography • August 19, 2013 at 11:18 waxaan ahay • Reply
DUDE!! Waad ku mahadsan tahay wax badan for this dhajinta!! Waxaan posted wax la mid ah aan derbiga facebook on. Waxaan dareemayaa inaan dhaqaajin karin on ka midab laakiin weli weli aan ka hadli karaa waxay si uu u xaliyo dhibaatada!! Doodin iyo sii wadaan in ay muuqaal jinsi kasta oo. Waxaan ahay qof aaminsan adag in Ilaah iyo dalka waa in ay dib ugu Ilaah u soo noqdaan. (2 Chronicles 7:14) Waxaan u baahanahay dad badan oo madow adiga iyo waxaan u eg, kuwaas oo aan xoojinno karo iyo hadli cunsuriyada iyo mid kale oo loo baro. Waa in aan ka dhanka ah dadka kicin cunsuriyadda taagan!! Thanks mar kale. Waxaan aad u macaamilooteen comments jinsiyadeed iyo falalka dadka kale, laakiinse anigu uma aan ha ha oo dhan waxaa ka mid ah ka heli ii sababtoo ah waan ogahay qofka aan ahay in Masiix!! Thanks!!
Mark • August 19, 2013 at 11:18 waxaan ahay • Reply
Haddii aan su'aasha, waxaa jira kuwa la 'isirka’ arinka kalifay kasbadaan ee ay sameeyaan – togan ama taban. Qaar ka mid ah u qaadan ugu xumaa oo kaliya sababtoo ah heerka melanin. Laakiin waxaan la yaabanahay haddii ay jiraan wax kale socday in xaaladaha sidan oo kale in uu muujinayaa more of farqiga dhaqan ka badan hal cunsurinimada ah. Tusaale ahaan, haddii aan arko qof dumar ah oo jidka soo socda ee gaab aad u gaaban, cut hooseeyo taangiga-sare leh naasaha soo laallaada, badan oo suurto-gal, Cidhibtiina sare (Uma Fiicna socda), iwm, Waxaan u qaadan doonaa oo waxaa jirtay naag yahay kan – in ay isticmaalaan erayga ah biyoodka – dabacsan. Tani eber xaq u leeyahay inuu jidh ahaan ama af ahaan weerar iyada i siiya, si ay u sameeyaan aflagaada muujinaya, iwm. Iska in lebbisan naag kale – suubban, laakiin surwaal soo jiidasho leh, darafkii, dharka, iwm. – xaq u baxay Dhulalka ka’ End (ama soo qaado aad style) saarney. Waxay noqon kartaa sidii dabacsan sida naag #1, laakiin waxaan u maleynayaa in lagama yaabo.
Sidoo kale, hadii aan arko nin dhallinyaro ah oo madow ii qabateen socda uu gashan jirin sida a 'gangbanger’ – Waxaan gees u guurto iyo aad u hesho habdhiska. Waxaa suurtagal ah inuu wadaad maxaliga ah dhalinyarada iyo Injiil ila wadaagi lahaa si degdeg ah ka badan waxaad tidhaahdaan erayadan oo ah waxyeello badan. Laakiin waxa la 'labbiska duq? taa waxaa ka duwan, nin madow ku socotid waddo in 1) Dalalkan oo ay xidhato End 2) Ugaadshiga dhaqanka Afrika 3) jiinis shaqada / kabaha la caddaan t-shirt… Waxaan si lama filaan ah ay leeyihiin oo dhan ee ka cabsaday oo aan yarayn.
My dhibic waa in ay xidhato waa nooc ka mid ah hadal dhaqanka. Iyo dhaqamada oo dhan ma siman yihiin. Haddii waxa “white” (ama bunni, cas, jaalaha ah) America arkaa in videos music, news fiidkii, newsweeklies, iwm. ninkii dhallinyarada ahaa madow ee dhibaato waa wixii ay ragga dhallinyarada ahu madow oo xubno upstanding of Duugga bulshada… in xiriiri doonaa fariin khilaafsan.
Bal qiyaas igu xiran a t-shirt calanka a xidhiidh ku dul iyo filaya kiiyoo kaliya fahansanahay in aan ahay cunsuri. Kaliya waxaan jeclahay South colkii ah.
Sidoo kale, labistaan ​​sida nin Burcad ah, ha la yaabin marka aad wareersan tahay la mid.
Xirashada ah 'hoodie’ keligay ma / waa in aan samayn dabcan. Laakiin dadka waawayn kuwaas oo ay u malaynayaan tahay dhar / labbiska ma isgaadhsiin ama (ka xun) galin sameeyaa, laakiin meelaha culayska saaran observer in ay hilib khilaafaadka soo baxay waa nacas.
Runta • August 19, 2013 at 11:18 waxaan ahay • Reply
James Lee • August 19, 2013 at 11:19 waxaan ahay • Reply
Xaaladaha profile High sida sensationalize iyo dhibaato dahsoon u dhexeeya waxa faultfully aynu u qayshanno “jinsiyadaha.”
Oo intii yarkii cad ka agagaarkeedii ee Detroit, u badan tahay si la mid ah ayaan uga jawaabi doonto Zimmerman i soo socda, iyadoo aan loo eegin hawlaha aan kor u ahayd.
Zimmermans saamaynta gobolka ruuxi ah uu view of Eebayaal ku amray in …”Ha hor istaagina Ninkii shar ah.” Badinayo, Trayvon Martin ayaa u hogaansanaanta amarka this ka dhinnaa sidoo. Sida xertii Masiixa, waa in waxaannu xusuusan nahay in la yaabin marka dunida u dhaqmo sida “aduunka.”
Our hubka ugu wanaagsan ee ka dhanka ah cadaalad iyo kala midab waa in ay u hoggaansamaan amarrada Masiix.
Thabiti Anyabwile siiyey fariin waqtigeeda ku habboon ee 2008 ku saabsan “Sita Image ah”. Waxaa xusid mudan a maqli – http://t4g.org/media/2010/04/bearing-the-image-identity-the-work-of-christ-and-the-church-session-ii/
Inta badan dadka ay qabaan aqoonsiyo iyo naftooda in la ku salaysan malo ku saabsan fikradda ah "tartanka." Waxaan u baahanahay in la beddelo xagga fiqiga badan oo kitaabiga ah ee qowmiyadda. First of dhan, waxaa muhiim ah in la qeexo shuruudaha iyo iyaga isticmaalno si sax ah, gaar ahaan "jinsiyad" oo ay kasoo horjeeddo "qowmiyadda." Christian wuxuu u baahan yahay in la fahmo nin ee midnimada ee Adam, ururka la Masiixa iyo midnimada ee kaniisadda.
Rusty • August 19, 2013 at 11:19 waxaan ahay • Reply
Waxaan ALL ahayd on dhamaadka helo cunsuriyad, malaha. Haddii aadan, waxaan doono. Qof ka mid ah tartanka kale waxaa laga sugayaa inay go'aan ka nagu saabsan, oo ku salaysan sida aan u eegto ama codka.
Waxaan oo dhan dembi u galeen, aad, in qaar ka mid ah degree yar. wakhti kasta oo aad aragto qof oo ka dhigi xukun–xataa haddii waxa uu xajin gudaha–oo ku salaysan sida qof u eg ama dhawaaqyada… taasi nacayb.
Antha REdNOTE • August 19, 2013 at 11:19 waxaan ahay • Reply
The 911 operator yiri “Waxaan uma baahnid inaad u baahan tahay inuu raaco” Taasi waa ku filan ii. Maxkamad aan weligaa lagu baahanyahay iyo Trayvon lahaa laga yaabaa in helitaanka dhunkashooyinkiisu dheeraad ah ka Aabaha (sida aan ka arki sawirada) haddii Zimmerman joogay uu “baadkiisa” gaariga IYO telefoonka til’ gaysteen u yimid!!!
Louie • August 19, 2013 at 11:20 waxaan ahay • Reply
saraaxad, Waan ka xishoonayaa in qaar ka mid ah faallo kuwaas oo isugu yeedhaan Christian, Waxaan ku dhow rajaynayaa in qaar ka mid ah ma aha kuwo. Waad ku mahadsan tahay Trip wax badan u qalbigaaga gelinaya on blog this, marka laga reebo naftaada iyo waayo-aragnimada aad nolosha ka mid ah in aanan ka ogaato ama laga yaabaa in aanay fahmin. Anigu waxaan ahay White a, lab iyo 24 sano jirka ah oo aan saaxiibo badan oo madow, aad uula mid tahay safarka, kuwaas oo la si khalad ah ka qortay waanan wada joogaan oo ka mid ah weerarada ka dhanka ah saaxiibaday, in si lama filaan ah, ciirsi dareen. Waxaan qabaa in qaar ka mid ah faallo waxaa dhibay u tarjuntaa erayada Trip ama iyaga oo isticmaalaya sida guddiga dhawaaqaysa for ajendayaasha iyo siyaasadda gaarka ah. Safarka ayaa wax ku saabsan Zimmerman isagoo cunsuri ma. Zimmerman ka dhigay xukun qaldan in kharash nin dhallinyaro ah oo naftiisa, xaqiiqo ah in uu is beddelay hal qoys weligiis, ugu yaraan Zimmerman oo nool oo neefsada. Oo dhacdadan ayaa kiciyay buuq ah in qof kasta ciidamada in la baaro eexasho iyo in ay eegaan sharciyada in ay noo dhan dhaawicid. Waxay i jiran in dadka aan si fudud u arki kartaa in sharciyada abuuray si ay u ilaaliyaan qaar ka mid ah aniga oo kale (iyadoo mudnaanta la kasban) ma khuseeyaan kuwa loo arko sida “kale”. Qaar ka mid ah ayaa ku xusan sharciga oo waxaad ku tidhaahdaa Zimmerman ahaa cudur daar in ay raacaan Trayvon laakiin waxaa uu xaq indhaha Ilaah ee ku jirta in la raaco qof maxaa yeelay, wuxuu eegay laga shakiyo. In dhamaadka waan ku baryayaaye Zimmerman yimaado in la ogaado Masiix sida uu badbaadiye shakhsi oo u soo jeesan uu doorashada u xun wax wanaagsan in Ilaah u isticmaali kartaa in ay keenaan bogsiinta dheeraad ah. Wax walba waa suurtogal, isagoo Ilaah la.
Nathanial Poling • August 19, 2013 at 11:20 waxaan ahay • Reply
Sidee ayaad ku ogaan Zimmerman aan ahaa Christian a horay? Ma daawan maxkamadda ama dhagaysan Oraahyadii ah. Waxaan u maleynayaa in aad u badan oo comments xukun ka dhigi in this post oo ku saabsan dadka kiristaanka. Waan ogahay dhalinyarada yar yar oo cad oo lagu qortay sidoo waayo, waxay lahaayeen tattoos. Jooji fikrado in ay taasi dhacdo tartan ahaa iyo fikrado ku saabsan Quluubta kuwa kale. Zimmerman lahaa niyad xun, laakiin aysan waxba ka jirin keentay in maxkamadda marka ay dadku u helay in ay maqasho telefoon buuxa, ma kuwa spliced ​​in warbaahinta ciyaaray inay durbaan ilaa arrin jinsiyadeed. Zimmerman wajahay xeerbeegtida oo lagu waayay hoos is-difaaca. Waxaa laga yaabaa in dadka qaar ka mid ah waa in ay bilaabaan in ay wax warsataan music ah in Americans Afrika dhagaysan kor u rabshad badan nabadda. Martin ayaa laga yaabaa inuu dib ugu baxay gurigii, halkii uu u doortay in ay isku dayaan in ay ku garaacday ilaa Zimmerman.
naxeen • August 19, 2013 at 11:21 waxaan ahay • Reply
hello oo dhan. First iyo farmost waxaan ahay Christian ah. Marka labaad, waxaan ahay naag afirican-Maraykan. Waxaan akhriyey comments halkan oo ay hana i yaabin. Waxaan ahay yaabi by rabshadaha dalka this (madow on madow, garsoorka dhinaca kiiyoo,element dembiyada ee dhallinyarada laga tirada badan yahay ee ku wajahan dadweynaha guud, dadweynaha guud ee dhinaca dhallinyarada minoriity). Si aad runta aan idiin sheego waxaan ahay cabsi,iyo tani waa sababta……….marka aan sida gloss bulsho ka badan cunsuriyadda Wasaqda bulshada ayaa sababay waxaa khatar inoo ah qabriga ee dib u soo laabtay bulshadeena in taas oo ay ahayd in 50 ee. Intaas waxaa sii dheer, marka aynu u malayno labaad ah in America ayaa gaaray gobolka qaar ka mid ah waxbaa la free tartan Haddaba waxaa khatar inoo qabriga ee soo noqnoqda, isla Xumaanta in belaayo ku quruunta 50 sano ka hor. Waxaan qabaa in ay dadka jecelyihiin inay u gloss ka badan sababtoo ah waa badan ka sahlan u jeeda oo u waajahayo. Oo sidaas waa inaad waayo, ma laga yaabaa in wax tartan, maxaa yeelay, aad marna yeelan doonaan in ay maqlaan odayaasha hadlaan sida faahfaahinta xasuusinayaa maalmihii ay dhalinyarada,kulma waxyaabaha aad iyo i marnaba ku riyoon kari
.Waayo, waxaad u ma laga yaabaa in wax tartanka sababtoo ah marna ma dhali doontaa in aad jidhkaaga gudaha ilmo madow lab iyo yaab wuu noolaan doonaa si aad u aragto 21. Waayo, waxaad u ma laga yaabaa in wax tartanka sababtoo ah fiiriyaan Diintooda idinka mid ah oo aan marnaba la arki doonaa sida ay khatar ku. Haddii i lahaa fursadahaas ma uusan noqon laheyn wax tartanka i waayo,. Qalbigaygu soo baxa oo dhan kuwii dhibanayaasha dembiga ay sabab u tahay rabshadaha. Weligay doono oo marnaba aqbali rabshadaha. Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale marna aamusan doonaa nidaam u dhimin toogtay qof ku salaysan u saftay,ama sababo ay suuragal tahay sababta ay u maqan yihiin habeenkii,. Waxaan marnaba ka aamusan yihiin doonaan nidaamka ah in aan lacag qaadan doonaa aqbalo,laakiin aniga ama wiilkayga ma aha. Waxaan marnaba ka aamusan yihiin doono gobolka wax maadaama ay yihiin. America waa waxbaa la lahayn. Waxaan dareemayaa saamaynta isagoo laga tirada badan yahay ee America maalmeedka,iyo xataa in kaniisadda.
bergyman • August 19, 2013 at 11:22 waxaan ahay • Reply
Waxaan sidoo kale ahay Christian ah. Waxaan oggolahay in cunsuriyad ay weli taagan. Runta waxa ay tahay, waxaa had iyo jeer jira doonaa. Oo cadowgii wuxuu hubin in ka dhigi doonaa. laakiin tani waxay “marna ma fahmi doonaa kooxda” marin aanay ku caawin. Waxaan leenahay doqomo cad in sii hurin cunsuriyadda. Iyo in uu yahay waxa ay yihiin: cunsuriyiin doqon. Markaas waxaa jira doqomo madow in hurin lagu hafray in kor u muuqaalka ah. Ahmiyada waa in ay ahaataa oo dhan inta kale ee noo soo baxna kor doqomo kuwaas oo wada socda iyo dayactiro kala. Beddel sheeko ah. Sida ragga madow dhallinyarada… wow. Waxaan wax fikrad ah sida bulshada ka hadlaya in, laakiin waxaan ognahay inay jiraan jawaabo halkaas. Waan ogahay, Ilaah wuxuu leeyahay qorshe iyo xal… oo aan la kala qeybinta ku salaysan sida qof u muuqdo. Uu xal ku saabsan yahay MIDNIMO, jacaylka iyo dib u soo celinta.
naxeen • August 19, 2013 at 11:22 waxaan ahay • Reply
hi bergyman. Waxaan ixtiraamaan iyo raacsan, ra'yigaaga. Mid ka mid ah note in kastoo- Aniga aragtidayda ma aha “marna ma fahmi doonaa kooxda” halkii ay Daadinta a iftiinka ku saabsan sababta ay tani ma aha oo ku saabsan “dhinacayga” ama dhinacaaga. Waxa uu ka hadlayaa in-uun nidaamyada dalka this ayaan weli u rectify.This waa saamigii in America siiyey beelaha laga tirada badan. odayaasha qarribma, waayo-aragnimada naxdinta leh diiqu Jim. Carruurta ka cabsan waxay la bartilmaameedsan doono qaar ka mid ah foomka qalloocan nidaamka garsoorka. xubnaha qoyska Lab handado for DWB '(wadidda halka madow) Waxaan ka daalin soo shaqeeyay sanado badan midayntii waawayn oo keeno wacyi jinsiyadda kiniisadda iyo un-churched si isku mid ah. Ma dhahayo fahmaan kooxda aan .I'm leh u ixtiraamaan. Waxaan sii wadi doonaa shaqada oo ay iftiinka ugu daadiyeen saabsan mowduuca,maxaa yeelay taasi waxa weeye waxa ahu igu loogu tala galay in la sameeyo iyo kaniisadda waxa loo baahan yahay. Iyada oo yidhi- jeestay indhaha ka ah wuu asturi, Dulmi ha ahaato jinsiyadda,bulshada dhaqaale,ku saabsan ilmo iska soo ridid ​​ama trafficing galmada,sidoo kale waa mid aad u qaldan. Waxa kale oo ay wax ma samayn karo. On note ifaya baan u arkay, ,qirashada, iyo dambi dhaaf u dhexeeya jinsiyadaha on baaxadda weyn dhacdooyinka salaadda Masiixiyiinta oo ay ahayd waqti qurux badan ixtiraam, qirashada,dhaaf (labada dhinac) OHHH ahayd in ay wax u eega sida ay ahayd pslms 133:1-3 waqtiga dhabta ah. Cagaha maydhay,ilmada ayaa ku daatay, iyo dhammaan dhinacyada(madow,white,Latino,iyo Asia) qoomamooday ahu hor waajib kale. Aan u xiisoodo maalintii “walaalkiis jacayl u xidhi doonaan ninka aadmiga” sida ku xusan ODE ku gabyeen weyn u farxad. Anigu waan shaqayn oo Ilaah u barya in ay dhammaad ma leh in la arko waa ay dhici.
bergyman • August 19, 2013 at 11:23 waxaan ahay • Reply
Waad ku mahadsan tahay reply. Anigu ma aan ka dhigan tahay in ay tusinayaan aad qabanayaan “aadan fahmin…” wax, Waxaan kaliya loogu tala galay ma doonayo inaan wax ka qabashada in jawaabta. Waxaan maqlay wax weyn markii aan isku dayay in uu ku biiro in wadahadalka ku saabsan qaar ka mid ah dhibaatooyinkan iyo sida aan sida bulsho wuu ka adkaan karaa. Waxaan qabaa in la fahamka iyo xal iyo isbedelka labada dhinac. waan kuugu raacsanahay. Waxaa dhacaya. kaliya aan necbahay inta uu qaato iyo waxyeello dhan / dhinteen oo laga badiyay iman kara … oo waan nebcahay horyaalka. Waad ku mahadsan tahay la dagaalanka Dagaalkii wanaagsanaa. Waxaan rajaynayaa in aad ogtahay in aanan iska ah in la fahmo dareenka, Anigu waxaan uun raadinaya inay tallaabooyinka xiga ee helitaanka siyaabo… kabashada, bogsiinta, midnimada.
naxeen • August 19, 2013 at 11:23 waxaan ahay • Reply
haa. i fahmo oo aan aad u baahan tahay la dagaalanka . Waan ka xumahay in qaar ka mid ah mid qiimo tirtay aad ku dartey in ay wada hadalka iyo / ama xal in dhibaatooyinkan. oo aan raali ay behalf.Would idiin dambi dhaafo oo dhan oo naga mid ah, kuwaas oo loola dhaqmo kuwa doonaya in ay caawiyaan helaan hab ka wanaagsan sida haddii aanay macno ah in doodan oo kaliya sababtoo ah isaga ama iyada maqaarka ma ahaa madow. Waxaan aaminsanahay inaan kasta waxay leeyihiin wax ay ku biiriyaan qofka kale ,waayo-aragnimada in la helay,Jecel in lagu wadaago,dhiirigelin iyo is weheshi in la lahaa (madow,white,jaalaha ah,bunni,iwm buluug). i si adag u aaminsan yihiin in. Ilaahay ha barakeeyo aad bergyman…..mid pslms maalin 133:1-3 noqon doonaa mid dhab ah halkan haddii aan dhulka ,hubaal in mid ka mid ah in ay yimaadaan.
Aamiin, Aamiin. Waad ku mahadsan tahay erayada nooc aad. Sayidow, sii bogsiinta taasina maalin maalmaha amri doonaa inay barakadu ah.
Troy Frasier • August 19, 2013 at 11:25 waxaan ahay • Reply
Hey Trip, ya jecel oo dhan, laakiin si daacad ah… waxay u muuqataa sidii arrinta jinsiyadda, aad leedahay qadhaadh qaar ka mid ah. Waan ka xumahay midabka maqaarka uu takoor qaar ka mid ah dhamaadka aqbaliddoodii kaa dhigay. midabka maqaarka iigu irdo on dhamaadka qaata oo takoor ah qaar ka mid ah ka soo jeeda bulshada madow, (inkastoo aan marnaba la tagged by booliska). Its qayb ka mid ah nolosha, nin. Kaliya waxaan jeclaan lahaa ayaa I takoori iskutallaabta, ma for midabka ah ee aan maqaarka mararka kuwa. Waxaa dhacaya, ma ahan qurux badan, laakiin waxaan leenahay u dhaafa kuwaan ka samayn iyo Ilaah ku ammaanaan aabbihiis, waayo, jacaylkiisa iyo kala duwanaanta. Oo ma noqon qadhaadh, nin. Daa kuwa dhacdooyin la soo dhaafay. Sida waa in aadan daweeyo dadka kale si khalad ah, waa in aad dambi dhaaf iyo naftaada oo lacag la'aan ah ka jirrabaadda ee lagu waxyeelleeyo aad markii lagu xukumo. Qof kasta oo la xukumo. Haddii aadan by midabka maqaarka, by qaabka jirka, goobta, da'da, iwm. Waxaan la times-dhaaf ah isagoo ka Florida ee Galbeedka ku xukumay. Oo isagoo da 'yar. iwm. Waxaan doonaa in mar walba la xukumay, ya og? Waa in aan ku cafiyo iyo jacaylka ay u muujiyaan in kuwa jaahil. :) Ilaah ha ku barakeeyo ya, Trip!
Nicole • August 19, 2013 at 11:26 waxaan ahay • Reply
By farta ku fiiqaya in cunsuriyada ka jirta dhanka ah dadka madow ma burin in dadka madow aad takoori karo. Waxaan ku noolnahay adduun dhacay iyo tallaabooyinka oo dhan waa khalad. Ka shaqeynta in la furo wada hadal macnaheedu ma aha unforgiveness jirta. (Hello, Trip Lee naagtiis ma aha madow lol) Si kastaba ha ahaatee, kitaabku, nabad ma dadban oo aan loo siman yahay. Waxaa jira baaqyo fara badan oo ku erayga Ilaah in ay si firfircoon ku saabsan cadaalad darida iyo dulmiga in nooc kasta. Waa in aan si firfircoon ka dhanka ah caddaaladda bulshada, ALL FOOMAMKA gool kama dambaysta ah ee muujinaya farqiga u qurux badan oo ah Ciise Masiix dunida this dhacay.
gdoggydog05 • August 19, 2013 at 11:26 waxaan ahay • Reply
wow. xigmad. i xukumay, aad.
bergyman • August 19, 2013 at 11:27 waxaan ahay • Reply
Waxaan waydiinaya dadka in ay sarreeyaan. Waxaan dhamaanteen isticmaalaan macluumaadka (qaar ka mid ah oo ku salaysan xaalado noo gaar ah, qaar ka mid ah dhinac sadexaad oo lagu kalsoonaan karo, iyo xisbiga saddexaad qaar aan lagu kalsoonaan karin) inaad noo sheegto wixii aad samayn in qeybo ka mid ah magaalada, iyo hareeraha dadka ka fiiriyaana ay si gaar ah. Waxaan profile oo dhan. Gabadha timo cad Lizzi dadka hoos ku qoran ayaa laga yaabaa in iyada u aragto sida doqon ama fudud ku saleysan sida ay u egtahay. Fair? malaha ma. Waxay leedahay doorasho, ayay labada isku dayi kartaa in uu ka dhaadhiciyo oo dhan blondes kale jiraan in ay u dhaqmaan smart, noqon smart in aan sii hurin lagu hafray ku AMA iyadu uun isku dayi kartaa oo aad samaysid iyada ugu wanaagsan ee aan lala soo “nooca”. Malahayga (oo anna waxaan noqon kartaa hab ka baxsan) waa in milkiilaha dukaanka caadi ahaa shoplifted by dadka in eegay / dhaqmeen sida Diinah Robinson … cadaalad? Ma aha at dhan. Laakiin waa milkiilaha dukaanka kuwaas oo irresponsibly waxaa ku simaha ah? Ha i odhan sidan… haddii qofka #1 looks / labiska / falalka sida dadka galeen dambiyo ay dukaanka ama in ay xaafadda. (Waxaan kor u samaynta hypotheticals halkan) The statistics Ujeedada odhan: 7 ka mid ah 10 jeer marka ay taasi dhacdo, dembi waxaa ka go'an. Waxaad ku odhan kara, ay weli waa in aan muuqaal. laakiin waxa dhibic in tirooyinkaa ma waxaad leedahay, Waxaan weli doonayo inuu u malaynayaa in sida ugu fiican ee qofka this. 9 ka mid ah 10? sida ku saabsan 99/100? Sidee ku saabsan 999/1000? Maxaa dhacaya haddii aad leedahay qoys ah Arab ee xaafadda aad iyo aad arki doonaa isaga dajinta daraasiin jawaan oo bacrimin uu garaashka? Waxaa laga yaabaa in uu kaliya jecel yahay inuu cawska in ay si dhab ah oo cagaar ah. Ma aannu u malaynay in ay had iyo jeer u qaadan ugu fiican ee dadka?
My view on this waa in aan dal cunsurinimo kala qaybsan iyo siyaasad ahaanba u qaybsan iyo dhaqaale kala qaybsan. Waxaan run ahaantii ma badan oo ku saabsan dhaqaalaha samayn karaa… taariikhda had iyo jeer inoo sheegayaa in aan Taajirka iyo miskiinku leeyihiin. Laakiin siyaasad iyo hadalo cunsurinimo ah waxaan dhihi karaa “No”. Wax dhib ah kuma leh isagoo meelo ka mid ah dadka Hormo-wada ee America, maxaa yeelay danaha ama sababta oo ah waxay dalka isku yimaadaan oo ay wadaagaan caadooyinka dalka in. Laakiin waxaan qabaa in tani ay tahay waxa dhacaya marka aynu ka leeyihiin farabadan oo dad ah kuwaas oo nidar wada galeen (u badan tahay sababta oo ah dibadda iyo arrimaha gudaha) sababta oo ah sida ay u eeg on baxsan, Waxaan qabaa inaan sii wadi doontaa in ay dhib ilaa “dadka madow” ka jira dhamaan qaybaha magaalada a, codeeyo labada dhinac ee gamcihiisa siyaasad, ka shaqeeya oo dhan warshadaha kala duwan, uma baahna / hesho shuruuc gaar ah oo shaqaalaynta / codaynta, tag college ee heerarka isku, iyo guursadaan dad aan ku salaysan midabka maqaarka. Warbaahinta ayaa doonaya arrin dareen. Dhinacyada ayaa raba arin dareen (si ay u dardar ah ayey doorasho oo xoog leh cod-). arrintu waa ay sameeyaan aan oggolaan inay noo ciyaaro… tani ma aha Maraykanka ah iyaga wax xuja ah oo ay kasoo horjeeddo. Tani waa a “waxaan u baahanahay inaan ciyaaro oo dhan wada”. Tani waa a “waxaan u baahan nahay in ay aqbalaan in ay jiraan doqomo halkaas in u qaadan doonaan, innagu waxaynu nahay kuwa ay la tahay inaynu innagu nahay, laakiin waxaan doonayaa inaan is ilowsiisid sababtoo ah waan ogahay qofka aan ahay.”
Waxaan kids foster madow (7 iyo 9 sano jir ah). The 7 Gabar sanno jir ah ayaa noo sheegay “Qof walba waa ogyahay in dadka cad neceb dadka madow iyo in dadka madow neceb dadka cad.” Taasi iga dhigay murugo. Qof iyada in baray erayo. at 7 sano jir ah, in qayb ka mid ah iyada qurxiyo noqday. Waxaan u baahanahay in la joojiyo ka dib markii warbaahinta / hadalkiisaa ku siyasadeed iyo isku dayi iyo in la dhiso biriijyo iyo boodin inay gunaanad ku saabsan dadka iyo markii dadkii sameyneynaa gunaanad nagu saabsan, waxaan u baahan nahay in ay sii daayeen inuu dhaco simaha naga sababtoo ah haysta cadawtinimo kordhiyaa kaliya kala isir iyo waxaan u baahan nahay khilaafka this waxaa cusboonaysiiyey.
Rumplestiltskin • August 19, 2013 at 11:28 waxaan ahay • Reply
maxkamad A aad aadka loo soo oogay, oo aan w / o sabab. Our ay macaamiloon joogo, la “wax alla wixii” doonaa in mar walba la dambaabi our ee la soo dhaafay disagreeable. Waxaan u lahaa waalidka, in apparenty ahaayeen “midabka indhaha la '”, oo taas ayaan ahay mahadisaan. Marka waxaan ku dhowaa saddex, iyo saaxiibada xaafadeyda hal maalin ka ciyaaro qodayaan, taasi waa waxa aan ku arkay – mid mid, waalidka soo fuulo, oo waxaad ku tidhaahdaa wax u eg “soo Johnny, aan heysano si ay u tagaan” ama, “Suzie, waqtigii aad hurdo gaaban”. Mid mid, waxay wax walba ka tageen, mid ka mid ah mooyee,. Anigu ma aan qabaa wax ku saabsan maalintaas, laakiin qaar ka mid ah ama afartan soddon sannadood ka dib, Waxaan ogaaday wixii dhacay: in wiilka yar ee la soo dhaafay wuxuu ahaa madow. Waxaan idinku leeyahay,, markii aan ogaaday dhab MAXAY maalintaas dhacay, Waxaan la yaabay, iyo cadhooday – in wiilka in kids kale ayaa isagoo “ilaaliyo” ka ahaa saaxiibkay. Anigu ma aan aqoonin waxa “madow” ahaa. weli la yaab leh.
Hadda, Aniga 71, oo lahaa xiriirka fool-ka-fool ah la Ciise Masiix, waayo, 37 sano. IN, in ka badan dood kasta oo ka mid ah “tartanka” uu dhab ahaantii uu indhaha ii furay, ha ii sharaxo – kitaabkii reer Efesos, waxa ay sheegtay in Ilaah, sameeyey Yuhuudda, iyo sidoo kale ka mid ah dadka aan Yuhuudda ahayn, Nin cusub. akhyaarey, taas macnaheedu waa in aad, iyo aniga, inta sida aan ku leenahay xiriir in ay la Masiix. Marka aynu ka talaabsato MASIIXA, waxaan “gasho”, ama “soo galay” ONE MAN ku CUSUB. Sidaas. BAXSAN Masiixa, waxaan saari karo fal, waxaan isku dayi karaan in ay wanaagsan tahay, sameeyo wax sax ah, iwm. Laakiin out xoog dabiiciga had iyo jeer ay maamusho bixi doonaa, oo aan mar kale ku guuldareystaan ​​DOONA, mar walba aynu nahay “ka baxsan Masiix”, ama ma sarkhaansan uu. macno?
Ka baxsan Masiix, Ma jiro MIDNIMO waarta – haddii kale waxaan lahaa in, muddo dheer ka hor. Sidaas, soo galay Masiix, halkaas oo aan mar dambe cad ahay, Anigu waxaan ahay walaalkiin ahay, iyo inaan dhabarka.
Mollie • August 19, 2013 at 11:28 waxaan ahay • Reply
Waxaan oggolahay in cunsuriyadda waa arrin. Laakiin wuxuu ku yidhi in ay tahay oo kaliya dhanka ah Maraykanka Afrika waa khalad. Waxaan la qortay marar badan badan oo noloshayda. Anigu waxaan ahay girl.I dhallinyarada cad leeyihiin timaha timo cad kuweyga oo indhaha buluuga ah iyo lahjadda ah koonfurta. Waxaan la cuffed ay gaysteen ah sababta oo ah waxay raadinayaan tuhmane. Waxaan lahaa qori lagu qabtay in madaxa layga qof oo damacsanaa inay i dilaan. Waxaan si buuxda u tageen iyaga oo aan. Waxaan lahaa saaxiibo madow iska joojiso ila hadlay, maxaa yeelay, anigu waxaan ahay cad iyo “suurto gal ahayn fahmi karo”. Waxaan dhamaanteen leenahay halganka isku. Waxaan dhamaanteen ka fool xaqiiqda ah in dad aad u yar oo u socdaan in ay isku dayaan si ay u helaan in ay nala soo socodsii ka hor inta aysan na xukuma. My iyo ninkeeda Waxaan leeyahay shan carruur ah oo noo gaar ah oo dhowaan qaatay labo ka mid ah ilma adeer ah oo isna wuxuu ku dhici madoobaan. daacad ah waxaan idin sheegi karaa in sida ugu badan ee aan ku jirtay dukaanka qoys ahaan jirin dadka madow abid xitaa meel fog laga nooc nala ama si dhab ahaan noogu garateen ilaa aan ka qaatay kuwaas oo labo wiil. Sida haddii heerka midabka ay leeyihiin in maqaarkooda iyaga ka dhigaa inay naga kala duwan. Waxaan oo dhan waa u siman yihiin innagu ma nihin? Haddaba maxaad this caddaan ah vs wax madow waa wali? Waa maxay sababta ay u si fudud oo aan bulshada ka mid ah dadka oo dhan wada socda oo la aqoonsado in ay tahay at waxa muhiimka ah dhibaato wadnaha ah oo aan dhibaato tartan? Marka gabdhaha aan ku koray oo uu bilaabo inuu raadiyo nimankooda anigu ma daryeeli doonaa haddii ninkaas waa madow ama caddaan ama Shiinaha. Waxaan ka codsan doonaa oo kaliya laba wax, ma wuxuu Rabbiga jecel oo dhan oo qalbiga ku jira, oo uma leh inuu Ciise wuxuu qalbiga ku. Haddii jawaabta labadan waxyaalood ayaa la haa markaas waxaan u garan doonaa markuu wax wanaagsan in gabdhaha aan noqon doono. Waxay isla aadi doonaa wiil oo aan dhalay markii ay arkaan inay naag u noqoto. Si aad u samayso wax kasta oo arrinta tartanka waa halis aan loo eegayn waxa dhinaca loo sameynayo. Ina keena aynu kaliya kor ku kacaan oo waxay ugu yeedhaan waxa ay tahay….dhibaato wadne.
LolaMitche2011 • August 19, 2013 at 11:28 waxaan ahay • Reply
Lahaanshaha qoyska ka mid ah multi-midab si buuxda Waxaan fahamsanahay dhinacyo badan oo kala duwan. Waxaan odhan doonaa in “white” America oo kaliya si fudud mana garan doonaa “midab” muuqaal. Sidee bay waayeen? Dadka ku tusi doonaa naxariis badan oo dadka ay la xidhiidhi karaa. Madowga magacaabi kara 100 Xaaladaha kala duwan ee cunsuriyada noloshooda iyaga u gaar ah, halka caddaanka sidoo kale magacaabi doono 100 xaaladaha iyo cudurdaar kala duwan sababta ay u aamminsan waxa ay aaminsan yihiin. Iyada oo cad ka badan tiro ahaan oo xarig ah ka badan tartanka kasta, iyo kiiyoo ka badan boqolkiiba xigmad leh oo xarig ah ka dibna caddaanka, waa dambiyo cad lagu samayn kara qof kasta. Waxaan dhamaanteen kaliya arkaan waxa aan doonayaa in aan arko. Iyadoo in lagu sheegay, Waxaan dhihi lahaa waxaan oo dhan waxay u baahan yihiin in ay kaliya ku dadaalaan inay sameeyaan sida ugu fiican ee bulshada iyo iyaga kor. Black Americans waa in hadda ogahay in aanay ka filan karto dhegta a dabacsanaadaan ka caddaanka, iyo Real Madrid waa in ay ogaadaan in aanay waligood fahmi doonaan waayo aragnimada dadka midabka dhex mari. Iyo daacadnimo taasi okay.
Dave • August 19, 2013 at 11:29 waxaan ahay • Reply
Lola, Waxaan qabaa in la isticmaalo “kiiyoo” & “caddaanka” sida aad qabto in this post eego ballaadhan oo caynkaas ah oo aad u badan ukas. Americans Afrika ma yihiin cadowga Caucasians. Caucasians ma yihiin cadowga of Americans Afrika. Dadka dembi Quluubtooda gardarro ah midkoodba kan kale xukumo. Waxaa laftiisa ciyaara baxay ee u dhexeeya dhammaan noocyada kala duwan oo dalal kibirkii shaqsiyaadka sababtoo ah doorta hilib kibir ka baxay iyada oo midabka maqaarka ay. Waxaan ku arki dhexeeya dalalka deriska ah Asian halkan Thailand iyo sidoo kale. Waxaa hubaal aan ku xaddidnayn Americans Afrika & Caucasians. Fadlan ha siyaabaha aad la dhaawacay ku dar in la'aanta ah ee dib u heshiisiinta xaalkan. Change runtii dhici kartaa.
Masiixu wuxuu u dhintay inuu badbaadiyo dembilayaasha. Taasina waa halka isbedelka bilaabo marka ay timaado waxyaalahan aad ku xusan. Shaqsiyaadka is naftooda jir iskutallaabta lagu qodbay & lenses cusub la siiyey si aad u aragto dunida. Oo waxay noqon doontaa qof ka qof sida ay helaan oo faanbadan, aragtida cidhiidhi ruxay jidka Masiix Kingdom by.
Masiix ha idiin barakeeyo, Lola.
KSStrong • August 19, 2013 at 11:29 waxaan ahay • Reply
@ Gdoggydog05 qoray "oo dhan ayaan Christian madow
walaalo ah diiradda saaraan Martin, oo xitaa ma qirtaan oo xaqiiqda ah in uu qalad ah in meesha ugu horeysa waa in ay doortaan trajedy sida ka muhiimsan kuwa boqolaal trajedys la mid ah in maalin walba ay dhacaan. "- Waxaad ahayna in dadka Masiixiyiinta ah AA
u arkaan musiibo this kuwa kale oo dhan ee kor ku xusan. Xaqiiqdu waxay tahay in haddii ay taasi ku jirtay wararka, Sidaa darteed iyo, waxaa si dabiici ah u noqon doonaa mawduuc wadahadalka dheeraad ah si ka badan waxyaabo kale oo dadka waa halmaansan. Paul The rasuul doortay, hal mar, si loo muujiyo dembiga Herodos (guursadaan naagtii walaalkiis) oo dhan dembi kale oo la dhaca wakhtigaas. Waxa uu si gaar ah u dhawaaqay Herodos.
Iyada oo aan ognahay in Paul oo aan ka waaban in ay dadka soo wac baxay ay dembi ama Munaafaqnimada, waxaan ka akhrisan kaliya ee dhawr jeer isaga qaylinaya magacyada qaar. Waa dembi this? No, ayuu u yeedhay Herodos soo baxay sababtoo ah xaaladda iyo booska. Waxa uu Peter dhawaaqay (by
magaca) sababtoo ah hoggaan ee kaniisaddii hore. Ma aha dembi in la tilmaamo in ay dhacdo in this iyo kala hadli cunsuriyadda. Xaaladdan oo kale ayaa lahaa xaaladda a awood warbaahinta, iyo si ay dadku ka hadlayaan waxa ku saabsan.
gdoggydog05 • August 19, 2013 at 11:30 waxaan ahay • Reply
im ks ka xumahay… waa i way ka cad. i ma uusan qaban…. i inaan hadlayey oo dhan kiristaan ​​madow in i garan ama akhriyey, iwm….. oo i macnaheedu ma in ay mudnaanta badan…. waxa i loogu tala galay waa this: of comments oo dhan kiristaan ​​madow ka dhigay, i ma arag kasta oo cambaarayn warbaahinta ee gelinaya kiis gaar ah oo ku saabsan pedastool oo ku saleysan jinsiyad…. xumahay oo ku saabsan in. Anigu garan maayo haddii ay sameeyaan ama ma. Waxaan qabaa warbaahinta waa dambi ah iyo la yaabanahay in walaalahay madow iyo walaalahaa, ayaa faallo qaybaha kale ee kiiska oo u muuqda taageeray warbaahinta in ay soo bandhigay, halkii, ismana khilaafin, xataa haddii kaliya hadallo ay.
Steve Burlew • August 19, 2013 at 11:30 waxaan ahay • Reply
Thanks, Trip. dhab ah. Muddo dheer tan iyo markii aan wada ama gaadhsiiyo. Waxaan rajaynayaa in aad Camalkayga ay fiican tahay.
Nimco iyo nabadu ha idiin, walaalkiis.
Heather Mahnke Worrell • August 19, 2013 at 11:31 waxaan ahay • Reply
Anigu waxaan ahay 32 sano jir dumar ah oo cad. Waxaan ahaa kaliya oo sharxaya story Trayvon ee aan 12 gabadhii sano jir ah. Waxaan u sharxay sida aan dareemayo ku saabsan oo dhan waxaa ka mid ah. Waxaan kor u akhri aad blog. Waxaan idinku ixtiraamaan, iyo sidoo kale waxaan dareemayaa in arrintan loo baahan yahay in laga doodo. Waxaan eega at sida aan guurka, hab… Haddii aan iyo ninkeeda Waxaan leeyahay khilaafka a, waxaan u shaqeeyaan ilaa aan leeyihiin waxgarasho ah. Waxaan nahay labada gaar ah, laakiin by guur nahay (ninkayga iyo ayaan), sida oo dhan oo naga mid ah waxaa la geliyaa qaybaha, haddii aynu u jeceshahay ama ma. carruurtaydii waan baro in aanu midabka ahan, qof waa maxay arrimaha, laakiin si kastaba ha ahaatee, anigu waxaan ahay cad, aad tahay madow iyo ma aan beddeli karo in. Waxaa xaqiiqo ah oo ku saabsan nafteena, sida hadda waxaan ahay xiran maaliyada oo cas oo haddii laga yaabaa in dadka oo dhan soo xirtay funaanado cas maalmeedka, keeni kartaa in aan soo maray oo dhan of this, waa la daaweyn siman by kasta oo kale oo, oo dhammaan loogu wada yeedhay “dadka cas maaliyada”, laakiin in aan ku dhici doona. Waxaan dhamaanteen u baahan tahay inay yimaadaan si ay faham oo ku saabsan kasta oo kale oo la mid ah in aan guurka. Khilaafaadka u baahan tahay in la hagaajiyo, “Ha seexan cadhooday ma tagaan”. jinsiyadaha Our ayaa khilaafka muddo dheer. Waxaan marnaba run ahaantii aynu gaadhayno is faham ah, ama barteen in ay ixtiraamaan kasta oo kale oo si buuxda u… hadda sibraar oo dareen our ka dhacay xadka cadaadis iyo waxaan qarxeen la irrationality. jinsiyadaha Our weligay ma run ahaantii guursaday kasta oo kale oo, sidaas si la hadasho. Waa waqti si aad u guursato… Waxaad sharaxay in aad blog sababta aad u niyad ahaan lagu maal Martin Trayvon ku Case. In tani ay tahay sheekada oo adiga kugu saabsan, aabbahaa, aad awoowe, in lagu cunsurinimo ka qortay. Bal i sii daa idinku leeyahay,, sida qof dumar ah oo cad, shisheeye kasta oo aan lagu daweeyo si taxaddar leh loo eegin midabka maqaarka ay. Waxaan quful albaabbadayda igu, adkey aan kiishad, iyo carruurta la adkeeyo oo aan loo eegin qofka aan ku socon ee la soo dhaafay on wadada. Waxaa jira kufsaday cad khatar ah, killers serial, afduubka, iwm. dambiyada ka dhacaya meel walba oo kaliya sida ugu badan waxaa jira in midab kasta oo maqaarka kale waxaa jira… Waxaan doonayaa in aan ka caawin Quluubta isbedel iyo maskaxda. Just, sababtoo ah qof ka qortay, ma u sameeyo cunsuriyad. Waa sababtoo ah waxaa jira wuxuush xun jiran in midab kasta oo aan u leeyihiin in ay si taxadar leh. Sidaas, haddii aan ku noolaa duni nabad ah ku faraxsan yahay meesha uu qof kastaaba waxay ahayd nooc oo jecel, aan haysan lahaa in welwelin waxaan u maleynayaa, laakiin tani ma aha Jannada. Ilaah ha idiin barakeeyo, T.L. Jacaylka iyo Nabadi ha idinla jirto.
Christopher Zavala • August 19, 2013 at 11:31 waxaan ahay • Reply
Waxaan qabaa Zimmerman / Martin wax oo dhan ayaa i tusay in ay tahay quruxsan fudud ii xukumo oo kaliya u qaadan in dad gaar ah oo kaliya waa “ciyaaro card tartanka.”
Laakiin waxaan ixtiraamaan Trip. Oo waxaan doonayaa inaan erayada uu qalbigiinnu iyo isku day in aad ka nixi la fikradaha iyo waayo-aragnimada dadka kale. Waxaan ilaahay ka baryaynaa in ay ballaariso doonaa view iyo naxariis aan. Oo waxaan baryayaa in xoogga Ehelka Injiil wuxuu ku midoobaan doonaa Church iyo caawin oo dhan oo naga mid ah in la helo aqoonsi aan Masiixa oo aan midabka ama fasalka ama dalka…
TJ • August 19, 2013 at 11:32 waxaan ahay • Reply
Waad haddii loo maleeyo in waxa uu ku salaysan yahay midabka. Ma illoobin ay jiraan lahaa oo lab madow dhallinyarada jebinta guryaha halkaas ku noolaa zimm? Tani waxba u qaban la midab keliya aawadiis waxaa ka mid ah lahaa.
Laura merrone • August 19, 2013 at 11:32 waxaan ahay • Reply
Haa, ogolaanaysaa on guurto iyo aad u hesho oo dhan of this inaga dambeeya. Wax alla wixii maalintaas ka dhacay, aad cafiyi kara iyo illoobin? waxaan oo dhan Can “Cadowgeennii jeclahay” sida isagoo Masiixi ah, ku alla kii waxaa laga yaabaa in? aan si daacad ah u odhan kartaa “aarsasho waa Rabbiga” ma annagaa? Ee waxaan ahay naag cad lakiin waxa ay ku dhex qaar ka mid ah waayo-aragnimada u xun naftayda laakiin aan helay waxa ka weyn by dhaafaa dhammaan dhinacyada ku lug leh. Our quruun u baahan ilmada aan ka bogsiinaya. The more waxaan ku cafiyo, si fiican u off waxaan noqon doonaa iyo dareenka cunsuriyadda libdhi doonaa. Hadda, haddii oo kaliya Al Sharpton iyo warbaahinta wararka ka fariisan doono ka keeneen alaabtayda oo dhan tan iyo furitaanka nabrihii, waxaan noqon doonaa midigta oo dhan…
Sophia • August 19, 2013 at 11:32 waxaan ahay • Reply
Wow! Waxaa sidaas u fudud in la maqlo aragtida Kingdom arrintan. Waxaan aad sidaas ku duudduubtay oo ku doodaya kasta oo kale, in aan illoobin Ilaah u weydiiso wixii Wuxu qabaa,. Waxaan iloobin in jawaabaha ay horey u yihiin in eraygiisa. Waxaan iloobin in waa in aynu isku halleeya, ninna oo waxba laakiin isaga. Ugu dambeyntii, waxaan iloobin in kuwa isaga doondoona, jiri doona kuwo u heli runta.
Midab runta ah waa arrin wadankan. Waa wax in aynaan ordi karaa, laakiin ay tahay in aan la kulmi iyo isbedelka. Waxaan leenahay in la ogaado in aan waxba kama bedeli karo iyada oo aan Ciise Masiix. Midab waa mid dhab ah in ka muuqataa nidaamka caddaaladda our, ee sida aan u fekero kasta oo kale oo, iyo sida aan kasta oo kale oo lagu daweeyo. Ilaa nacayb ah laga saaro qalbiyadeenna, midab sii wadi doonaa in galinaa go'aankeena. ee la soo dhaafay waxa uu noqon doonaa la soo dhaafay, marka ma aha mar dambe la joogo in mustaqbalka. ilaa markaas, waxaan dhab ahaan waa in aan u guurto on.
Karla safsaafka • August 19, 2013 at 11:32 waxaan ahay • Reply
Sorry, Waxaan sharraxay in si xun! Waxaan ayaa lumiyay, laakiin ma aha sababta oo ah tartanka!
Karla safsaafka • August 19, 2013 at 11:33 waxaan ahay • Reply
Aamiin Trip. Anigu waxaan ahay qeybtii Colombian, Ingiriisi qeybtii, waxaa si fudud ii sida aan ahay cad, Waxaan lahaa saaxiib muddo ah kuwaas oo ahaa natzi ah neo ka Ireland. Ma uusan ogayn waxaan ahaa qeybtii Colombia muddo dheer. Markii aan ogaaday caqiidadiisa, Waxaan u sheegay ahaa qeybtii Colombian, wuu diiday inuu i rumaysan. Lahaa waxaan lahaa maqaarka madow, isagu marnaba ku noqon lahaa saaxiib aan in meesha ugu horeysa. Wuxuu ku sii saaxiibo ila. Waxaan rajaynayaa in this Ilaah loo isticmaalaa in lagu beddelo aragtida, aannu tan iyo taabashada laga badiyay iyada oo nolol maalmeedka, laakiin ma aha sababtoo ah midabka maqaarka. Anigu ma qiyaasi kartaa sida daran iyo dhaawac waxaa ay tahay in la had iyo goorba xukumo by midabka maqaarka. Wiilka My jecel yahay 116. Isagu waa kaliya afar iyo leedahay fikrad wax cunsuriyad weli. Waad ku mahadsan tahay ka hoose ee qalbigayga, waayo, iyagoo lagu daydo u weyn in labada wiil oo aan dhalay. Ilaa hadda sida aan afar sano jir ah ayaa ka walaacsan, guys kuwaas oo u eg heesaa jeclahay Ciise iyo waa nabad :)
The more Waxaan akhriyey oo maqal ah oo ku saabsan kiiska Trayvon Martin. The more waxaan ku ogaaday in inta badan ma fiirin karo ee ka a dhibic macquul / dhabta ah ee aragtida. Waxaan inta badan eegto kiisaskan dhex gelis la leexiyay qaada Alaabtoodii ka ee la soo dhaafay u gaar ah. Waxaan idiinla hadlayaa sida qof dumar ah kuwaas oo weyn awoowe ahaa soogalooti sharci darro ah ka Mexico, oo weliba ayaa loolan by Masiix in ay qaataan xaqii, aan runta sida “waxaan” waxa ay u arkaan. Masiix weydiiyo in aan meel iska dhigeen our aqoonsi oo ay ku jiraan our qowmiyadda, galmada, madaahibteenu raacsan, iwm (Galatiya 3:28), si ay u aragto dunida iyada oo siku Masiixa…oo iskuna runta oo dhan.
Trayvon Martin, sida uu sheegay saaxiibkiis Rachel Jeantel cunsurinimo ka qortay George Zimmerman isaga u yeedhi “Creepy cracke a **,.” oo wuxuu ku daray in si waxashnimo ah GZ weerar. fahmaan, Anigu waxaan ahay gudaheedana sinaba uma ay difaacaneysa Zimmerman maxaa yeelay, wuxuu sharciga ku qaaday gacmihiisa galay, taas oo ku dhamaatay geeridii Martin. My dhibaatada la kiiskan, ayaa u dhaafin in waxaa inta badan la siiyaa laga tirada badan yahay, waayo, hadalo cunsuriyad iyo dabeecadaha. Runta waxa ay dhacdo in this waa in labada nin ay ahaayeen ka mid ah line in ay dhaqanka iyo dhinacii kale, oo haddana TM helo baas waayo, isagu waa nin midabka. Waan ka xumahay laakiin Ilaah ma maamuuso maskax in, sababtoo ah waa mid ka mid ah in uu yahay qaloocin oo madaxa adagu.
Rag ahaayeen si siman qaldan ee sida ay ku jawaabay in ay midba midka kale, iyo weli in yar aan danaynayaa ALL xaqiiqooyinka. waxa kaliya oo aan daryeel ku saabsan xaqiiqooyinka sida ugu fiican u taageeraan habka aan doonayaa in aan u malaynayaa in.
Waxaan ahay helo midab waa dhibaato dhab ah dhaqankeena, laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay ma aha oo kaliya dhibaato cad, waa sida ku baahday in dadka midabka iyo sidoo. cunsuriyadda, ma idlaan doonaan ilaa iyo inta aan ka walaacsanahay oo keliya ku saabsan “gaar ah” dadka. Waxaan run ahaantii rumaysanahay in tani ay tahay fariinta Martin Luther King Jr. wacdiyey, hor intii aan la dhimeen by kooxaha Al Sharpton & Jesse Jackson. Midnimada iyo midnimada dhici kartaa oo keliya marka ay ragga iyo dumarka si dhab ah u aragto iyada oo la gashto Masiixa, maxaa yeelay, sida Galatiya 3:28 farta ku fiiqay, Annagu waxaannu nahay ALL ONE “IN” Masiix. Waxaan shakhsi ahaan aaminsan yihiin mar walba waxaan doortay si ay u arkaan nafteena ka baxsan qaab in, badan aan mid og ama aan garanayn u simanahay aniga iyo caqabadaha kala qaybinaya. line hoose Nasaarada, midab joojin kartaa inaad la, inta aad si dhab ah ay qaataan aragti Masiixa. Haddii kale, intiinna hadhay ay la xaq dhab ah been sii Wadda caqabadaha u dhexeeya adiga iyo kuwa kale.
Waxaan u baahanahay inaan weydiin nafteena rabaa xaqa ah, ama waxaa uun aan xiiso u arkaya xagga gashto gurracan, halkaas oo run yahay qaraabo, oo waa la aqbalaa oo kaliya haddii ay ugu aadayso our qaabka?
Larone • August 20, 2013 at 4:35 waxaan ahay • Reply
Maxaa i walbahaarin badan wax waa sida reading “qaar ka mid ah” of dhajiyay comments on website cajiibka ah, Waxaan u arkaa in ay adag tahay in la arko farqiga u dhexeeya halkan, YouTube ama site kasta oo kale ee ay dadka waawayn oo kaliya jecel yihiin in ay ku doodi dhibcood iyo ka qaadista nimco iyo nabad. weli, comments aad uga wanaagsan sidii caadiga ahayd. Maxaa Trip uu isku dayayo inuu gudbiyo ay u muuqataa in iscasilaadiisa laga badiyay inta badan comments.
Ilaa hadda sida dilka Trayvon, kaliya aragto sida ay ku dhowaad marnaba qofka midabka, gaar ahaan madow, in ay timaado in daafaca reer Zimmerman. hadda, wax walba ma laha in la sameeyo tartanka, laakiinse waxyaalaha la samayn waa in la aan si fudud u Halmaameen. Khibradda madow ee America waa sidaas hoos u. maxaad? Waa in Madowga uun ka heli badan oo xaqiiqda ah in awowayaashood ahaayeen hantida ragga iyo dumarka wadankan? Waa in xaqiiqada ah in dacaayad dowladda macno ahaan u yeedhay takoorka iyaga ka mid ah waa laga illoobi? Waa in ay iloobin in Dastuurka macno sheegay in ay yihiin keliya 3/5 nin? Of muhiimadda loo siman yahay, waa in dadka aan dadka midabka dhab ahaan u dhaqmaan luxo kuwan xaqiiqooyin la mid ah taariikhda American sida haddii ma jiraan weli nidaamka dulmi (ma ahan oo keliya takoorid) in si toos ah saameyn bulshada madow iyo kooxaha kale ee laga tiro badan yahay? Waxaa si fudud u sheegto dadka si aad u hesho waxa ka weyn ama in la tilmaamo guul Black in iskuday lagu dhibaateeynayo xiriirka tartanka in this dalka taariikh ahaan cunsuriyad. Laakiin marka aad ka sokay ee cunsuriyadda (xitaa haddii aan garanayn) oo aan aad saamayn ku ag xun, aad shaki qabto aragti kala duwan oo mararka qaar xitaa daafaca marka ay timaado jinsi. Rabbiga ku mahadsan tahay in Masiixa midaynaya dadka ALL. laakiin weli, Kaniisadaha ku sii tahay meelaha ugu takooran oo ku yaal America. aad oo dhan ku mahadsan tahay akhriska iyo dhammu ku barakoobi.
thefollower • August 20, 2013 at 9:51 waxaan ahay • Reply
Waxaan akhriyay marayo waxan oo dhan comments, dood, statements naxariis. Waxaa oo dhan igu amazes aad sirdoonka iyo waayo-aragnimo shakhsi waxyaalahan oo dhan oo ku saabsan. Like in Trip bilowgii yiri ha joojin hadalka ku saabsan, Si kastaba ha ahaatee, hubaa ma uu uga jeednaa doodi Waxaan ahay.
Anigu waxaan ahay ah 18 jir ah gabar caddaan, saaxiibkay ugu fiican waa 18 sano gabar madow jir, i lahayn qaraabo madow, kaniisadda gebi ahaanba cad, i leedahay saaxiibo badan oo madow, oo i soo shaqeeyay xero loogu tala galay caruurta yar oo halkaas ka badan nus qalabka jiifka waa madow….i soo aragnay sida aad u dhan oo ilaa xaqiiqooyin qaar ka mid ah oo ku saabsan nolosha in ay sameeyaan dadka u fahmaan aad si fiican kuwa tahay xaqiiqooyinka ku saabsan noloshayda…Waxaan bartay oo ku saabsan arrinta jinsiyadda iyo waxa Anna waan dhibsadayoo ay xitaa iga dhigay waalan ku filan si ay gacantayda ka feeray wax markuu maqlay oo ku saabsan halganka dadka qaar ka mid ah soo maray jebin. ay okay si aad u hesho waalan waxyaabaha sida dilka in ka badan, cunsuriyadda, been, iyo Munaafaqnimada, laakiin waxa ay xaqiiqdii waa MA okay midba midka kale kula dhaqmo si ixtiraam iyo 'waan ogahay wanaagsan’ dabeecadaha i aragnay on halkan. ma laga yaabaa in aan ogaado wax badan oo dhan oo ku saabsan dunida oo dhan ahaa halganaka ay laakiin arimo dhowr ah waan ogahay. Waan ogahay in marka hore Ilaah oo dhan nin walba abuuray siman iyo sida saaxiibo kuwa loola dhaqmo si cunsuriyad annaga iyo waa dhegi kara oo iyaga aawadood. sidoo kale waxaan ogahay in Ilaah waa xaakinka xaqa iyo dad badan oo idinka mid ah oo ku dooday on halkan ayaa sheegay in aad ahaayeen Christian…ceeb bey kugu tahay… Xaaladdan oo kale ayaa keenay horyaalka heerka noocan oo kale ah oo aan ahayn oo keliya oo u dhexeeya / dadka madow / caddaan Isbaanish dhexeeya qof kasta oo qaba isagu / iyadu waa ogyahay ka fiican yahay qof kasta oo aan ku qanacsanayn iyaga la. Waxaan nahay carruurta Ilaah, kan keliya run ahaantii waa ogyahay waxa ku dhacay habeenkii Treyvon la dilay, si kuwa aan in ku doodaya qofka sax ama qalad?
John 8:7 Haddaba markay sii wadeen inay weyddiiyaan, kor u qaaday isaga qudhiisa, oo wuxuu ku yidhi, “Kii aan dembi lahayn oo idinka mid ah, isagu horta dhagax ha ku tuuro.”
Ma maqli inuu kuu sheego my opinion on kiiska oo i Ma maqli si aad xukumaysaan. Waxaan dareemay qasbin inaan idin xusuusiyo in sax iyo khalad waxa aan ugu baaqay in ay dadka jecel oo si ha go of kibir, hadayana jirin in ka badan ku guuleysatay muran aan annagaa leh inuu ku guuleysto. John 8:7 yimid xusuusanayn gudahood tobankii comments ugu horeysay oo uu halkaas joogay ilaa dhamaadka. Haddii aad ku socoto in ay ku doodi waxay ka samaynaysaa jidka jacaylka ama, halkan fikir funny, haddii aad ogtahay in aad ka Doodin karaa hab in weli waa ixtiraam Ha ka Doodin! Waxa aan inagu inuu xukumo ama dhigay qof xor ah oo daacad ah ay nacas ah u dhaqmaan sida ay tahay. Waad ku mahadsan tahay mawqif iyo wadaaga fikradaha aad! Sida aan u sheegay oo hubi in aad tahay dhammaan dadka caqli iyo raaxo waxaan ahay laakiin haddii aanan tusin jacaylka Ilaah, xataa iyada oo loo marayo fikrado maxaad adduunka ugu dadka malayn diinta kiristaanka waa qiimo marka aan u dhaqmaan mayno inta kale ee kala duwan ee adduunka?
waxaa • August 20, 2013 at 11:31 waxaan ahay • Reply
Waxaan nahay Mu'miniine, Xammaalladii image Rabbigeenna Ciise Masiix, Ciddi wax kasi si aan annaga iyo dadka ALL waa kuwa sharka leh, dembi leh, soo furtay oo keliya by nimcada Ilaah ee lagu helo rumaysadka xagga Ciise Masiix oo qaaday cadhada Aabbaha, sababta oo ah dembigayaga, iskutallaabta noo. Bal maxaynu haysannaa oo aan runta? Runta waa in waxa xukuma hadalka this, ma opinion. Our taariikhda sheekada iyo waxay bixisaa jawaabaha haddii aan diyaar u noqoto qof daacad ah waa.
Waxaan xitaa ma siin doonaa qofka jinsigiisa. Sababtoo ah waa ku tacaluqda inay doodan. Anigu waxaan ahay lover ah Rabbiga, iyo qof bartay sharciga, caddaalad, cilmiga, iyo sharci fulinta.
Fiiri xaqiiqooyinka iyo stats ah. Nidaamka American Justice waa ka fog tahay colorblind. Waxay si xun ku gurya beelay dembiyadii dulmi, eexasho, iyo xumaantii. Classism waa kaliya sida ugu badan sabab u ah sida cunsuriyada waa. Laakiin in la yidhaahdo cunsuriyad kajirin, ama qayb ka mid ah oo aan ka ciyaaro natiijada dacwadda this, waa khalad. Waa fikrad ah in aad doorato in ay gabi ahaanba iska indho taariikhda nidaamka caddaaladda our ay guushu ku waxa uu jeclaan lahaa in uu noqdo mid run ah.
Midab jira. Waxaa nool yahay iyo si fiican oo firfircoon waa.
Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, Annagu waxaannu u adeegi Ilaah wax walba waa ogyahay. Yaa waa xoog badan si aad ugu bogsiisid kuwa isaga ka sii dayn doonaa. Yuu yahay, Aaminnimadayduna inay bogsiiyaan kuwa qadhaadh iyo xanaaq. Oo bal yaa ina siiyey awood iyada oo salaadda iyo ficil.
Xer carruurtaada in runta. Runta waxa ay tahay in ay tartanka qayb ka ah aqoonsiga noqon doonaa, (iyo loo ogaado sida ay dadka qaar iyaga ka aragtid) waayo, inta ay nool yihiin.
Ilaah ha ku ammaanmo oo aan eegayaa waxa nin sameeya.
Waxa aan rumaysan tahay in Ilaah inaga rabo in la sameeyo dhacdadan iyo dhammaan kuwa kuwa kale oo aan sii wadno in la maqlo ku saabsan yahay waxa Trip yiri. Duceeya dhammaan dhinacyada ku lugta leh in ay ama aad ka badbaadiyey waxa dhacay ama aad u hesho xaq haddii ay yihiin Masiixiyiin. Maxaa qof walba ayaa seegay waa in Ilaaha Qaadirka ah u yeedhay tirada Trayvon ee sabab kasta oo isna wuxuu lahaa. Qofna socday in la beddelo in habeenkaas. Ilaah wuxuu ku yidhi, “Trayvon, waa in ka badan kuu” sida uu u sameeyey Tupac iyo kuwo kale oo badan. HADDII Trayvon la badbaadiyey, Ilaah ammaan uu haatan kula Ciise waa. Haddii aadan, nasiib daro wuxuu Jahannamo gubanaya. Xusuusnow, Wacdiyaha. 12:13 ” Bal aan maqalno gabagabo ah ee arrinta oo dhan: Ilaah ka cabsada, oo amarradiisa xajiyow,: waayo, taasu waa waajib-aadmiga oo dhan.
Waxaan galay website this, akhri blogs kala duwan posted oo waxaa lagu dhiirigelinayaa by posts kala duwan ilaa aan tan ka mid ah u yimid. thread The comment hoos danbayay ahaa labada abbaarta iyo wadnaha niyad jab. Halkii is dajiyaan reading, bukaanka, caqliga iyo Ilaah xuddun comments, Waxaan si lama filaan ah ka helay oo naftayda ku qasbeen in weyrax ah cunsuriyadda iyo nacayb. Oo waxaas oo dhan by Nasaarada u maleeyeen kuwaas oo u muuqdaan in ay u maleynayaa in ay habboon tahay in mid kasta oo kale oo ay tahay ama aan waa Masiixiyiinta ah sheeg iyo in ama aan salaadda gaari doonaa oo dhegaha ugu jira Ilaah ama sida Marvin ku rid: “…Salaadaha badan tahay, ma ka dhigi doonaa ee la soo dhaafay aad saqafka.” Qaar badan oo idinka mid ah si joogta ah idinku aan weerarka oo aadan doonayn in ay ku xumayso qof, in aad si fudud u leeyihiin fikrado aad u gaar ah oo ay haa tahay in, ay xoog badan yihiin. Fine, waxaan oo dhan waxay leeyihiin fikrado noo gaar ah oo aynu wada dareemaan si xoog leh arrimaha qaarkood in ama aan aan helno kuwa kale oo raacsan. Taasi waa xaq iyo xorriyad ah aynu sida Mareykanka in ay ku raaxeystaan ​​iyo waxaan rajeynayaa in marna qaaday naga. Laakiin si ay si joogto ah uted walaal kale ama walaashiis in Masiix iyo inuu wax ku wacdiyo at midba midka kale sida haddaad iska og labawejiilenimada saafi ah. Waa in aan sida dadka Masiixiyiinta ah ogaan khayr badan cid kasta in aynu nahay si fudud aadanaha, aan qaladaad samayso, waxaan u dhaqmaan kibirka is kibriya, aan la tiray si ay arrimaha qaar si fudud by dembi gaar ah iyo wax dhib ah maleh sida ay u adag aan isku dayno, blinders kuwa had iyo jeer waxaa jiri doona, maxaa yeelay, waxaan ka dhacday, dembi leh, aadanuhu. Waa sababtaa in Ilaah waa xaakin. Ma aha fikradaha in macno ah, laakiin Ilaah iyo Ilaah keliya. Si aad u dhaqmaa si kasta oo kale oo si nacayb badan oo weli Naftiinna wac “walaalo” waa laíaanta at ugu fiican.
Marvin, si ay u noqoto qof daacad ah aan u joojin akhriska ku saabsan Jidka bar hoos u posts ah sababtoo ah anigu ma caloosha laga yaabaa sida aad u sii waday in ay daaweyso “walaalayaalow” halka dhan ka dusin in qoryaha aad, noqday iyo aad u badan barar iyo markaas sheegtay in aadan ahaayeen kacsan. Read posts adiga kuu gaar ah, sayidow. Haddii aan idinla raacsan tahay ama aan macno ah ma, waxa arrimaha waa Sidee baad walaalkaa ugu daweeyo. Akhri posts ah, aad ahaayeen by fog (ugu yaraan ilaa aan joojin akhriska ku saabsan hoos u kalabadhka) qofka ugu kacsan on thread this. kuwa kale ayaa kuu sheegi waxay xaq u lahayn in ay kuu sheegaan sida loo tukado ka dibna aad u soo jeedin in Ilaah uusan xitaa ma maqli Salaadda leeyihiin. Kuwaas oo aad u soo jeedin wax caynkaas ah? Adiguna ma waxaad tahay Ilaah. Soo deg oo kaalay carshigaaga off ka dibna la hadal walaalihiin jacayl halkii sugid iyo xanaaq.
Midab waa fool xun oo meel kasta oo si joogto ah aan u aragno. Waan ku necbahay sababo badan oo kala duwan oo ku saabsan heerarka sidaas badan oo kala duwan. Laakiin waxaa jiri doona dawona ma leh cudurkan ilaa ALL dhinac aqoonsadaan in ay jirto cunsuriyad aan loo eegayn midabka maqaarka waa AND in dadka oo dhan ma neceb dadka kale si fudud maxaa yeelay, maqaarka ama dhaqankooda ka duwan oo u gaar ah. Sida isagoo Masiixi ah, anigu waxaan ahay mid aad u murugo leh in la arko sida cunsuriyada ayaa walaalahay iyo gabdhoba dhibta. Anigu waxaan ahay murugo in aan si aad u aragto a “cunsurinimo ah” agagaarka rukun kasta oo xaq u qaadan in dadka waa cunsuri, sababtoo ah ay maqaarka waa cad yahay. Waa in aan aragnaa Masiixiyiinta kale midabyo iyo dhaqamo badan. Jooji qeyliyo “cunsurinimo ah” at kasta oo kale oo si fudud u oran “walaalkiis”. Waxaan arki midab dheeraad ah dhibaato maalin walba sababtoo ah hal dhinac ama oohin kale “cunsurinimo ah” oo aan xitaa garanaya qofka ay wax ka qabtaan. Haddii aad aragto leh Walaal ama Walaashiis simaha hab cunsurinimo ah ka dibna si walba waxaa wax looga qabto iyo in ay kula hadasho qofkaas, si gaar ah. Laakiin joojin qaylinaya in Yeeyi Cunto marka ay jirto in Yeeyi Cunto ma.
Isjeclaanno siduu Masiixuba u jeclaaday kiniisadda. Taasi waa dhan waxaan u baahan nahay in la xasuusto marka ay timaado wax ka qabashada mid ka mid kale.
Xusuuso: Aan by Sight, Aan by Raaxada: Guubaanin waayo, kuwa Kaniisadaha Is-dhexgalka : Front balbalada